လူတို့သည် reboot လုပ်သောအခါအဘယ်အကျိုးကျေးဇူးများရရှိမည်နည်း။ - သင့် ဦး နှောက် Porn တွင်
သတင်းကောင်းကတော့ယခင်အသုံးပြုသူများမှတင်ပြသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်မစောင့်ရှောက်နိုင်တော့ခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့ထဲကကိုယ့်ဤမျှလောက်များစွာသောရှိပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီအောက်မှာကိုးကားများစွာသင်တွေ့လိမ့်မည် အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ, အတွင်းနှင့်အများစုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော ဆောင်းပါးများ, ဤကဏ္ဍများအတွက်:
အကျိုးခံစားခွင့်များ PDF (စာမျက်နှာ ၁၆၀)
ပြန်ဖွင့် Accounts ကို 's Page 3
porn-သွေးဆောင် ED ကနေပြန်လည်နာလန်ထူဖော်ပြတိုတောင်းပုံပြင်များ၏ 8 စာမျက်နှာများ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Nofap 90 ရက်ကြာအစီရင်ခံစာများ
အဆိုပါအခြား Porn စမ်းသပ်မှု - မှတ်ချက်များအပိုင်းကိုဖတ်ပါ
porn ပိုဆိုးငါ၏အလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှု / ယုံကြည်မှု / စိတ်ကျရောဂါအောင်နေသည်
porn ဖြတ်? ပိုပြီးတက်ကြွစိတ်ခံစားမှုအဘို့ပြင်ဆင်ပါ
Porn အပ်သူကားအဘယ်သူယောက်ျားတွေ: လိင်နှင့် Romance တွင် - မှတ်ချက်များအပိုင်းကိုဖတ်ပါ
ဘုံအကြိုးခံစားခှငျ့စာရင်း reddit ချည်
သင် NoFap အလုပ်လုပ်လျှင်သင်သိ ... (ထညျ့ Reddit ချည်)
သင် NOFAP အလုပ်လုပ်သောအခါသင်သိ ... (YBR ချည်)
အဆုံးစွန်အကျိုးကျေးဇူးများချည် (nofap ချည်)
အပေါ်ပြင်ပချည်, ဘလော့ဂ်များနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များ ဒီစာမျက်နှာ
ဤအကြိုးခံစားခှငျ့မြားစှာကိုနောက်ကွယ်မှဖြစ်နိုင်ခြေ neurobiology နားလည်ရန်တွေ့ porn, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့် Mojo: တစ်ဦးကအာရုံကြောသိပ္ပံအမြင်။
၏အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် ပတ်သက်၍ အသုံးပြုသူများ၏အစီရင်ခံစာများ ကို restart
မှတ်ချက်။ ဇီဝကမ္မအပြောင်းအလဲများ (စွဲပြန်လည်ထူထောင်အတွက်မျှော်လင့်မထားတဲ့) ဖြစ်ရပြီ သီးခြားစာမျက်နှာပေါ်တွင်စုဆောင်း.
သင်အနည်းဆုံး ၃ ပတ်ခန့်စီမံနိုင်သည်ဆိုလျှင်ဤအရာအားလုံးသည်မည်မျှအစွမ်းထက်သည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်အတွက်စိတ်ဓာတ်ကျမှုနှင့်ရှင်းလင်းမှုမရှိခြင်းသည်အလွန်သိသာထင်ရှားပြီးသင်သည်အခြားသူတစ် ဦး ကဲ့သို့ခံစားရဖွယ်ရှိသည်။ ကျွန်တော့်ကိုအခြေခံအားဖြင့်မှားတာဘာမှမရှိဘူးလို့မျှော်လင့်ချက်ပေးခဲ့တယ်။ ထိုရှင်းလင်းပြတ်သားမှုနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျမှုကင်းမဲ့မှုအတွေ့အကြုံရှိခြင်းသည်အလွန်အစွမ်းထက်သောအရာဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကျိုးနပ်ပါသည်၊ သို့သော်၎င်းကိုဆွဲယူရန်အချိန်အနည်းငယ်ယူနိုင်သည်။
9 လနီးပါး Streak !!
ငါအသစ်တစ်ခုအဆင့်တွင်ဖြစ်၏ !! နောက်ကျောသောအညစ်အကြေးမှမသွား။
ငါသတိထားမိသောပြောင်းလဲမှုများ - ယုံကြည်မှုပိုမိုမြင့်မားလာခြင်း၊ စွမ်းရည်မြင့်မားသောမျက်လုံးချင်းထိခြင်း၊ အမျိုးသမီးများအားကြည့်ခြင်း၊ စွမ်းအင်ပိုမိုရရှိခြင်း၊
နားဆင်နိုင်ပါတယ်အကျိုးကျေးဇူးများ: (X ကိုအတူမှတ်သားသူများသည်ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကြုံတွေ့ခဲ့ကြဘာလဲ)
စိတ်လှုပ်ရှားမှုများ / အချက်ပြမှုများကိုပိုမိုသိရှိနားလည်ခြင်း (X) - ၎င်းသည်ရှင်းလင်းချက်အချို့ကိုခံထိုက်သည်။ ငါကလူတွေရဲ့စိတ်ခံစားမှု (နှင့်ငါ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်) ကိုပိုကောင်းအောင်၊ ပိုနားလည်အောင်လုပ်နိုင်တယ်၊ ပြီးတော့အချက်ပြမှုနဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုပိုပြီးလွယ်လွယ်ကူကူကောက်ယူနိုင်တယ် (ဒီမှာလူတစ်ယောက်ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုနဲ့ဆွဲဆောင်မှုတွေပါဝင်တယ်) ။ LINK
ကျွန်ုပ်သည်သတင်းအချက်အလက်များကိုပထမဆုံးအကြိမ်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်၎င်းကိုပြည့်စုံသောတိကျမှန်ကန်မှုနှင့်ပြန်လည်မှတ်သားခြင်းဖြစ်သည်။ လူတွေကကျွန်တော့်ကိုစကားပြောတဲ့အခါငါကအပြည့်အဝစေ့စပ်ထားတယ်၊ ငါသူတို့ကိုတက်ကြွစွာနားထောင်နေတယ်။ ငါ reboot မတိုင်ခင်ငါဒီမှာကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါနားထောင်တာကိုသဘောကျတယ်၊ ဘာမှမမှတ်မိတော့ဘူး၊ ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတာတွေးနေမိတယ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခြစ်ရာကနေသင်ပြီးကြိုးစားပြီးငါ့ကိုဒါမှမဟုတ်ဒုတိယဒါမှမဟုတ်တတိယအကြိမ်ပြသဖို့ပြောခြင်းအားဖြင့်သူတို့ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတယ်။ ငါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြတ်သားပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းခံစားရတယ်။ ကဗျာဆန်လွန်းခြင်းမရှိဘဲ၎င်းကိုတိကျစွာဖော်ပြရန်ခက်ခဲသည်၊ သို့သော်သင်ဘ ၀ ၌အဆင်သင့်ရှိနေသည်ဟုခံစားရပြီးသင်ယခင်ကထက် ပို၍ သတိထားမိသည်။
အလုပ်မှာ၊ ငါ့ကိုကြည့်နေတဲ့ငါ့လိဂ်ထဲကနေထွက်ဖို့စဉ်းစားမယ့်မိန်းကလေးတွေရှိတယ်။ ငါသူတို့ကိုပြန်လှည့်ကြည့်နေပြီးမရွေ့ဘဲမနေတတ်တော့ဒါကိုငါပထမအကြိမ်မှန်ကန်စွာသတိပြုမိလို့ပါ။ PMO ကိုရပ်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးချစ်ခြင်းမေတ္တာတိုးပွားလာဖို့နဲ့ငါ့ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာတိုးပွားလာမှုကိုပိုမိုသတိပြုမိလာပြီဆိုတာသတိပြုမိလာပြီ။ အကောင်းဆုံးကတော့၊ ငါမှာလည်းအဲဒီလိုလုပ်ဖို့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်။ အခြားယောက်ျားတွေမှာရှိတာတစ်ခုခုပျောက်နေသလိုငါလည်းအရင်တုန်းကခံစားခဲ့ရတယ် ယုံကြည်မှုရှိပေမယ့်သူတို့ကလိင်ဆက်ဆံတာ၊ ကျွန်ုပ်လက်ချောင်းဖြင့်မထည့်နိုင်သော်လည်းအဖြေရနိုင်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။
ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများကိုရှောင်ကြဉ်ပြီးသူတို့၏အော်ဂဇင်များကိုသူတို့၏မိန်းကလေးများနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမှသာသိရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍များ ဒီလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်ငါဘာကြောင့်ဒီလိုခံစားခဲ့ရတာလဲ၊ အချို့ကိစ္စတွေမှာဒုတိယတန်းစားနိုင်ငံသားလိုမျိုးဖြစ်ရမယ်၊ ငါဟာငါ့ရဲ့လမ်းကိုနှေးကွေးအောင်လုပ်နေပေမယ့်အဓိကလိဂ်တွေထဲရောက်နေပြီဆိုတာကိုရှင်းပြဖို့ဝေးဝေးသွားနိုင်ပါတယ်။ (နေ့ ၅၂) ကျွန်ုပ်၏လိင်တံကိုလက်ဖြင့်မထိသော်လည်း၎င်းသည်သေချာသည်။ ၁၀ မိနစ်ကြာမြဲမြံစွာဆုပ်ကိုင်ထားခဲ့သည်။ နမ်းခြင်း၊ လေးလံသော၊ တိုက်ရိုက်၊ လက်ကိုင်လှုံ့ဆော်ခြင်း၊ ညစ်ပတ်သောစကားပြောဆိုခြင်း၊ ရာခေလ၏မြည်းကိုကြည့်စရာမလိုခြင်း၊ ငါ့ ဦး နှောက်ညှိနှိုင်းလိုက်တာနဲ့ BAM လိုပဲငါဖွင့်လိုက်တယ်။ ဒါဟာသေချာပေါက်အနာဂတ်အတွက်ကောင်းစွာနိမိတ်လက္ခဏာ။
တေးဂီတကပိုကောင်းတယ်၊ အစားအစာကပိုအရသာရှိတယ်၊ နေကတောက်ပနေတယ်
ငါကပိုပြီးအနားယူပါတယ် ယုံယုံကြည်ကြည်။ ငါချောချောမွေ့မွေ့ပြောဆိုပါ။ ကျွန်ုပ်ကြားရသောနားလည်ခြင်းနှင့်ပြသနာများကိုကြာမြင့်စွာကတည်းကကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ တစ်ခါမှမမြင်ဖူးသောအတွေးများနှင့်စကားလုံးများပေါ်ပေါက်လာသည်တော့မဟုတ်။ ငါတကယ့်လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာတယ် ရှင်သန်။ ငါစိတ်ဓာတ်မကျဘူး။ လွန်ခဲ့သော (၁၀) နှစ်တာကာလအတွင်းကျွန်ုပ်၏ခြေဆွံ့သောအရသာခံခြင်းဖြင့်ပြုမိသည်
ညစ်ညမ်းမှုကိုမကြည့်သောအမျိုးသားများသည်သူတို့၏လိင်ဘဝကို“ ပိုမိုကျေနပ်ရောင့်ရဲ” ကြသည်ဟုပြောသောစစ်တမ်းများအကြောင်းကိုကျွန်ုပ်အမြဲကြားခဲ့ရသည်။ အဲဒါဟာဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်လုံးဝမသိခဲ့ဘူး၊ ယခုမူကား, ဒီ Streak အပေါ်ငါခြားနားချက်ကိုမြင်ရပါတယ်။ နေ့ရောညပါလို ဒါဟာ sooo အတွက်နည်းလမ်းများစွာပိုကောင်းတယ်။ စိတ်ကျေနပ်စရာကောင်းတာကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပိုကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကပိုကောင်းတယ်။ ရှင်းပြလို့မရဘူး
porn မပါဘဲလိင် soooo အများကြီးပိုကောင်းသည်။
အေးဆေး introvert -> အေးဆေး extrovert
ခိုင်မာနေပြီးအရှုံးမပေးပါနှင့် PMO သည်သင်၏ပြproblemsနာများကိုစိတ်ရှုပ်ထွေးစေရုံသာမကသင်၏ခံစားချက်များကိုဂရုမစိုက်နိုင်သည့်လွတ်မြောက်မှုတစ်ခုသာဖြစ်သည်။
90 မှနေအိမ်လမ်းပိုင်း။ ယခုအချိန်အထိအကြှနျုပျ၏အတှေ့အကွုံ။
ဒါ့အပြင်နောက်ထပ် ၃ ရက်ထပ်နေ ဦး မှာပါ။ ငါဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအလွန်သေးငယ်သောအများကြီးခံစားခဲ့ရပါတယ်, အစွန်းရောက် horniness ထံမှ flatlining ။ ဒီအသိုင်းအဝိုင်းရှိတယ်ဆိုတာကိုတောင်မသိခင်မှာ nofap ကိုကျွန်တော်စမ်းသပ်ခဲ့ဖူးတယ်၊
တချို့ကလေ့လာတွေ့ရှိချက်: * ငါ့စကားသံကိုအပြီးအပိုင်နက်ရှိုင်းခဲ့ကြပုံရသည်
* ငါခိုလှုံရာ indestructible ပုံရသည်; ဣန္ဒြေ unflappable
* ငါ (ပေါ့ပေါ့ခဲ့ပေမယ့်သူတို့ကဒါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြောင့်ဝဠာပြောနေတာခဲ့တာငါ့အအမှတ်တံဆိပ်ရောင်းချရပ်တန့်) ဆေးလိပ်ဖြတ်
* ငါသည်ငါ့ကောင်အတွက်ချက်ချင်းအပြောင်းအလဲများအနီးကိုမြင်သောအခါ, ဒီ testosterone ဟော်မုန်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ခဲ့ကြပေမည်, ဒါပေမယ့်ငါကြိုးစားနေခြင်းမရှိဘဲပိုပြီးကြွက်သားပေါ်မှာချပြီးခဲ့သည်
* ငါခြုံငုံပိုကောင်းအသွင်အပြင်နှင့် nofap နှင့်အတူပေါင်းစပ်ကြီးမားသောစွမ်းအင်သိုက်အတွက်ရရှိလာတဲ့လအနည်းငယ်အကြာစက်ဘီးစတင်
* ကျွန်ုပ်၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်ကြီးပြီး၊ အလုပ်တွင်ပိုမိုအောင်မြင်ခြင်းကိုခွင့်ပြုသည် (သတိထားမိသည်)
* ငါမိန်းမနည်းနည်းနှင့်စတင်ချိန်းတွေ့ကြပါပြီ (နှစ်ပေါင်းတစ်ကိုယ်ရေဖြစ်ရပြီ); ငါအမျိုးသမီးတွေအများကြီးပိုပြီးလွယ်လွယ်ကူကူချဉ်းကပ်နေပြီးပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းပုံရတယ်။ တကယ်တော့မိန်းမတွေကငါ့ကိုပုံမှန်အတိုင်းပဲလာနေတာ။
ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏အရာ၊ ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်နှင့်ခံစားချက်များကိုလက်ခံနိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ရှင်းလင်းမှုနှင့်သန့်ရှင်းမှုအဆင့်သစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
* ရှည်လျားသောတစ်ကိုယ်တော်ခရီးကိုကြိုတင်ဘွတ်ကင်လုပ်ပြီး၊ ယခုတွင်ငါသည်သူစိမ်းများနှင့်စကားလက်ဆုံပြောဆိုနိုင်ပြီဖြစ်ရာ၎င်းသည်အတိတ်ကာလကကဲ့သို့စိတ်ပျက်စရာမကောင်းပါ။
* ငါအရင်ကလောက်များစွာသော fuck ဆိုတဲ့တွေကိုမပေးခဲ့ဘူး။ cardio လေ့ကျင့်ခန်းတွေ၊ nofap တွေနဲ့ fucks တွေမပေးတာတို့ပေါင်းလိုက်ရင်ငါဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ခံစားခဲ့ရတဲ့ဒဏ်ခံနိုင်မှုအဆင့်သစ်ကိုပေးခဲ့တယ်။ လွန်ခဲ့သောလများအတွင်းအရူးအမူးဖြစ်ခဲ့သည့်အရာအချို့သည်ကျွန်ုပ်၏နိမ့်ကျသောဗားရှင်းသည်လုံးဝယိမ်းယိုင်လိမ့်မည်။
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရရင်၊ ဒီလမ်းကြောင်းက nofap နဲ့စခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကငါ့ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့အရာတွေပေါင်းစပ်ထားတယ်။ ငါ (အထူးသဖြင့် cardio လေ့ကျင့်ခန်း) အတူတူအကြံပြုပါသည်။
သတိပေးတစ်ခုမှာစကားလုံး။ အလွန်အမင်းချိုသောအချိန်ကာလအတွင်း၌၎င်းအတွက်ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်လိင်မဆက်ဆံပါ။ အော်ဂဇင်ကအံ့သြဖွယ်ကောင်းနေသော်လည်း၊
ကျွန်ုပ်သည် (ဤ nofap ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သော) ဤလမ်းကြောင်းပေါ်တွင်အစဉ်အမြဲရှိနေပြီး၎င်းသည်လူများစွာနောက်သို့လိုက်ရန်ဆန္ဒရှိသည်။
အစောပိုင်းကာလများ၌သင်နှင့်အခြားအရာများကိုစတင်လုပ်ဆောင်ပါကထိုတွင်ဆုံတွေ့ပါ - သင့်လက်၌ယခုအချိန်များများရနေပြီးထွက်ခွာသွားရန်တက်ကြွစွာလှုပ်ရှားခြင်း၊ လူများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းသို့မဟုတ်လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်ပျော်ရွှင်ခြင်းတို့ပြုလုပ်ပါ။
Reddit ချည်: အခြားသူမည်သူမဆိုတိုးမြှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုသတိထားမိ?
ငါအမြဲတမ်းအာရုံစူးစိုက်ကိစ္စများရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါ adderall အပေါ်မဟုတ်လျှင်ကောလိပ်ကျောင်းမှာငါအကောင်းမလုပ်ခဲ့ဘူး။ ငါအရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်မဟုတ်လျှင်စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုမပြီးနိုင်ခဲ့ဘူး။ ကျွန်တော့်စိတ်ကအတွေးပေါင်းသန်းတစ်ရာနဲ့ပဲငါကိုလေ့လာပြီးစာဖတ်ဖို့ခက်ခဲစေဖို့တိုက်တွန်းတယ်။ အချိန်မရွေးကျွန်ုပ်၏အာရုံစူးစိုက်မှုမြင့်တက်လာသည်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၆ လတာကာလအတွင်းငါဖတ်ချင်နေပြီဆိုတာမနေ့ကစာအုပ်တစ်အုပ်ပြီးပြီးချင်းပဲ။ ငါသည်လည်းအလုပ်အတွက်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်စီမံကိန်းများပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ပိုကောင်းတဲ့ကံရှိခဲ့ပါတယ်။ အခြားမည်သူမဆိုဒီတွေ့ကြုံခံစား?
အသက် ၅၀ - နိုဖပ်သည်ကျွန်ုပ်၏လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှု၊ မျက်နှာနီရဲခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့်အပျက်သဘောအတွေးများကိုကုသပေးခဲ့သည်။
ကျွန်တော့်အသံကပိုမိုနက်ရှိုင်းလာပြီးအသက် ၅၀ ရှိပါပြီ။ ငါငယ်ငယ်တုန်းကလူတွေက“ မင်းရဲ့အသံဘယ်တော့မှကွဲတော့မှာလဲ” တဲ့။ ငါဆိုလျှင်လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်လောက်ကကျွန်ုပ်ရနိုင်သည့်မှတ်စုများကိုမရနိုင်တော့ပါ။
ဒါကြောင့်လည်းကျွန်မရဲ့လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုကျော်လွှားနိုင်ခဲ့တာနှစ်နှစ်လောက်ကြာခဲ့ပြီ။ ငါပြောတာကလူတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမလုံလောက်ဘူးလို့ခံစားရတယ်၊ ငါသိတဲ့လူတွေကိုတောင်ချစ်တယ်။ စကားမပြောဘဲထိ မိ၍ လဲခြင်း၊ ဒါမှမဟုတ်မိုက်မဲသောအရာတစ်ခုခုပြောပြီးတစ်ခြားသောနေ့များအတွက်နောင်တရနေခြင်း။ အဆိုပါအရှက်ကနေအနီရောင်ရဲ။ nofap နဲ့ကပ်ပြီးပြန်မနေပါနဲ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်မျှော်လင့်နေတဲ့အရာကစကားပြောဆိုမှုများကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းနှင့်အခြားလူများကသင်၏အကြည့်ကိုကြည့်ရှုခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများသည်၎င်းကိုနှစ်သက်ကြသည်။ ယောက်ျားသိပ်မများဘူး။
ငါလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုကနေခံစားခဲ့ရခြင်းနှင့်ငါ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူဘဝ၏အားလုံး blush ပါပြီ။ (အသက် ၅၀) PMO ကိုရပ်တန့်ခြင်း၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်အခြားပြproblemsနာများစွာနှင့်မျက်နှာမပျက်ခြင်းသည်ယခုအခါသုညဖြစ်နေသည်။ ဒါတိုက်ဆိုင်မှုမဟုတ်ပါဘူး။
ရက်ပေါင်း 90 အဘယ်သူမျှမ fap
ကောင်လေးတစ်ယောက်ကငါဟာအသက် ၁၈ နှစ်မှာလူတစ်ယောက်ကိုပြောင်းလဲပြီးခက်ခဲတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုပြီးအောင်လုပ်ခဲ့တယ်။ တိုက်တွန်းမှုတိုင်းကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးငါ့ရဲ့ဘဝဟာငါ့အသားအရေကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေပြီးအရင်ကထက်ပိုမိုကောင်းမွန်လာတယ်။ ငါပိုကောင်းတဲ့လူတစ် ဦး နှင့်တူခံစားရတယ်နှင့်အမျိုးသမီးများပိုမိုတန်ဖိုးထားရှိသည်နှင့်ငါသည်လည်း haha ​​မင်းသမီးနှင့်အတူပိုပြီးကံကောင်းပါစေ။
ဒီဟာကကျွန်တော့်ဘဝပုံစံပဲ။ အနည်းဆုံးရက် ၃၀ ကြိုးစားပြီးလူတိုင်းအားသင့်အားကူညီလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်သည်သင်တို့အားလုံးကို ချစ်၍ ရက် ၉၀ အားတက်ရန်သင်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်
porn ဟာစိတ်ကူးစိတ်သန်းဦးသေဆုံးနှင့်စာနာမှု, နှုတ်ကျွမ်းကျင်မှု, အတွေးအခေါ်များ, ဟာသစသည်တို့ကိုတဆင့်
ငါစိတ်ကူးစိတ်သန်းပေါ်မှာညစ်ညမ်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်တစ်ဦးသီအိုရီရှိသည်။ ငါ / ငါနောက်ကျ porn တစ်တစ်တန်စောင့်ကြည့်ကြရသောအခါ vs horny ဖြစ်ကြောင်းကိုရှောင်ကြဉ်လာသောအခါငါသည်ငါ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းများ၏အကွာအဝေးနှင့်အာရုံငါးပါးတစ်ဦးကာလတုန်းကမရခဲ့ဘူးခြားနားချက်ကိုသတိပြုမိ။ ငါ abstinence တဲ့ကာလပြီးနောက်ဘယ်နေရာမှာမဆို porn သို့မဟုတ်အမျိုးသမီးများကိုစောင့်ကြည့်, ငါစိတ်ကူးနိုင်ပါတယ် / ခံစားရထည်ထိ၏ခံစားချက်, ဒါမှမဟုတ်အရေပြား, သို့မဟုတ်ဆံပင်ဒါမှမဟုတ်အသံပြတ်သား, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့အလွန်ဖြစ်ခြင်းများနှင့်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ဖြစ်ကြောင်း, အရာအားလုံးပိုမိုနီးကပ်စွာဖြစ်ပါသည်သောအခါဤရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာ နှင့်ပိုပြီးစစ်မှန်တဲ့။ ခဏစောင့်ကြည့် porn ရှိခြင်းတဲ့အခါမှာ 10 မိလို့ပြော, ဤခံစားမှုချမ်းသာအာရုံမှိုင်း, သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။
ငါ etcetera, ဒီငါထင်လမ်းကိုအပေါ်တစ်ဦးသိသာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ခံစားရတယ်နဲ့တခြားစာနာပေးသောစိတ်ကူးစိတ်သန်းများပုံစံမျိုးစုံ, ချစ်ခြင်း, ဟာသ။ တစ်လမ်းအတွက်ငါကထိုကဲ့သို့သော၏ depraved အခါကစိတ်ကိုများနှင့်စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကြီးစွန်းတိုင်အောင်လိုက်မှခန္ဓာကိုယ်ကိုနှိုးဆွဘို့အများအားဖြင့်အကျိုးရှိကြောင်းကိုတစ်ဦးဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ရှုထောင့်ကနေစိတ်ကူးနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်ဤအနည်းငယ်ဝေးလွန်းမရယူဖြစ်နိုင်သည်။ ၏သင်တန်း, အကြောင်းမရှိလည်းညစ်ညမ်းရှောင်၏လုပ်ရပ်ကနေရရှိလာတဲ့တိုးမြှင့သုခချမ်းသာနှင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင်သည်မည်သည့်အလားတူအကျိုးသက်ရောက်မှုများကြုံတွေ့ခံစားခဲ့ကြလျှင်သင်အထက်တွင်ပြင်အနတ္တသို့မဟုတ်မထင်လျှင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ post ၏ရည်ရွယ်ချက်ထွက်ရှာတွေ့သည်။ ငါ့ထံသို့ကြောင့်အများကြီးရှင်းပြမယ်နှင့်အစဉ်အမြဲဒီ shit ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ကြီးမားတဲ့အကြောင်းပြချက်ပါလိမ့်မယ်။
တိုတောင်းသောခုနှစ်တွင်: porn များအတွက်ရှောင်သောအခါ, ငါ၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းပြင်းထန်သောနှင့်အစစ်အမှန်ဖြစ်လာသည်။ ဒီအိုင်ဒီယာရှိခြင်း, စာနာမှု၏တိုးမြှင့်ခံစားခကျြဝမျးမွောကျခွငျး, စာကြောင်းများရေးဆွဲရာတွင်လွယ်ကူချိတ်ဆက်ကားအဘယ်သို့များကဲ့သို့ခံစားမိ, ဟာသစသည်တို့ကို
ငါထင်တာကတော့လူအများစုအကြိုက်ဆုံးစူပါပါဝါဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှု၊ ပြည့်စုံမှုဒါမှမဟုတ်လူမှုရေးစိတ် ၀ င်စားမှုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မနက်တိုင်းမှာအိပ်မောကျနေစရာမလိုပါဘူး။ အဘယ်သူမျှမ fap မတိုင်မီငါ wank ရှိခြင်းအိပ်ပျော်ခြင်းပိုမိုလွယ်ကူစေသည်အလားတူမုသာစကားကိုငါကြား၏, ဒါပေမယ့်ငါ 6-7 နာရီအိပ်ပြီးနောက်အိပ်မောကျနိုးထခြင်းနှင့်အနီရောင်နွားထီးတစ်ဘူးနှင့်အတူတက္ကသိုလ်ကားမောင်းပုံမှန်ဖြစ်ခဲ့သည်။
အခုတော့တူညီတဲ့အိပ်စက်ခြင်းနဲ့အတူ (Tour de France ကြောင့်နည်းနည်းလေးမှမဟုတ်ရင်) ငါတက္ကသိုလ်တက်နေစဉ်တစ်နေ့လုံးနိုးထရင်းပျော်ရွှင်မှုများစွာရနေပြီ။ တစ်နေ့ကိုအချိုရည်ဘူးခွံ ၃ ဘူးကိုမချိုးဘဲငါအသီးပြန်စားနေပြီ။ တစ်နေ့ပန်းသီးနှင့်ငှက်ပျောများသည်တစ်နေ့တာအတွက်လုံလောက်သောဂလူးကို့စ်ဖြစ်သည်။ ငါ့ကိုမမှားပါစေနဲ့။ ယုံကြည်မှုလည်းပိုတိုးလာတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါပိုပျော်လာပြီးအခုမိန်းကလေးတွေနဲ့ပရောပရည်နည်းနည်းကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့အိပ်ပျော်သွားတယ်။
၁၁ ရက်သာကြာပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်အခြားသူနှင့်တူသည်။ ငါကပိုပြီးစကားပြောနှင့်လူမှုရေး setting တွင်သတိထားမိပါတယ်။ အလုပ်မှာ၊ ငါကအရာရာကိုထိပ်ဆုံးမှာပဲ။ ငါကြည့်နေတဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်တာဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ခဲ့ပြီ။ ဒီဟာကငါတကယ်တကယ်ရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်။ (post ကိုမှလင့်ခ်)
အသက်တာ၏အရည်အသွေး NoFap အပေါ်💯ဖြစ်ပါသည်
PMO တစ်ဦးဘဝထက်မပေးအမြဲ 100%, ဒါပေမယ့် 100% ကောင်း၏။ ပြည်သူ့ပိုကောင်းသငျသညျဆက်စပ်။ သင်အမြဲလက်ျာဘက်အရာဟူမူကားပါတယ်။ ငါကပိုမျှတခံစားရသည်။ ရိုးသားဖို့, သင်အချို့ကိုဒီထူးဆန်းတဲ့ရှာတွေ့လိမ့်မယ်, ငါ fapping တယ်သောအခါငါမျိုးငါတစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်လူရှုပ်လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ဖြစ်ခြင်းပေါ့ငါ့ကိုယ်ပိုင်စိတ်တွင်ငါသိ၏။ ငါ NoFap အပေါ်င့်သောအခါ, ငါပိုကောင်းတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကုသရန်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်အခြားသူများကိုပြုမူဆက်ဆံလေ့ရှိပါတယ်။
ငါကိုယ်တိုင်ရှာဖွေတွေ့ရှိသောနောက်ထပ်အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခု - PMO ပြီးနောက်တစ်နေ့တွင်ကျွန်ုပ် ဦး နှောက်ကို shit အိုးထဲ၌ကျွန်ုပ်ချက်ပြုတ်နေသည်ဟုခံစားရသည်။ ငါအိပ်နေတဲ့ဆေးတွေ - ကင်လုပ်ခိုင်းလိုသောက်ပြီးနောက် - ငါ PMO တစ်ညပြီးတစ်နေ့အတူတူခံစားရတယ်။ NoFap တွင်၊ ကျွန်ုပ်သည်အိပ်မပျော်လျှင်ပင်၊ ကျွန်ုပ်သည်နောက်တစ်နေ့တွင်ထက်မြက်နေဆဲဖြစ်သည်။
ငါစောင့်ရှောက်အလင်းတန်းများဖြာမှာအကောင်းဆုံးမဟုတ်ဘူး, ဒါပေမယ့်ငါကဒီအကြောင်းကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိပေးထားရန်လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါဟာကအနည်းဆုံးအကြှနျုပျအဘို့, ရှိသမျှတိုးတက်မှုမဟုတ်ဘဲစုံလင်ခြင်းအကြောင်းကိုပါပဲ။
1) သည် သာ. ကောင်း၏အလုပ်အလေ့အထများ
5) က) အများဆုံးမြင်သာထင်သာ (နှင့်မမျှော်လင့်ဘဲအကျိုးရှိငါ့ဆံပင်ပြန်ဖြည့်ဆည်းစတင်ခဲ့သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ သုံးလအကြာငါသည်ငါ၏ဦးခေါင်း၏နောက်ကျောအပေါ်အလွန်သိသာပြောင်သောအစက်အပြောက်တီထွင်ခဲ့ကြောင်းနှင့်ငါ၏အ hairline ထွက် thinning နှင့်ရွေ့လျားခဲ့သည် လျင်မြန်စွာ။ ဒါ့အပြင်ကျွန်မဆံပင်ကိုဖြတ်ပြီးလက်ချောင်းတိုင်းမှာဆံပင် ၁၀-၂၀ မျှထွက်လာမှာပါ။ အခုတော့ပြောင်ပြောင်တဲ့နေရာကိုတောင်မမြင်ရသေးဘူး၊ ဆံပင်ဖြူထိပ်ပြန်ကျလာတဲ့ဆံပင်ဖြူအမွေးလေးနည်းနည်းလေးကိုတွေ့နေရတယ်။ နောက်တဖန်ပြိုလဲထွက်ဆံပင်။ အလို။ https://www.yourbrainonporn.com/rebooting-accounts/rebooting-accounts-page-10/age-20-several-benefits-but-most-importantly-i-discovered-the-root-problem/
ဒီ NoFap shit ရူးဖြစ်ပါတယ်။
ငါရက်ပေါင်း ၈၀ လောက်သန့်ရှင်းနေတယ် NoFap မတိုင်မီကျွန်ုပ်လုံးဝလျစ်လျူရှုခံခဲ့ရသည့်နေရာတိုင်း၌ကျွန်ုပ်သည်ပါတီပွဲ၏ဘဝနှင့်တူသည်။
Edit: တုံ့ပြန်မှုများနှင့် upvotes အားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါအချက်တစ်ခုလုပ်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်ခြင်းခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုမှန်ကန်ဖြစ်ကြသည်။
PMO မှရှောင်ကြဉ်ခြင်း (လွန်ခဲ့သောတစ်ပတ်ကျော်က P နှင့်အနည်းငယ်စာတိုခဲ့သော်လည်း) တစ်လမပြည့်မီကျွန်ုပ်၏ဘဝကိုအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ အခုတော့ငါ့ ဦး နှောက်ဟာဟန်ချက်ညီနေပြီဆိုတာငါယုံကြည်မှုနဲ့ပြည့်နေပြီ။ ငါလွင့်မျောနေမှာမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဆင်ပြေပါတယ် ငါလူတို့နှင့်အတူအပြန်အလှန်ချစ်ကြတယ်။ ငါသည်ငါ့ခြေထောက်ပေါ်လျင်မြန်စွာထင်ပါတယ်။ ငါရယ်တယ်! ဒေါ်လာ ၂၀၀ ကျော် ၀ တ်စားဆင်ယင်အင်္ကျီနှင့်ကောင်းတဲ့ဘောင်းဘီတိုတွေ ၀ ယ်ခဲ့တယ်။ ဒါကငါ့ရဲ့ပုံမှန်ဗီရိုဖြစ်လိမ့်မည်၊ သတ္တုတီရှပ်များနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းဘောင်းဘီတိုများအစားထိုးမည်။ မိန်းကလေးတွေကငါ့ကိုကြည့်နေတယ်။ ပူပြင်းတဲ့မိန်းကလေးငယ်များကနှစ်ခါယူကြပြီ။ မိန်းကလေးများသည်ကျွန်ုပ်၏ ဦး တည်ရာကိုကြည့်နေသည်၊ သူတို့၏ဆံပင်ကိုလှည့်စားနေသည်။
၎င်းသည်အထက်တန်းကျောင်းကတည်းကကျွန်ုပ်မကြုံတွေ့ခဲ့ရသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတင်းမာမှုလောကနှင့်တူသည်။ ငါဒီနေရာမှာရေးရင်းဒီမှာထိုင်နေတုန်းသူမရဲ့ဆံပင်တွေလှည့်ပတ်နေပြီးငါ့ ဦး တည်ရာကိုလှည့်ပတ်ကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော့်ဘေးမှာထိုင်နေတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်။ ငါသူမကိုသူမ၏ချစ်စရာကောင်းသော, သေးငယ်တဲ့လက်ကိုသူမ၏စီးဆင်းမှောင်မိုက်ဆံပင်မှတဆင့် run စဉ်းစားရုံနှိုးဆော်ခြင်းလာပြီပေါ့။ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကကျွန်ုပ်မိတ်ဆွေတစ်ယောက်မှသတ်မှတ်ထားသောမျက်မမြင်ရက်ကိုသွားခဲ့သည်။ ချစ်စရာမိန်းကလေး၊ တကယ်ကိုအေးမြပေမဲ့ငါ့အမျိုးအစားမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့်တရား ၀ င်“ ထွက်ရှိ” ပြန်တာကောင်းတယ်။
ငါကလူတွေကိုဘယ်လိုတွေ့ရလဲဆိုတာကိုဂရုစိုက်ခြင်းအားဖြင့်နေ့ကပိုပြီး“ ရင့်ကျက်ခြင်း” ဖြစ်လာတယ်။ မိန်းကလေးတွေကငါသွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာရှိတယ်။ နေရာတိုင်းမှာအခွင့်အလမ်းတွေ။ အခွင့်အလမ်းအားဖြင့်ငါမိန်းကလေးများနှင့်စကားပြောဖို့အခွင့်အလမ်းကိုဆိုလိုတာမသာ; သူမနောက်ကိုလှည့်ကြည့်နေတာလား၊ ကြည့်နေတာလား၊ ကြည့်ရတာသူ့ကိုယ်သူယုံကြည်မှုရှိဖို့လုပ်ဖို့အခွင့်အရေးတွေလည်းငါဆိုလိုတယ်။ သူမမဟုတ်ဘူးဆိုလျှင်အိုကေပါတယ်။ သူမသည်ဆိုးသောနေ့တစ်နေ့ရှိကောင်းရှိလိမ့်မည်၊ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၎င်းသည်လုံးဝကောင်းပါသည်။ လွန်ခဲ့တဲ့အပတ်တုန်းကငါ ၁၀ စက္ကန့်လောက် porn အကြောင်းစဉ်းစားမိတယ်။ ကျွန်ုပ်၏အိမ်အင်တာနက်ကိုပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပြီးစုံစမ်းခြင်းကိုလုံးဝမခံစားရပါ။
ငါသာအစစ်အမှန်မိန်းကလေးများစဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ဘယ်လိုကြည့်၊ အနံ့၊ ကျွန်တော့်ကျပန်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် (နောက်ဆုံး ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုပါ) သည်ကျွန်ုပ်ကိုဘဝကိုထိတ်လန့်စေခဲ့သည်။ ငါအစစ်အမှန်မိန်းကလေးများ / မိန်းမများချင်တယ်။ မုသားမပြော - ငါကငယ်ရွယ်တဲ့အရာ (19-20) နဲ့ရချင်တယ်။ ကျွန်ုပ်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနာဂတ်သည်လွန်ခဲ့သော ၃-၄ ပတ်ကမျှသာဖြစ်ခဲ့သည့်အတိုင်းအတိုင်းထက်အလွန် ပို၍ အလားအလာကောင်းနေသည်။
ကျွန်တော့်မှာ ED ရှိတယ်လို့ဘယ်တော့မှမထင်ခဲ့ဘူး။ ကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့လိင်ဆက်ဆံခဲ့တယ်။ ကိုယ့်ဘဝရဲ့ညစ်ညမ်းမှုနဲ့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုပဲလိုချင်ခဲ့တယ်။ ကောင်လေး။ ငါမှားသွားပြီ ကျွန်ုပ်ပြန်လည်နာလန်ထူလာသည့်အခါကျွန်ုပ်၏စိုက်ထူမှုများသည်ပိုမိုကြီးမားလာသည်။ ငါသည်လည်းအော်ဂဇင်ပြီးနောက်တောင်မှစိုက်ထူနေပြီးကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုအချိန်ကုန်ခံပြီးထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်ဟုထင်သည်။ ငါ့နံနက်သစ်သားကပိုကြီးပြီးပြည့်ပြည့်ဝဝပြည့်စုံသည်။ မနက်တိုင်းမနက်ခင်းတိုင်းရယ်၊ ရယ်မောလိုက်သည်၊ ယခုတွင်ငါ၌ ED ရှိခဲ့ကြောင်းနှင့်၎င်းကိုသဘောပေါက်ရန်စွဲလမ်းမှုအလွန်စွဲလမ်းခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်အသက် ၅၀ ရှိကြောင်းသတိရပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏အသက်နှင့်သန့်ရှင်းသောနေထိုင်မှုအတွက်တော်တော်ကောင်းသောပုံသဏ္ဌာန်ရှိသည်။
[ရာပေါင်းများစွာကိုပိုမို ED ပြန်လည်နာလန်ထူပုံပြင်များ]
ငါ nofap Streak ပေါ်မှာငါအခါတိုင်းငါတစ် ဦး မတရားလျော့နည်းဖြစ်လာသည်
ငါမိန်းမကိုမကြည့်ပဲလိင်အကြောင်းစဉ်းစားရုံဖြင့်မကြည့်ပါ။ ငါ့ကိုစကားပြောသောမိန်းကလေးတိုင်းကိုလိမ်ရန်ကြံစည်ခြင်းမရှိတော့ပါ။ ငါသူတို့ကိုအရာဝတ္ထုထက်ပိုပြီးသက်ရှိဖြစ်ခြင်းကိုကြည့်ပါ။ ငါအချို့ယောက်ျားတွေပြန်ပြောပြနိုင်မျှော်လင့်ပါတယ်
ဒီကြီးမားတဲ့ပြန်ကြားချက်နှင့်တုန့်ပြန်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မင်းရဲ့မှတ်ချက်များနဲ့ပြန်ကြားချက်တွေကိုဖတ်ပြီးနောက်ငါငိုသလိုခံစားရတယ်။ ကျွန်ုပ်နှင့်အားပေးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါဒီလိုမျိုးတင်ရင်ငါရယ်စရာကောင်းလိမ့်မယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်ဒါပေမယ့်ငါနင်ကိုမေ့လိုက်တာနင် nofap subreddit ဆိုတာကိုအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုထက်ပိုပြီးသူ့ညီရင်းအစ်ကိုကကူညီပေးတယ်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
တိုးတက်မပါစောင့်ကြည့် porn နှင့်ဆက်ဆံရေး 50 ရက်ပေါင်း
ဒါဟာစောင့်ကြည့် porn တက်ပေးခြင်းအခြားလူများထံသို့ကြားဆက်ဆံရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာနိုင်သည်ဟုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီထက်အကြောက်လွန်ရောဂါရယူခြင်းကြာကြာငါ၏အ Streak တတ်၏။ ကြောင်းပုံမှန်လား?
ဒါဟာတကယ့်ကိုထူးဆန်းနေပုံရတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါတနေ့တခါနှစ်ခါလောက်လုပ်ဖူးတဲ့အချိန်မှာငါအရမ်းကြောက်စရာကောင်းတယ်။ ငါအပြင်မှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာလူတွေကငါ့ကိုကြည့်နေသလိုခံစားရတယ်။ ပြီးတော့အိပ်ပျော်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါရေခဲသေတ္တာကိုပိတ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်အခန်းတချို့မှာမီးထွန်းဖို့မေ့နေတာလားလို့ငါမကြာခဏခံစားမိသလိုခံစားရတယ်။
ငါကြာတော့ငါ့ခံစားချက်နည်းလေလေ။ ငါဖော်ပြခဲ့တဲ့ပထမ ဦး ဆုံးအပြုသဘောဆောင်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်။ အခုဆိုရင်ငါဟာမိန်းကလေးတွေကငါ့ကိုကြည့်နေသလိုခံစားရတယ်။ ငါနာရီများရလာသည်ဟုခံစားရသောအခါငါပြုံးလိုက်ပြီး ၁၀၀% နီးပါးသောသူငယ်ချင်းကပြန်ပြုံးပြသည်။
ကျွန်မအကြောင်းကိုဆယ်စုနှစ်တစ်ခုများအတွက်စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများနှင့်အတူခံစားခဲ့ကြရသည်။ ပြင်းထန်သောစိုးရိမ်သောက, ပြင်းထန် ocd, စိတ်ကျရောဂါ, ဦးနှောက်မြူနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုပြဿနာများကို။ တကယ်တော့ပထမဦးဆုံးကျွန်မအကြိမ်ပေါင်းများစွာတစ်ရက်နေ့စဉ် PMOing စတင်မကွာပြီးနောက်အဓိပ်ပာယျသောငါ၏ပထမဦးဆုံးလက်ပ်တော့, တယ်မကွာပြီးနောက်, ငါ 18 အခါစိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများကြုံနေရစတင်ခဲ့သည်။ ဒီအလုနီးပါးဆယ်စုနှစ်တစ်ခုများအတွက်အကြီးအကျယ်ပေါ်သွား၏။
ကျွန်ုပ်သည် ၁၀ ရက်ကြာလိင်မှုကိစ္စနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများမပြုလုပ်ပါ။ လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်တွင် ဦး နှောက်မှေးမှိန်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်၏အာရုံစူးစိုက်မှုမှာများစွာကောင်းမွန်ပြီးစိုးရိမ်စိတ်အနည်းငယ်သာရှိခဲ့သည်။ ဒီညငါစနူကာကစားနေပြီးစိုးရိမ်မှုသိပ်မရှိဘူး။ ငါနောက်မှစူပါမားကတ်သို့သွား။ နေဆဲစိုးရိမ်ပူပန်မှုအနည်းငယ်ရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်များသောအားဖြင့်ပြင်းထန်သော ဦး နှောက်မှေးမှိန်ခြင်း၊ အာရုံစူးစိုက်။ မရသောပြင်းထန်သောစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း၊ အထူးသဖြင့်အခြားသူများပတ် ၀ န်းကျင်ရှိသူဖြစ်ကြောင်းနားလည်ရန်လိုအပ်သည်။ ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးရက်အနည်းငယ်ငါ၌ဤအရာမရှိခဲ့ဘူး။
ငါတကယ်မပါ porn သို့မဟုတ်အတုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမြင်နေ၏နောက်ဆုံး 10 ရက်ပေါင်းငါ၏အစိတ်ကျန်းမာရေး၌ငါ့ကြီးမားသောတိုးတက်မှုနှင့်အတူလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ဘယ်လောက်အံ့သြနေပါတယ်။ တကယ်တော့ရိုးရိုးလေးငါ့အသက်ကိုဒီထွက်လုပ်ကြံသောအားဖြင့်ငါ့ကိုငါ့အလိုရှိသမျှစိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများပျောက်ကင်းအောင်ကုသစေမည်။
ကန့်ကွက်ခြင်းနှင့်တေးဂီတနှင့်စပ်လျဉ်း။ - ကျွန်ုပ်၏လက်များသည်ပိုမိုလွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားနိုင်ပြီးဂစ်တာတီးသောအခါတွင်သူတို့သည် ပို၍ တင်းမာ။ မတည်ငြိမ်ပါ။ ငါအချို့ချိန်ခွင်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်မနှင့်အတူအများကြီးပိုကောင်းကြံဆတီထွင်နိုင်။ ငါဂစ်တာပုံဆွဲခြင်းနှင့်ကစားသောအခါငါတီထွင်ဖန်တီးမှုလည်းငါ့ထံမှထွက်လာသည်။ ကျွန်ုပ်သည်သီချင်းများကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာလေ့လာသည်။ ရိုးသားတဲ့ညစ်ညမ်းမှုဆိုတာကျွန်တော့်အတွက်အများကြီးအကျိုးမရှိဘူး။ ငါစိတ်လှုပ်ရှားစရာမကောင်းဘူးဆိုတာသိလိုက်ပြီ။ ငါချော်တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်အများစုအတွက်တော့တပ်မက်မှုကငါစခဲ့တဲ့အချိန်ကမဆိုးဘူး။ ငါတကယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့မှုလိုအပ်တယ်ကတည်းကငါ့အဘို့ပိုပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထင်ပါတယ်; ဒါကငါ့ကိုကျေနပ်စေတဲ့အရာတစ်ခု ငါလိင်အကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူး၊ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဒါမှမဟုတ်အပြစ်မဲ့တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုကိုင်ရုံပဲ။
တစ်ခါက nofap ပေါ်မှာရက် ၃၀ လုပ်ခဲ့တယ်။ ကောင်းပြီ၊ ရက်သတ္တနှစ်ပတ်ခွဲလောက်ရောက်တော့လက်သည်းကိုက်တာလုံးဝရပ်သွားတယ်။ ငါအလေ့အထအဘို့အသုညမဖြစ်မနေရှိခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တော့ငါဟာပုံမှန်လူတွေလိုလက်သည်းညှပ်ကိုသုံးပြီးငါ့လက်သည်းတွေကအရမ်းမြန်တယ်၊ ဒါကြောင့်သူတို့ကိုပုံမှန်ညှပ်နေပြီးသူတို့ကြည့်ကောင်းတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါ nofap မအောင်မြင်ပြီးတစ်ချိန်လုံးဂရုစိုက်မိတဲ့အခါလက်သည်းကိုက်တာမြန်သွားတယ်။ LINK
Nofap သို့တစ်ဦးကလကဆိုးဆိုးရွားရွား, စည်းချက်ရတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုမြင်တော်မူ၏။ တကယ်တော့ကြားဝင်။
Long ကပုံပြင်တိုတောင်းသောသူကောင်လေးလိုက်ခဲ့သူကသူနှင့်အတူချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအား။ သူ့အင်္ကျီဆွဲကာကားကိုဆန့်ကျင်သူ့ကိုပေါ်တက် pounding စတင်မျက်နှာနှင့်ဦးခေါင်း၌သူ့ကိုရိုက်။ အဆိုပါကျူးကျော်ခဲ့တာ (ငါပုံကြီးချဲ့ကျော်မှချင် dont) ပေမယ့်ကြွက်သားလက်နက်နှင့်ငါ့ကိုထက်ပိုကြီးခဲ့သည်။ ထိုအ btw ငါ scrawny ဖြစ်၏။
ငါရပ်လိုက်ပြီးမြန်မြန်လျှောက်သွားတယ် (မုသာမသုံးပါနဲ့ကျွန်မဘေးကင်းရေးအတွက်အနည်းငယ်စိတ်ပူခဲ့တယ်၊ ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာမသိခဲ့ဘူး) ပြန်မတိုက်ခိုက်တဲ့ကောင်လေးကိုလာကြတယ်ဆိုတဲ့ကောင်လေးငါဟေး RELAX လုပ်ပြီးပြီလို့ပြောတယ် ငါလက်ျာဘက်သူတို့မှတက်လမ်းလျှောက်သူ့ကိုများ၏ရှေ့မှောက်၌ငါ့လက်မောင်းကိုတင်။ ငါ့လက်ကိုချီ။ ငါဆက်လက်ဤခွင့်မပြုကြောင်းသူ့ကိုသိစေရန်သူ့ကိုဆန့်ကျင်ငါ့လက်မောင်းကိုတွန်း။ သူကသူ့ချေမှုန်းရေးကိုရပ်တန့်သွားပြီးသူမရူးသွားအောင်အော်ဟစ်ခဲ့တယ်။ သူ့ဆီပြန်လာပြီး“ ဟေ့အင်း၊ မင်းအနိုင်ရပြီ၊ မင်းလောက်အောင်လုံတယ်” လို့အခိုင်အမာပြောခဲ့တယ်။ သူမထွက်ခွာမီငါမထွက်ခဲ့ဘူး
ငါညတိုင်းတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အခါသို့မဟုတ်တစ်နေ့တွင်အရက်သောက်သုံးခုတွင်ဤအရာများထဲမှတစ်ခုရှိခဲ့လျှင်ကျွန်ုပ်သည် shit ကိုလုပ်နိုင်မည့်နည်းလမ်းမရှိတော့၊ ကျွန်ုပ်သည်အားနည်းနေသူ၊ ငါ၏အ fap နေ့ရက်ကာလ၌မည်သို့ပင်ဖြစ်စေငါရပ်တန့်ရန်ဘာမှလုပ်ဖို့လုံလောက်တဲ့ခြိမ်းခြောက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ငါထို့နောက်ဘာမှမလုပ်ဘူးသောကြောင့်တစ် ဦး shit ဦး ခေါင်းနှင့် pussy ပိုခံစားရတယ်လိမ့်မယ်။
သို့သော်ဤအချိန်ကအလုပ်များလမ်းပေါ်မှာငါကြားဝင်သူတစ်ဦးတည်းသာဖြစ်ခဲ့သည်မြင်၏အသီးအသီးထဲကဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါဘာမှမပြုသောအမှုကြပြီမဟုတ်သူဖွယ်ရှိပိုဆိုးရိုက်နှက်တယ်ရှိသည်ဟုမယ်လို့, ငါသည်ကိုယ်အကြောင်းကိုခံစားခဲ့ရဘယ်လောက်ပိုကောင်းသင်ပြောပြအတွက်မရှိမဖြစ်။
[တုံ့ပြန်မှု] မနေ့ကငါထပ်တူအခြေအနေမျိုးကြုံခဲ့တယ်။ ငါရုံးအပြင်ဘက်ရှိဓာတ်ဆီဆိုင်ကနေကော်ဖီသောက်လေ့ရှိတယ်။ စံချိန်တင်ဘို့, ငါ scrawny မဟုတ်ဘဲတည်ဆောက်ပေမယ့်ရှက်တယ်။ လူတစ်ယောက်ကအပြင်မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ကလေးတွေထဲကတစ်ယောက်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆုပ်ကိုင်ထားတာငါတွေ့လိုက်ရတယ် ငါချက်ချင်းငါ့ကော်ဖီနှင့်ပရိုတိန်းဘား (ဦး စားပေး) ဆှဲနှင့်သူ၏အကူအညီများသို့ပွေးလေ၏။ ဒေါသထွက်နေတဲ့လူကငါ့ကိုလာကြည့်နေတယ်၊ ​​သူက Audi ကိုအမြန်ဆုံးအမြန်မောင်းပြီးမောင်းသွားတယ်။ ကလေးကအဆင်ပြေသလားမေးကြည့်တယ်။ သူကလက်သီးဆတ်ထိုးပေးပြီးအလုပ်ပြန်လုပ်ခဲ့တယ်။
အရင်တုန်းကဒီလိုမျိုးလုပ်ဖူးတာမျိုးကျွန်တော်မမှတ်မိတော့ဘူး၊ ဒီနေ့ဓာတ်ဆီဆိုင်ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ကငါ့ကိုကော်ဖီအခမဲ့ပေးလိုက်တယ်။ အနိုင်ရတကယ်ပဲ။ permalink
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ပဲစကားပြောနေတယ်။ သူကညစ်ညမ်းတဲ့စွဲလမ်းသူမဟုတ်ပေမယ့်သူက porn ကိုကြည့်ခဲ့တယ်။ သူကအော်ဂဇင်ကိုအတန်ကြာရှောင်ရန်မလိုသော်လည်းသူသည်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုအနေနှင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူမ၏ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုရှုထောင့်မှသူ၏အတွေ့အကြုံကိုကြားရခြင်းသည်စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သည်။ သူကသူဟာစူပါအာရုံစိုက်မှုကိုခံစားပြီးသူလိုချင်တဲ့သူနဲ့ပိုတူတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ သူသည်ခေါင်းဆောင်မှုနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုစွမ်းရည်များလိုအပ်သောစိတ်ဖိစီးမှုမြန်ဆန်သောအလုပ်တွင်အလုပ်လုပ်သည်။ ထို့အပြင်သူသည်မိမိအလုပ်ကိုထိထိရောက်ရောက်လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ရှင်သန်နိုင်စွမ်းရှိသည်ဟုခံစားရကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
သူဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုကူညီမှုနဲ့ချစ်စဖွယ်ပစ္စည်းပစ္စယတွေကိုနှစ်သက်တယ်၊ ဒါကြောင့်သူနဲ့မိတ်ဆက်ပေးရတာကိုသူအရမ်းဝမ်းသာခဲ့တယ်။ သူကစမ်းသပ်မှုအပြီးတွင်သူသည်ပျင်းစရာကောင်းသည့်အတွက်ကြောင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေနိုင်ခြင်းမရှိတော့ကြောင်းယခုအကျိုးဆက်များကိုသိသောကြောင့်ပြောခဲ့သည်။ သူသည်ယခုအချိန်တွင်အမျိုးသမီးများနှင့်လိင်ဆက်ဆံနေပြီးသူ၏ချိန်းတွေ့ခြင်းဘ ၀ သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောကြောင့်သူသည် porn ကိုအားကိုးရန်မလိုအပ်ပါ။ ပြီးတော့သူကသုတ်ရည်တွေများများစားစားအတွက်တော့သုတ်သလောက်မဖြုန်းတီးသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ သူကနေ့တိုင်းလွတ်လာတယ်။ အခုတော့ ၃ ရက် ၄ ရက်တိုင်းလိုလိုကွာခြားချက်ကိုသူသတိပြုမိသည်။
ဦး နှောက်မှေးမှိန်သွားသည့်အထိဆိုးရွားလာသောကြောင့်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါကိုစောစီးစွာစတင်ခံစားရခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်စိုးရိမ်ခဲ့သည် (ကျွန်ုပ်အသက် ၄၈ နှစ်) ငါ Nofap ကိုစတင်ခဲ့သောအကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်သည်စောစောအငြိမ်းစားယူရန်လိုအပ်မည်ကိုကြောက်။ တစ်ကိုယ်တည်းမအိုလိုချင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ယခုတွင်ငါသည်အခြားအသီးအသီးအနှစ် 48 မျှော်လင့်တိုင်းရှိသည်။ ဒါကြီးမားတယ် လုံးဝမျှော်လင့်မထား။
မည်သူမဆိုငယ်သောအရာတို့ကိုဤမျှလောက်ပိုကောင်း NoFap အပေါ်ဖြစ်ကြောင်းသတိထားမိ?
ငါကငါ့မြည်းထဲကစကားပြောနေတာဖြစ်ကောင်းလေးလေးနက်နက်နဲ့၊ ငါ NoFap မှာရှိတဲ့အရာတွေကိုပိုပြီးတန်ဖိုးထားလေးမြတ်မိနိုင်တယ်။ ညနေခင်း၊ စကားပြော၊ အစားအစာ၊ တေးဂီတလိုပြောနေတာပါ
PornFree ငါ့ကိုပိုကောင်းအိပ်စေတော်မူ၏။ လိုပဲအများကြီးပိုကောင်းတဲ့။
အစဉ်မပြတ်ငါလက်ျာဘက်ညမှာအိပ်ပျော်ကျသွားရှေ့မှာငါသည်ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်ဖုန်းပေါ်မှာညစ်ညမ်းမှာကိုကြည့်လေ့ရှိတယ်။ ငါပစ္စည်းပစ္စယမှတဆင့်ရှာဖွေတကယ်နှောင်းပိုင်းတွင်တက်နေဖို့လိမ့်မယ်။ ငါရခဲ့ပေအဆိုပါအိပ်စက်ခြင်းမှာအားလုံးမှေးကွိုဘယ်တော့မှခဲ့, ငါအခြေခံအားဖြင့်သေလွန်သောသူတို့သည် feeling နက်ဖြန်နေ့၌သုံးဖြုန်းလိမ့်မယ်။
PornFree ကိုသွားပြီးကတည်းကအရာအားလုံးပြောင်းလဲသွားပြီ။ ငါ PornFree ကိုပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့သုံးလလောက်ကြိုးစားနေတယ်။ အခုတော့ငါဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့အိပ်ပျော်နေတယ်။ ငါမနက်မှာအလွယ်တကူနိုးလာပြီးအနားယူတယ်။ ငါအစောပိုင်းနှင့်အစောပိုင်းအိပ်ရာနိုင်။ ကျွန်မရဲ့အိပ်မက်တွေကိုအမြဲတမ်းသတိရနေတယ်။ ငါဟာအရာတွေကိုအာရုံစိုက်ဖို့စွမ်းအင်အလုံအလောက်ရှိပြီးတစ်နေ့တာမှာပိုပြီးတီထွင်ဖန်တီးမှုရှိခဲ့တယ်။
၎င်းသည် PornFree ၏မရည်ရွယ်ဘဲအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေနိုင်သော်လည်း၎င်းသည်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေအကျိုးရှိသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, PornFree!
nofap နဲ့ငါ့ 90 နေ့ကအတွေ့အကြုံကို။
ကိုယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစိန်ခေါ်မှုအဖြစ်, 90 နေ့ရက်ကာလအဘို့ nofap ကိုပြု၏။ အဘယ်အရာကိုကိုယ်သတိထားမိ: သဘာဝကိုပိုပြီး flirtatious ဖြစ်ခြင်း။ ကိုယ့်သဘာဝကလုပ်နေတာ, ငါ့ဦးနှောက်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်မှနိုင်ဖြစ်ခြင်းမဟုတ်ထံမှသွားလေ၏။
အမျိုးသမီးတွေအကြောင်းပိုမိုသတိပွုမိ: ငါမျက်လုံးချင်းနည်းနည်း quirks သတိထားမိခြင်း, ကိုယ်ကသူတို့ကိုအတွက်အမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားခဲ့သည်တို့ကိုနားထောငျပါ။ porn kinda သူတို့ကိုသင်သတိထားမိသို့မဟုတ်သူတို့ကိုလစျြလြူရှုမဖြစ်တစ်ခုခုကိုလုပ်ပုံရသည်။ သို့မဟုတ်လိင်အရာဝတ္ထုအဖြစ်သူတို့ကိုကြည့်ပါ။ ကျွန်မအရမ်းကိုအခြားပစ္စည်းပစ္စယသတိထားမိလိမ့်မယ်။ ခြုံငုံဈကကြိုးစားပြီးပြောကြတယ်။
ငါတစ်ကိုယ်ရေရာဂစိတ်ဖြေတာကိုတစ်နှစ်သုံးပုံတစ်ပုံလောက်ကြာခဲ့ပြီ (ဒါကထပ်ခါထပ်ခါဖြစ်မလာဘူး၊ ပြီးတော့ယေဘုယျအားဖြင့်ပျော့ပျောင်းတဲ့လှုံ့ဆော်မှုများဖြစ်သည်) ။ လိင်မှုနှိုးဆွမှုအတွက်ပိုမိုပြင်းထန်သောလှုံ့ဆော်မှုများ၊ ဒါပေမယ့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းတစ် ဦး တည်း (PMO ဖြစ်ပါကပိုမိုကျယ်ပြန့်လာပါကမကြာခဏထပ်မံတိုးချဲ့လျှင်) IMHO သည်ကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်ပတ်လမ်းကိုတစ်နည်းနည်းဖြင့်ပြုပြင်နိုင်သည်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး desensitization လိုပဲ။ တကယ့်ဘဝဘ ၀ မှဥပမာ - စန္ဒရားတေးဂီတကိုနားထောင်ခြင်း၊ မက်မွန်သီးစားခြင်း၊ လက်ဖက်ရည်ကြမ်းသောက်ခြင်းစသည့်သာမန်အရာများ - ကျွန်ုပ်သူတို့ကိုအမြဲတမ်းချစ်ခဲ့သည်။
သို့သော်ပြီးခဲ့သည့်လအနည်းငယ်အတွင်းပျော်ရွှင်မှုသည်တစ်နည်းနည်းဖြင့်ပိုမိုပြင်းထန်လာသည်ကိုကျွန်ုပ်သတိပြုမိခဲ့သည်။ ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥယျာဉ်ကနေမက်မွန်သီးတွေကိုစားပြီးစားလိုက်တာက 'အော်ဂဇင်စ်' (သိပ်မပြင်းထန်ဘူး) ဒါပေမယ့်ကြာရှည်ခံတယ် ၎င်းသည်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းရုံသာမကအော်ဂဇင်ပြုသည့်အရာကိုလည်းပေးသည်။ ဒါမှမဟုတ်ညနေခင်းနှောင်းပိုင်းမှာတိတ်ဆိတ်စွာနေခြင်း - အဲဒီအရာတွေကိုငါအမြဲတမ်းတန်ဖိုးထားလေးမြတ်ခဲ့တယ်၊ TL; DR IMHO - မိန်းမ၊ ED / ဘာသာတရားနဲ့တွေ့ဆုံခြင်းကမှတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းကိုရပ်တန့်သွားအောင်လုပ်ခြင်းသည်တကယ့်ကိုအကျိုးရှိစေတယ်။
အလေ့အထကိုက်အကြှနျုပျ၏လက်ချောင်းလက်သည်းပျောက်ကွယ်ခဲ့သည်။ ငါလုပ်ပြီးကမြင်းနေကြတယ်သူတို့ကိုပယ်ဝါးမယ်လို့, သူတို့သည်အစဉ်ငါ့လက်ချောင်းရဲ့အဆုံးမှာပဲစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်ဖြုန်း nub ခဲ့ကြသည်။
porn ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သင်၏လိင် drive ကိုအကျိုးသက်ရောက်ပုံကိုလိုက်တယ်။
မည်သူမဆိုယင်းကိုထောက်ပြခြင်းမပြုမီ၊ ဟုတ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အချို့သောသူများသည်သဘာဝအရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမောင်းနှင်မှုနှင့်အချို့သူများသည်သဘာဝအရအနိမ့်အမြင့်ရှိသည်ကိုငါသိ၏။ ဒါပေမယ့်ညစ်ညမ်းတဲ့လိင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျနော့်ကိုလိင်ဆိုင်ရာမောင်းနှင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောက်ချက်ချစေခဲ့တယ်။
အခမဲ့အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများထောက်ပံ့ပေးသောအဆုံးမဲ့မျိုးကွဲများနှင့်အသစ်စက်စက်သောအရာသည်ကျွန်ုပ်အတွက်တွန်းလှန်နိုင်ခဲ့သည်။ ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုတစ်ရက်နီးပါး၊ တချိန်တည်းတွင်ကြိမ်ဖန်များစွာကြိမ်ဖန်များစွာပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ငါကနေ့စဉ်လုပ်နေတာဆိုတော့ငါဟာငါဟာမြင့်မားတဲ့လိင်စိတ်ဓာတ်ပြင်းထန်မှုရှိတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောခြင်းအားဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်းအသုံးပြုခြင်းကိုစတင်တရားမျှတလာတယ်။
ဤသည်မျှတမှုသည်အရာများကိုပိုမိုဆိုးရွားစေပြီးပိုမိုအသုံးပြုမှုကိုဖြစ်စေသည်။ ငါ့အားကစားအသင်းရှုံးနိမ့်? - အချို့သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ကြပါစို့၊ ကျွန်ုပ်၏ပညာရေးစာမေးပွဲများကကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်အတိုင်းမသွားပါ။ - porn ကြည့်ရအောင်၊ တစ်ခုခုငါ့ကိုစိတ်ဆိုးအောင်လုပ်တာလား။ - porn ကြည့်ရအောင်။ လိင်မှုကိစ္စနှင့်လိင်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်သောကျွန်ုပ်၏သိလိုစိတ်ကြောင့်ဆက်ဆံရေးကိုစတင်ခဲ့သော်လည်း၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏အစစ်အမှန်ဘဝပြfrနာများနှင့်စိတ်ပျက်စရာများကိုဖြေရှင်းနိုင်သည့်ယန္တရားတစ်ခုသာဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လိင်မှုကိစ္စဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုသဘောဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်သင့်တယ်။ ညစ်ညမ်းရုပ်မြင်သံကြားကြည့်သူတော်တော်များများကအဲဒါကိုအပျက်သဘောနဲ့ဆက်ဆံဖို့သုံးကြပေမဲ့၊ ငါကဒါကိုငါ့ရဲ့လိင်မှုကိစ္စမြင့်မားမှုကြောင့်လို့ငါထင်ခဲ့တာ။
ယခုငါ (၅) လလောက် (ငါရက်ပေါင်းအတိအကျကိုခြေရာခံသည်) porn မပါဘဲ (လွန်ခဲ့သော5ပတ်အတွင်း pornfree သွားရန်ကြိုးစားမှုနှစ်ခုအနေဖြင့်နှစ်ကြိမ်ကြိုးစားခဲ့သည်) ယခုငါနားလည်သဘောပေါက်လာကြပြီ ငါဟာမြင့်မားတဲ့လိင်ဆိုင်ရာမောင်းနှင်အားနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါ့မှာရှိခဲ့တာဟာအမှိုက်ပဲ ဒါကငါ့အ porn အသုံးပြုမှုငါ့ကိုစဉ်းစားစေခဲ့သည်။ ပထမ ၂ ပတ်မှ ၂ ပတ်အကြာတွင်ခက်ခဲသော်လည်းသင်တစ်လသို့မဟုတ်နှစ်လသင် porn မပြုလုပ်ပါကထိုပြင်းထန်သောတိုက်တွန်းမှုများသည်ဟန်ချက်ညီအောင်စတင်ပြီးပုံမှန်ဖြစ်လာသည် (အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံ) ။
ငါလာမယ့်အော်ဂဇင်ဒါမှမဟုတ်ငါကြည့်တော့မယ့်နောက်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကိုအစဉ်မပြတ်စဉ်းစားတော့မည်မဟုတ်။ ငါတစ်နေရာရာမှာဓာတ်ပုံတစ်ပုံသို့မဟုတ်အစောပိုင်းကခလုတ်ဖြစ်ရပြီစေခြင်းငှါ, အခြားအရာတစ်ခုခုကိုတှေ့ဆုံရင်တောင်ဒါဟာတကယ်တော့ငါ့အပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါ။ အခုတော့ငါ asexual မဖြစ်လာပါဘူး ကျွန်ုပ်သည်တစ်ခါတစ်ရံ (တစ်ပါတ်တစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်တစ်ပါတ်နှစ်ပါတ်တွင်) တစ်ခါတစ်ရံတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတတ်သည်။ ဖြောင့်မတ်သောအမျိုးသားတစ် ဦး အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်လိင်အရအမျိုးသမီးတစ် ဦး အားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအခါအသိအမှတ်ပြုနိုင်သေးသည်။ ငါလိင်စိတ်တုန်လှုပ်စေသောစိတ်ကူးကိုဆင်ခြေတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုခြင်းကဲ့သို့ porn ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်ခံစားမိသည့်အခါတိုင်းကျွန်ုပ်၏လိင်မှုဆိုင်ရာတွန်းအားကိုအမြဲတမ်းချက်ချင်းငြိမ်းစေရန်ဖြစ်သည်။
ဒီတော့ PIED များကဲ့သို့အများအပြားအများအပြားဆိုးကျိုး, အဖျက် fetishes, အဖိုးတန်အချိန်နက္ခတ္တဗေဒ, လေလွ, etc လိင်အရာဝတ္ထုအဖြစ်အမျိုးသမီးများကြည့်ရှုအတူညစ်ညမ်းသင်တို့အပေါ်မှာရှိအံ့သောငှါအခြားအပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုသင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်လိင် drive ကိုတစ်ဦးအတိုင်စိတ်ကူးပေးရဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
[ဆွေးနွေးချက်] ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုဖြတ်တောက်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် ပတ်သက်၍ လုံလောက်သည်။ porn အလွန်အကျွံအသုံးပြုမှု၏အကျိုးဆက်များအကြောင်းပြောဆိုကြပါစို့။
ငါတို့ရှိသမျှသည် porn ကိုဖြတ်တောက်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများအကြောင်းကိုဖတ်ခြင်းနှင့်ကြီးမြတ်သောလှုံ့ဆျောမှုအဖြစ်အသုံးပြုရန်။ သို့သော်လွန်စွာညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဆိုးကျိုးများကိုတစ်စက္ကန့်ကျော်ကြည့်ရအောင်။
ယခုတွင်ငါသည် ၁၂ နှစ် (ယခု ၁၆ နှစ်) မှစ၍ စွဲစွဲစွဲလမ်းလမ်းရရန်ရိုးသားစွာဝန်ခံမည်။ ကျွန်ုပ်သည် porn မပါသူမည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကိုပင်မသိပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့သည့်အရာနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကျွန်ုပ်နှင့်အနည်းငယ်ထူးခြားသည် အများဆုံးမဟုတ်လျှင်ငါပတ်ပတ်လည်ငါလူအားလုံးမဟုတ်:
လူမှုစိုးရိမ်စိတ်။ မကြာခဏဆိုသလိုပဲထွက် blanking နှင့်ပြောသောအရာကိုမသိ။
အမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်သူမ၏inတ္ထိအလှအတွက်တန်ဖိုးမထားနိုင်တော့ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ရက်အနည်းငယ်သာလမ်းလျှောက်သွားသောအခါပြောင်းလဲသွားပြီးအမျိုးသမီးများသည်အဝတ်အထည်များကိုအမှန်တကယ် sexy အဖြစ်စတင်မြင်လာသည်။
ငါစိတ်ခံစားမှုဘာမှမခံစားရနိုင်ပါ။ တစ်ခါတလေငါ sociopath ခံစားရတယ်
Lethargy ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်ခုစလုံးသမျှဘယ်သူမျှမကစွမ်းအင်
ငါပုံမှန် vanilla အမှုအရာမှငါ့ကိုသိပ်လှသောကြောင့်ငါ့ကိုဖွင့်သင့်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှဖွံ့ဖြိုးကြောင်း Fetishes နှင့် kinks ။
ရှိခြင်းနှင့်လိင်ခံစားဖို့ related performance ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ။
သင်နှင့်ဖြစ်ဟန်ဆောင်ချင်သောလူသား၏ဘဝနေထိုင်နေကြ သိ. နှင့်ဆက်စပ်အရှက်ကွဲခြင်းနှင့်ဒုစရိုက်ဖြေ။
လူတစ် ဦး သည်ရင်းနှီးသောနှောင်ကြိုးများဖွဲ့စည်းရန်၊ နက်ရှိုင်းသောစကားစမြည်ဝိုင်းများပြုလုပ်ရန်၊ ဆက်ဆံရေးကိုပိုမိုနားလည်ရန် (ကျန်းမာသောဆက်ဆံရေးတွင်နေ့စဉ်ဖြစ်လေ့ရှိသည့်အရာတစ်ခုခု)၊ သင်၏စွဲစွဲလမ်းထားသည့်အတိုင်းသင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်အတူ“ ယခုအချိန်တွင်ဖြစ်ခြင်း” စွမ်းရည်ကိုဆုံးရှုံးသည်။ အထူးသဖြင့်သင့်အဖော်နှင့်လိင်ဆက်ဆံလျှင်စိတ်ကူးယဉ်သောတိပ်ခွေကိုအမြဲခေါင်းထဲထည့်ထားသည်။ သင်သည်အခြားအမျိုးသမီး / အမျိုးသားများအားလူများအဖြစ်ရှုမြင်ခြင်း၊ သူတို့ကိုအရာဝတ္ထုများအဖြစ်ရှုမြင်ခြင်းနှင့်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုတူညီသောနည်းဖြင့်အကြိမ်ကြိမ်ကန့်ကွက်နိုင်ခြင်းကိုသင်ဆုံးရှုံးသည်။
စွဲလမ်းမှုပိုမိုပြင်းထန်လာသည်နှင့်အမျှအမျိုးသားများအနေဖြင့် ၄ င်းတို့၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုများကိုရှည်လျားအောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ Edging ဟုခေါ်သည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့သည်နာရီပေါင်းများစွာရှာဖွေနိုင်ပြီးမှန်ကန်တဲ့“ ထိမှန်” မှုကိုရှာဖွေရန်ကြိုးစားသည်။ ၎င်းသည်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး နှင့်အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ပိုမိုလွယ်ကူ။ ပိုမိုကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသောရလဒ်အနေဖြင့်ပါတနာနှင့်အတူရှိနေလိုခြင်းဖြစ်သည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်၎င်းသည်လက်တွဲဖော်ကိုစိတ်ကျေနပ်မှုမရှိသောရလဒ်များဖြင့်ရှည်လျားစွာနာကျင်စေနိုင်ပြီးပိုမိုဆိုးရွားသည့်အချိန်တွင်ပင်မူးယစ်ဆေးစွဲသူအားအရှက်ရစေနိုင်ပြီးလိင်ဆက်ဆံမှုကိုလုံးဝရှောင်ရှားနိုင်သည်။
နောက်ဆုံးတွင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာပြုလုပ်ခြင်းအနုပညာကိုခံစားနိုင်စွမ်းပျောက်ဆုံးသွားသည်။ သူတို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအတွက်တကယ်စိတ်အားထက်သန်မှုကသူတို့လုပ်နိုင်စွမ်းအားလုံးဖြစ်သည်။ Wham-Bahm ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ Ma'am / Sir လိင် (သို့) ပါးစပ်လိင်သာဖြစ်သည်။ ကျန်တဲ့ရင်းနှီးမှုအားလုံးကလမ်းဘေးကျရောက်သွားတယ်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်ကိုအော်ဂဇင်ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်တဲ့အမျိုးသားတွေရဲ့စွမ်းရည်ကိုကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ရှုမြင်ချက်ရနိုင်ပြီးသူတို့ရဲ့မျက်နှာကိုထိမိရင်သူတုကနေတကယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမပြောနိုင်ပါဘူး။ သူတို့အနေဖြင့်သူတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ထံမှ“ ထိပ်ဆုံးမှ” တုံ့ပြန်မှုကိုမျှော်လင့်ပြီး၊ ၎င်းကိုမရရှိလျှင်၊ သူတို့သည်လိင်အပေါ်စိတ်မ ၀ င်စားမှုများဖြစ်လာသည်။ နောက်ဆုံးတွင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစံနှုန်းများနှင့်ပတ်သက်သောသူတို့၏မျှော်လင့်ချက်များနှင့်မကိုက်ညီသောတကယ့်တိုက်ရိုက်လက်တွဲဖော်နှင့်ရင်ဆိုင်ရသောအခါလိင်ဆန္ဒကိုလုံးဝမခံစားရပါ။
ကလေးမွေးအသက်နေသောမိတ်ဖက်သူတို့သဘာဝကျကျ inseminate မနိုင်နှင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖြစ်လာမှဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာကိုအသုံးပြုရပါမည်တွေ့ရှ။
လူများသည်အဖြစ်မှန်နှင့်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားလိမ့်မည်။ အွန်လိုင်းကလေးများအား ၄ င်းတို့၏တာ ၀ န်များကိုဒုတိယအဆင့်အဖြစ်သို့ယူရန်ခွင့်ပြုသည်။ ရုပ်မြင်သံကြားပြပွဲပြောင်းလဲသွားသောအခါမိဘများအနေဖြင့်ညစ်ညမ်းမှုကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ရုံး၌တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများပြုလုပ်နေပုံကိုကလေးများထံမှအကြိမ်ပေါင်းများစွာကြားသိရသည်။ ညစ်ညမ်းသောဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အိမ်သာတွင်ထိုင်စဉ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း။ ကလေးတွေဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုလုံးဝဂရုမစိုက်ဘူး။
သို့မဟုတ်သူတို့သည်ကျောင်း၌သို့မဟုတ်အလုပ်တွင် ပို၍ အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုမရှိတော့ပါ။ သူတို့ရဲ့အာရုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်းရှုံးသည်။ အိမ်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ထည့်ဝင်လှူဒါန်းခြင်းသည်မတည်ရှိတော့ပါ။ တစ်ခါတစ်ရံမမျှော်လင့်ဘဲသေဆုံးသွားသောအခါညစ်ညမ်းသောအဖြစ်အပျက်တစ်ခုလုံးကိုအီလက်ထရောနစ်ဝန်ခံခြင်းပုံစံဖြင့်ထုတ်လွှင့်သည်။ download လုပ်ထားသော porn, sexting နှင့်အီးမေးလ်များ၏ကြီးမားသောဖိုင်များသည်မအောင်မြင်သောအိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်မှုနှင့်မိသားစုဝင်များအားမည်သည့်မိသားစုမှမဆိုလိင်အကျင့်ယိုယွင်းခြင်းများကိုဖွင့်ပေးသည်။ ကလေးများအတွက်နေပြီးအဓိပ္ပာယ်အသစ်တစ်ခုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
Sexaholics ငွေညှစ်များအတွက်မိမိတို့ကိုယ်ကို set up
sexaholism သည့်မိတ်ဖက်အကြောင်းကိုမကျမည်အကြောင်းနေစဉ်, စွဲဆက်ဆံရေးရှိလူများ၏အများစုသူတို့အပေါ်လိမ်လည်လှည့်ခံကြသည်ဟုခံစားရသည်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့ Self-ယုံကြည်မှုဆုံးရှုံးသူတို့လိမ်ညာခြင်းနှင့်ကြိုးကိုင်နေကြသည်, အရှက်နေကြသည်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်အားလုံးကိုယုံကြည်မှုဆုံးရှုံး။ သူတို့ဟာလိင် starved ဖြစ်လာသည်။ သူတို့စွဲစိတ်ကူးယဉ်တူတဲ့ဖို့ကြိုးစားနေ, သူတို့သည်တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ချင်ကြဘူးသောအရာလုပ်နေတာ၏ရာထူးသို့တင်ထားရမည်။ သူတို့ကအစဉ်အမြဲအရိပ်လက္ခဏာများအတွက်မြျှောအပေါ်ဖြစ်ခြင်း, အများပြည်သူအတွက်တဲ့အခါမှာ Hyper-viligent ဖြစ်လာများနှင့်မိမိတို့ကိုယ်ကိုဖြေလျော့ခြင်းနှင့်ပျော်မွေ့နိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သူတို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အခြားလူတစ်ဦးပြီးနောက် lusting ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးနှောက်မြူငါ့အဘို့ကြီးတွေတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်ထိုသို့မဆိုခြားနားချက်ကိုသတိပြုမိဖို့ကအနည်းဆုံးတစ်ပါတ်ကြာပါသည်။ ငါသည်ငါ့အလုပ်ကိုအချိန်မီထုံးစံ၌ပြုသောအမှုလာပြီအားဖြင့်တစ်နာရီတစ်ရက်ချွေတာတယ်။ ကျွန်မအလုပ်ထိုင်မတိုင်မီ PMO ဖို့အသုံးပြုပေမယ့်အာရုံစူးစိုက်လို့မရဘူး။ ကြောင်း၏တစ်ဦးကအများကြီးတိုးတက်ခဲ့သည်။
sensitivity ခဲ့ဆဲငါ့ထံသို့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ ငါ၏အကောလိပ်နှစ်အတွင်းမှာတော့ကိုယ့်နေ့စဉ်သို့မဟုတ်တစ်နေ့လျှင်အချိန်ကျော်လွန်သွားမျိုးစုံ PMO လိမ့်မယ်။ သို့သော်လိင်ကာလအတွင်းကျွန်မအလွန်ခဲယဉ်းအချိန် orgasm ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါလုံးထင်ပေမယ့်တကယ်အထွတ်အထိပ်မှပဲတစ်ဦးနိုင်စွမ်းမရှိခြင်းဖြစ်ခဲ့သည်။
ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ပြီးတဲ့နောက်ငါအများကြီးလျော့နည်းအခန်းထဲမှာ scan ဖတ်ခဲ့ပါတယ်သတိပြုမိသည်။ ကျွန်မအကြောင်းကို fantasize ဖို့အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာ cutest မိန်းကလေးရှာတွေ့ဖို့ကြိုးစားနေမဟုတ်ပါဘူး။ ငါသည်ငါ့ဇနီးအပေါ်မှာငါ့အာရုံကိုအာရုံစူးစိုက်တာကိုပျြောရှငျမိပါတယ်။
ငါ၏အလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကိုကျေနပ်အောင်ငါ့ဇနီးမှဖွင့်ထောကျအကူပွုခဲ့နဲ့ကျွန်မတစ်ခုတည်းနှင့်မိတ်ဖက်မရှိဘဲဤအတူကိုင်တွယ်ရန်ကြိုးစားနေနေသောသူတို့အဘို့ခံစားရလျက်ရှိသည်။ ယင်းလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စေမျှမရှိစေခြင်းငှါကြောင့်ခက်ခဲတဲ့ဖြစ်ရမည်။ ငါတစ်ခုတည်းဖြစ်လျှင်သွေးဆောင်မှုကိုစီမံခန့်ခွဲရန်ပိုပြီးခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်လည်းငါသည်ကောင်းသောအဘို့ဤအတူပြုချင်, ငါ၏အားထုတ်မှုအာရုံစိုက်စောင့်ရှောက်မည်။
နေမကောင်းကိုယ့်ကိုငါ့အားပေးပါ - - အခြားသူတွေကိုပြန်လုပ်အချို့ဖြစ်နိုင်သည် ''
လူမှုရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှု - တစ်စုံတစ် ဦး ကမေးမြန်းပြီးသူတို့ကိုမမှတ်မိသောအခါငါအတန်းတက်နေခြင်းကဲ့သို့သောအခြေခံကျသောအရာများကိုမေ့သွားသည်
တစ်ချိန်ကအိမ်သို့သွား p im ဘယ်လိုစဉ်းစားအလုပ်မှာတစ်နေ့တာအတွင်း p အသုံးပြုခြင်းနှင့်အသုံးစရိတ်နာရီပြင်ပတွင်အမှန်တကယ်အနေဖြင့်ဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်
နံနက်ယံ၌အလွန်နိမ့်စွမ်းအင်နှင့်နေ့ရက်ကိုတဆင့်တစ်ဦးဖုတ်ကောင်များကဲ့သို့သရုပ်ဆောင်သည်, တစ်ခုတည်း, နေ့
စိတ်ကူးယဉ်ပုံမှန်ကနေအနည်းငယ်ပုံမှန်မဟုတ်သောတဦးတည်းအရာမှပိုပြီးပုံမှန်မဟုတ်သောအခြားအရာတစ်ခုခုမှ, ထို့နောက်အနည်းငယ်မညီကြောင်းတစ်ခုခုမှ, ထို့နောက်အလွန်မညီကြောင်းတစ်ခုခုမှတဖြည်းဖြည်း
အိမ်မှာတည်းခိုမယ့်အစားငါ့အသက်ကိုမှအတွေ့အကြုံများကို add နှင့်ငါ့မိတ်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲမှဖိတ်စာသွား
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်အလွန်အကျွံ p အသုံးပြုမှုကိုအပြီးဖြစ်လာခဲ့သူနှင့် p ငါ့ကိုလိင် irl ရှိသည်ဖို့ချင်တယ်ဘယ်တော့မှလုပ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့၏ဈအစဉ်အဆက်အချိန်တွင်နှင့်အတူခဲ့အလှဆုံးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိန်းကလေးငါ့အအိပ်မက်၏ရည်းစားဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းနှင့်ဝေးသဖြင့်
ဘယ်လိုကဒီကော? -Triggers likely- များမှာ
ငါ၏အစွဲ၏တစ် ဦး "အကျဉ်း" အကောင့်။
ငါ့အဘကိုငါ့အစ်ကိုရင်းနဲ့ကျွန်မပတ်ပတ်လည် 10 နှစ်အရွယ်မှာသောအခါငါ porn အပေါ်ချိတ်ဆက်။
ငါ 20 စဉ်ငါသည်ငါ့ယခုထွ-ဇနီးတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးသောအခါငါလုံးဝ, အစွဲအပြည့်အဝဗာရုတ်ဟာသူ့အတွက်, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ထိန်းချုပ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
ငါ 34 မှာကွာရှင်းခဲ့သည်။ ယခုတွင်ငါသည် 35 ဖြစ်၏။
ဒါဟာငါနောက်ဆုံးသားရဲ၏စားသုံးကွကတည်းက3ရက်သတ္တပတ်သွားခြင်းဖြစ်သည်။
ကလူ / အမြိုးသမီးမြားအဘို့အကြှနျုပျ၏လေးစားမှုကိုထပ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ပါတယ်။
ဖြည်းဖြည်း ... ဒါပေမယ့်အပြုသဘော!
ငါသည်ငါ့ #1 ချစ်ခြင်းမေတ္တာအဖြစ်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံထားတော်မူ၏။
ယခုစွဲလမ်းမှုကငါ့ကိုပြောရန်ကြိုးစားသည်။ ဆက်လုပ်! နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ထပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာပိုကောင်းတယ်ဆိုတာကိုသိတယ်။ သငျသညျကနေ shit တူသောခံစားမှုအဆုံးသတ်ရင်တောင်သင်ကနောက်တဖန်စွန့်လွှတ်နိုင်ကြောင်းအားလုံးသိကြလိမ့်မည်, အားလုံးအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်! လုပ်သာလုပ်ပါ!!!"
လွယ်ကူလာပြီဖြစ်ပါတယ်နှင့်မတရားသောလျော့နည်းအစွမ်းထက်လာပြီဖြစ်ကြောင်းသော်လည်းကျွန်မအစဉ်မပြတ်, relapse ချွတ်တိုက်ထုတ်။
ကျွန်တော့် ဦး နှောက်ဟာနှစ် ၂၀ ကျော်ကတည်းကတာရှည်ခံနေပြီလို့ခံစားရတယ်။
ငါအံ့သြဖွယ်ယောက်ျားလေးသုံးယောက်ထမြောက်တော်မူ, တကယ့်ကိုအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဇနီးရှိခဲ့ပါတယ် ...
ဒါပေမယ့်ငါ့အ fetishes / kinks ၏စဉ်ဆက်မပြတ်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အစစ်အမှန်လောကသို့ seeped ။
သူတို့ဟာအဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေပြီးကျွန်မရဲ့မိသားစုဘ ၀ ကိုစိတ်ဆင်းရဲစရာဖြစ်စေခဲ့တယ်။
ငါအရာအားလုံးကိုဆိုလိုသသောလူတို့အားတစ်ဦးကြမ်းတမ်းနဂါးဖြစ်လာခဲ့သည်အဖြစ်ငါ helplessly ကြှနျုပျမကျြစိနောကျကှယျကနေစောင့်ကြည့်။
ငါသည်လူသကဲ့သို့ငါ၏ယောက်ျားလေးများကုသ! သူရဲလူ! သူတို့၏မိဘများကိုအျောဟစျသို့မဟုတ်နိုးထဖို့မကိုသိသင့်ကြောင်းယောက်ျား!
မပြောပါနဲ့။ ငါ့လက်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာ ၀ န်ခံပါ။
စိတ်မကောင်းပါဘူး Punkin 'ငါအရမ်းနမ်းတယ်ကောင်းကောင်း
ဒါက "အသိပညာ" ရှည်လျားသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။
တောင်းပန်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်စာရေးခြင်းလိုခံစားမိသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်ရေးသည်။
ဒါဟာငါ့ကိုအမှုအရာဝန်းကျင်ငါ့ဦးခေါင်းခြုံပေးနိုင်ပါတယ်နှင့် Ive ပုန်းအောင်းခဲ့နာကျင်မှုဖော်ထုတ်ကူညီပေးသည်။
ငါဟာစွမ်းအင်နည်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်ကိုယ်ပိုင်စီမံကိန်းတွေလိုရေရှည်ကိစ္စတွေမှာလုပ်ကိုင်ဖို့စိတ်မ ၀ င်စားဘူးလို့မခံစားရဘူး။ စွမ်းအင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးငါfineုံခံစားရတယ်။ တစ်စုံတစ်ခုကိုလုံ့လဝီရိယရှိရှိလုပ်ဆောင်ခြင်းသည် ပို၍ ခက်ခဲပြီး ပို၍ ခက်ခဲသောအရာသာဖြစ်သည်။ ငါ porn စားသုံးသည့်အခါအတားအဆီးအနည်းငယ်ပိုကြီးမားဖြစ်ကြသည်။
ငါ porn ကိုသုံးနေစဉ်အသေးစားအဆင်မပြေမှုများကပိုမိုထိခိုက်ပါသည်။
“ The Big of Thinking Big” ဆိုတဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုဖတ်နေပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖော်ပြချက်တွေထဲကတစ်ခုကမှန်ရာကိုလုပ်တာပါ။ ပြီးတော့ခင်ဗျားအကြောင်းကိုကျွန်တော်မသိပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော့်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ခြင်းဟာမှားယွင်းတဲ့အရာလို့မြင်ပြီးယုံကြည်မှုကတဖြည်းဖြည်းယိုယွင်းပျက်စီးသွားသလိုခံစားရတယ်။ သင်ဤမျှကြာမြင့်စွာကတည်းကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုနေခဲ့ပါကဤအရာကိုသတိပြုမိရန်ခဲယဉ်းသည်။
ကိုယ့်တစ်ဦးကိုမှန်ကန်မိန်းမနှင့်ဖြစ်မလိုချင်ပေမယ့်ကျွန်မကိုယ့်ကိုကိုယ်အတွက်ဆင်းသက်ဆက်ဆံရေး၌ငါ၏အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးချင်တယ်။ ငါနှင့်အတူရုန်းကန်တစ်ခုခုဖြစ်သည့်အခြားသူတစ်ဦးဦး, ကိုခစျြတတျနိုငျဖြစ်ခြင်းရှေ့မှာလည်းကိုယ့်ကိုကိုယ်ချစ်ရချင်တယ်။ ထိုအကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ငါ၏ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးရှိပြုစုပျိုးထောင်အလွန်အရေးပါသည်။
ဒီစာအုပ်ကို“ ကြီးမားသောအတွေးအခေါ်၏ကြီးမားခြင်း” ကိုဖတ်ရန်သင့်အားအထူးအကြံပြုလိုပါသည်။
ဦးနှောက်မြူနှင့် lethargy ။
ငါသည်သင်တို့၏အသက်တာကိုငါကျိန်းသေသည် "လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်" တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဆက်စပ်နိုင်ပါတယ်။ ငါ 13 ခဲ့ချိန်အထိကျွန်မပထမဦးဆုံး FAP ဖို့ဘယ်လိုထုတ်တွေ့ရှိရသည့်အခါငါ, လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုမရှိခဲ့ဘူး။ အဆိုပါ fetishes သို့မဟုတ် kinks များအတွက်သကဲ့သို့, ထိုတောင်ညစ်ညမ်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာရှေ့၌ငါငယ်ငယ်တုန်းကကတည်းကငါရှိခဲ့သောအရာတို့ကိုဖြစ်ကြသည်။
ကိုယ့်ငါ porn အသုံးပြုတဲ့အခါငါ့အစိတ်ခံစားမှုများနှင့်ခံစားသေကြရှာပါ။ တစ်လျောက်ပတ်သော Streak ပေါ် သွား. အမေဇုံကိုချွတ်အလုပျအတှကျအခြို့သောမိုက်မဲကင်လုပ်ခိုင်းမိန့်ကျော်စိတ်လှုပ်ရှားတယ်။ ဟားဟား။
ရယ်စရာဆိုတာမင်းသိလား ငါအရင်ကမတူကွဲပြားတဲ့လူတွေဆီကဒီမှတ်ချက်ကိုအကြိမ်ကြိမ်တွေ့ဖူးတယ်၊ ငါလုံးဝသဘောတူတယ်
မေးခွန်းတစ်ခုနှင့်အတူ Nofaper ။ သငျသညျ porn ကိုကြည့်ရပ်တန့်ကတည်းကအဘယ်အရာကိုသင်တို့အဘို့ကိုပြောင်းလဲခဲ့သလဲ
ပိုများသောအော်ဂဲနစ်နှင့်ကြာကြာတစ်ဦးညစ်ညမ်းတူသောလွယ်ကူသောလွှတ်ပေးရန်, ငါ့ရည်းစားရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအဘို့ပိုပြီးကျေးဇူးတင်လေးမြတ်နည်းအရှက်ကွဲခြင်းနှင့်, ဖြစ်ကောင်းအရေးအကြီးဆုံးကတော့တစ်ဦးအပြုသဘောအလားအလာလိုသောမပါဘဲစိုက်ထူ, ပိုမိုအားကောင်းအစစ်အမှန်လိင် drive ကိုရေရှည်တည်တံ့။ ဘဝကပဲပတ်လည်ပိုကောင်းပုံရသည်!
သာငါ့အဘို့ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ဒါဟာဖြစ်ရဲ့ဒါပေမယ့်ငါအများကြီးပိုပြီးစွမ်းအင်ရှိသည်။ ငါသည်သင်တို့ကိုငါသိ၏လျော့နည်းစိတ်ဓာတ်နှင့်ပိုပြီးအခမဲ့ခံစားရသည်။ သငျသညျနှစ်နှင့်နှစ်ပေါင်းအဘို့ပြုပါတယ်ကြောင်းအရာတစ်ခုခုကျော် willpower ရှိသည်ဖို့နိုင်တော့မည်ဝမ်းသာပါတယ်။ ငါနေဆဲသော်လည်းတိုကျတှနျးထားရှိသည်။
ကျိန်းသေအာရုံနှင့် snappier သတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်တိုးတက်မှု။ ငါပြတ်သားသောကျေးများအဓိပ်ပာယျ, နေ့လူမှုရေးအပြန်အလှန်ငါ့နေ့ရက်ကာလ၌ပြတ်သားခံစားရတယ်, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတစ်ဦး punchy ပြန်ကြားချက်ကိုရှာဖွေရုန်းကန်နေရ / ကျက်မတှေ့ဘူး။
ငါ့အရယ်နည်းသောအဓမ္မပိုပြီးစစ်မှန်တဲ့ခံစားရ၏။ အခြားလူများရဲ့ပြုံးရယ်လည်းပိုပြီးစစ်မှန်တဲ့ပုံရသည်။ ငါတခြားသူတွေနဲ့ရှိတိုင်းစကားပြောဆိုမှုဖုံးအုပ်ကဒီအဆီပြန်ရုပ်ရှင်မရှိပါ။
အကြှနျုပျ၏ရည်းစားအစဉ်အမြဲငါနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဘာမှပြုသောအမှုဖွင့်ပထမဦးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ အတူတူကျနော်တို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးညဥ့်, ကငါ့ကိုယူ နှစ်နာရီ ဖြစ်ချင်, နှင့်မြေတပြင်လုံးအချိန်ငါပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပျော့သွားရချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်စရာသူမကအလွန်သနားတျောမူခဲ့, ငါချက်ချင်းသဘောပေါက် porn / အလွန်အကျွံတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေပြဿနာများ၏အမြစ်နားမှာအိပ်ပြီးမှ, ဒါကြောင့်ငါအအေးကြက်ဆင်နုတ်ထွက်။
နှစ်လအကြာမှာငါခက်ရနိုင်ခဲယဉ်းတော့ဘူးနေဖို့, အမှန်တကယ်လုပ်ရပ် (ပဲအော်ဂဇင်ရောက်ရှိဖို့တစ်ခုတည်းကိုသာကတဆင့်တွန်းအားပေးမဟုတ်) ၏အာရုံကိုခံစား, ငါ့ orgasm များမှာ စိတ်ကို-မှုတ်။ မယုံကြည်သောသူတို့ပြင်းထန်သော။ ကျွန်မသူမငါကိုချွတ်ရအပြီးမယ့်အမှုအရာကိုစောင့်ရှောက်ရန်လိုလားသည့်အခါစုံတွဲတစ်တွဲကြိမ်ရပ်တန့်ဖို့သူမကိုမေးခဲ့ပါတယ်။
ကမ္ဘာကြီးကိုငါဘယ်လိုရှုမြင်သလဲ။ သင်ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုမကြည့်သည့်အခါမတရားသကဲ့သို့မဟုတ်ပါ။ လှုံ့ဆော်မှုလည်းတက်ခူး။ အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုငါပြုပြီးပြီ။ ငါလည်းရှင်းတယ်ထင်တယ် ငါနောက်ဆုံးပြန်ရောက်လာသောအခါငါကျိန်းသေ ဦး နှောက်မြူပြောပြနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ SO အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါချက်ချင်းပဲပြောလို့ရတယ်။ ဒါကြောင့်တစ်ခုခုဖြစ်ရမယ်။
ကျွန်ုပ်၏ဒုတိယဘာသာစကားဖြစ်သောပြင်သစ်စကားကိုကျွမ်းကျင်စွာပြောနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုကျောင်းတွင်နှစ်ပေါင်းများစွာလေ့လာသင်ယူခဲ့ပြီးအဓိကဘာသာစကားဖြစ်သောတိုင်းပြည်တွင်နေထိုင်သော်လည်း၎င်းသည်စကားပြောသောအခါအမြဲတမ်းထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ အင်္ဂလိပ်စကားပြောတာကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိပြုမိလို့အဲဒီလိုပြောနေတာလည်းမသေချာဘူး။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်စာသားအတိုင်းလူများကိုယခုပင်ကျွန်ုပ်၏မိခင်ဘာသာစကားနှင့်ပြောဆိုနိုင်သည်။ စကားလုံးများကငါ့လျှာကိုလှိမ့်ချလိုက်ပြီးငါသည်လည်းထိတ်လန့်မသွားတော့ပါ။ မယုံ။ တကယ်ပဲ ပြီးတော့လူတွေကရဲရင့်ရင့်စွာပြောရရင် nofap ဟာမှော်ဆန်တာမဟုတ်ဘူး။
စူပါပါဝါ | Related အမျိုးသမီးမဟုတ်
[တစ်ဦးကအကြောင်းပြန်] ငါအချို့ထူးဆန်းတဲ့အရာတို့ကိုသတိပြုမိကြပါပြီ။ ငါဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုရင်ငါချွန်ထက်နေသေးတယ်လို့ငါမထင်ဘူး၊ ငါမထင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါစိတ်ဓာတ်ကျတာနဲ့ဆက်စပ်မယ့်ပုံမပေါ်ခင်မှာငါထင်ခဲ့တဲ့ပုံသဏ္componentာန်ရှိတယ်။ ဒါဟာငါ့အတွက်တော်တော်လေးအခြေခံကျတဲ့အရာလို့ခံစားရတယ်။ ဒါဟာဖော်ပြရန်ခက်ခဲပေမယ့်ငါခြားနားချက်သတိထားမိ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတစ်ခုခုဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့ခံစားရလို့ပါ။ ဒါ့အပြင်ငါ့အလှုံ့ဆျောမှုနှင့်ရည်ရွယ်ချက်၏ရှုထောင့်လည်းကွဲပြားခြားနားသောပုံရသည်။ ငါကဒီအချက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိပေမဲ့အရာရာကိုလုပ်ဖို့ငါ့ရဲ့လှုံ့ဆော်မှုကအခုအချိန်မှာကောင်းမွန်တယ်လို့ခံစားရတဲ့အရာတွေကိုလိုက်စားမယ့်အစား“ ပိုကြီးတဲ့ရုပ်ပုံ” အတွေးအခေါ်ကိုပိုပြီးအခြေခံတယ်။
ဒါဟာထူးဆန်းနေတယ်၊ ​​ဒါပေမဲ့ဒါကငါနှစ်လကျော်သွားတာဒုတိယအကြိမ်ပဲ။ အကြှနျုပျ၏ libido လာ။ သွားပေမယ့်ငါကလိုအပ်မယ်ဆိုရင်ငါကျိန်းသေယင်း၏ထိုအရပ်ကိုငါသိ၏။ porn, နောက်ဆုံးမှာအဘယ်သူမျှမတန်ဖိုးကိုရှိပါတယ်။ အတွေးကအခါအားလျော်စွာပြန်လာပေမဲ့ငါအများကြီးအများကြီးပြန်သွားဖို့မစဉ်းစားဘူး။ ငါအဲဒါကိုဆေးလိပ်သောက်တာနဲ့တူတယ်။ နှစ်ပေါင်းများစွာဆေးလိပ်ဖြတ်ပြီးသည့်နောက်ကျွန်ုပ်စွဲနေသေးမလားဆိုတာစမ်းကြည့်ဖို့စီးကရက်တစ်လိပ်ကိုငါစမ်းကြည့်ရမလား။ ဘယ်ဟုတ်မလဲ။ porn အားလုံးကွဲပြားခြားနားသည်မဟုတ်။ အဲ့ဒီအာရုံခံဆဲလ်တွေကအရမ်းအားကောင်းတဲ့အတွက်ပုံတစ်ပုံကသင့်ကိုအသည်းအသန်ပြန်ပို့နိုင်တယ်။
ဆေးလိပ်ဖြတ်ပြီးသည့်နောက်တွင်သူငယ်ချင်းများနှင့်စကားပြောခြင်းသို့မဟုတ်မိန်းကလေးများပြုံးသည်ကိုမြင်ခြင်းကဲ့သို့သောနေ့စဉ်အရာများသည်အဓိပ္ပာယ်အသစ်များစတင်ခဲ့သည်။ ငါထွက်ချင်တယ်, ပေါင်းသင်းချင်တယ်, ငါတို့ထိချင်တယ်၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ချင်တယ်၊ ငါအသက်ရှင်ချင်တယ်။ ၄ နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်ဒီခံစားချက်ကိုခံစားခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘ ၀ ဟာမှောင်မိုက်၊ ငြီးငွေ့စရာ၊ စိတ်ဓာတ်ကျစရာ၊ ပြီးတော့ငါသေတော့မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့တယ်။ ကြောင်း fuck ဆိုတဲ့; ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုစွန့်ခွါခြင်းကဘဝ၌ရှိသောအရာများအပေါ်ကျွန်ုပ်၏အတွေးအခေါ်ကိုပြောင်းလဲစေပြီး၎င်းသည်အလှည့်အပြောင်းနှင့်အချိန်နှင့်အမျှပိုမိုကြီးမားသောအကျိုးကျေးဇူးများရရှိစေလိမ့်မည်။
[နှစ်လ] ငါအများကြီးပြောင်းလဲသွားပြီနဲ့တူငါယခုအချိန်အထိဆိုလို, ငါခံစားရတယ်။ ရက်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ပြီးနောက်အပြောင်းအလဲစာရင်းကိုလုပ်ကြရအောင် -
–– ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားသည်၊ ကျွန်ုပ်သည် ပိုမို၍ ရပ်တည်မည်၊
- မိန်းကလေးတိုင်းနှင့်လိင်မဆက်ဆံလိုပါ။ အခုဆက်သွယ်မှုတစ်ခုလိုချင်တယ် အရင်တုန်းကငါ့ရဲ့စရိုက်က“ Get Sex!” ပဲ။
- ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်း၊ တစ်နေ့လုံးအွန်လိုင်းအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲကစားခြင်းကဲ့သို့သောအကျိုးဖြစ်ထွန်းသောအရာများကိုကျွန်ုပ်စိတ်မ ၀ င်စားပါ။ ကျွန်ုပ်၏ခန္ဓာကိုယ်သည်အလွန်များပြားလာသည်။ ငါ ectomorph လို့ထင်ရပေမယ့်အခုငါ ectomorph နဲ့ mesomorph ကြားမှာတစ်နေရာရာကိုကြည့်နေတယ်။
- ကျွန်ုပ်၏အသံသည် ပို၍ စိတ်သက်သာရာရပြီးကျွန်ုပ်၏အစာအိမ်ပတ် ၀ န်းကျင်အောက်ပိုင်းမှဆင်းသက်လာသည်။ မတိုင်မီက၎င်းသည်မြင့်မား။ အသံထွက်မသွားမီ - အခြားလူများမရှိသောအရာကိုဝေဖန်ခြင်းထက်လူများကိုတန်ဖိုးထားလိုသည်။ ငါကတစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တယ်
-Music သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်ကောင်းသောအသံဖြစ်သည်။ ဒါဟာစက္ကန့်များအတွက်အသက်ရှူစေနိုင်သည်။
- အခုကျွန်တော်ရေရှည်စဉ်းစားနိုင်ပြီ။ ကျွန်ုပ်ရက် ၉၀ အမှတ်အသားအတွက်ရက်စွဲကိုသတ်မှတ်ပြီးပါပြီ၊ ကျွန်ုပ်အားလုံးဝမကြောက်ပါ။ ငါခြိမ်းခြောက်ဘူး အဘယ်သူမျှမချက်ချင်းကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ပါတယ်အမှုအရာအလေ့အကျင့်ယူ။
ဒီ reboot လုပ်နေစဉ်အတွင်းကျွန်ုပ်သည်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုအော်ဂဇင်တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုခုရှိခဲ့သည့်အတွက်အလွန်ပျော်စရာကောင်းပြီးပျော်ရွှင်မိသည်။ သို့သော်ထို့နောက်ကျွန်ုပ်ကိုတစ်ယောက်တည်းထားခဲ့ရန်လူများကိုအော်ဟစ်။ အော်သည့်နေ့များရှိသည်။ ဒီ reboot လုပ်တာကိုရှုပ်ထွေးစေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်ငါကဒါနဲ့ကပ်လိုက်မယ်။
[တစ်လပြီးနောက်ပျော့-porn relapses ၏စုံတွဲတစ်တွဲနှင့်အတူ] ငါကိုယ်တိုင်စိတ်ခံစားချက်ပုံစံကိုရှာတွေ့ခဲ့သည် - ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီးနောက်တစ်နေ့သည်အလွန်ကောင်းသည်၊ များစွာသောစွမ်းအင်နှင့်အလွန်အကောင်းမြင်သူဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ၂-၃ ရက်အကြာတွင်ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ မောပန်းခြင်း၊ ပျင်းရိခြင်း၊ အကယ်၍ ကျွန်ုပ် (ဤအရာသည်ယခင်ကကျွန်ုပ်အမြဲတမ်းပျက်ကွက်ခဲ့သော) ဤအရာများကိုကျွန်တော်ဖြတ်သန်းသွားလျှင်ခက်ခဲသောအလုပ်များကိုလုပ်ဆောင်ရန်ဆန္ဒရှိသည့်အခါများသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ပုံမှန်ဖြစ်သည့်ပုံမှန်စိတ်ခံစားချက်ဖြင့်ဟန်ချက်ညီအောင်လုပ်သည်။ တစ်ခုတည်းသောကြီးမားသောခြားနားချက်မှာကာယလှုပ်ရှားမှုများအတွက်စွမ်းအင်ပိုမိုရရှိခြင်းဖြစ်သည်။
နောက်ထပ်သေးငယ်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကငါဟာအသစ်သောအရာတွေကိုကြိုးစားဖို့ပိုပြီးဆန္ဒရှိတယ်၊ ငါဟာငါ့ဆံပင်တွေကိုပြောင်းလဲဖို့နဲ့အဝတ်အစားအမျိုးမျိုးကိုစတိုင်လ်အမျိုးမျိုးနဲ့ဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်။ ငါနေ့တိုင်းနံနက်သစ်သားရပြီးအချို့အလိုအလျောက်စိုက်ထူမှုများလည်းတစ်နေ့လုံးဖြန်းနေသည်။ သို့သော်လည်းငါသည်အာနိသင်မရှိခြင်းခံစားခဲ့ရဘူး။ နေ့တိုင်းတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အချိန်၌ပင်နာရီအနည်းငယ်အကြာတွင်ပင်ကျွန်ုပ် ပို၍ တောင့်တခဲ့သည်။ ငါသော်လည်းနံနက်သစ်သားရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ ဒါကတကယ့်အပြောင်းအလဲပဲ။
(နေ့ ၅၃၅) အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ - ငါ PMO ကိုသုံးတဲ့အချိန်မှာငါအမြဲတမ်းနေမကောင်းဖြစ်ခဲ့တာ၊ တုပ်ကွေး၊ အအေးမိခြင်းစတာတွေကိုငါစွန့်လွှတ်လိုက်ကတည်းကတစ်နေ့တာဖျားနာမှုလုံးဝမရှိခဲ့ပါဘူး။ http://www.reddit.com/r/NoFap/comments/535qmg2g/woke_up_and_i_was_forty/
ငါပဲတီထွင်ဖန်တီးမှုစွမ်းအားမြောက်မြားစွာကိုတွေ့ပြီ လုပ်ရမည် တစ်ခုခုလုပ်ပါ ငါထိန်းချုပ်မှုဒါခံစားရတယ်, ဒါအစွမ်းထက်နှင့်ငါအာရုံစူးစိုက်သမျှသည်လုပ်နေတာနိုင်စွမ်းနိုင်အောင်။ ငါ porn ကိုကြည့်နေတုန်းမှာငါ porn ကိုကြည့်တာထက်ဘာမှလုပ်ချင်စိတ်မရှိ။ ဘဝဟာကျွန်တော့်အပေါ်လွှမ်းမိုးစေခဲ့တဲ့ခံစားချက်တွေနဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုသားကောင်လိုခံစားရတယ်။ ဒီတစ်ခါလည်းခဏလောက်စွမ်းအင်အနည်းငယ်ထွက်ပေါ်လာပေမဲ့မကြာခင်မှာပဲညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ဖို့တွန်းအားပေးမှုတွေကတဖြည်းဖြည်းများလာလိမ့်မယ်။
ရုံ hit 90 ရက်ကြာအမှတ်အသား yesterday အရာအားလုံးအရမ်းကောင်းနေပြီ၊ ဒါကြောင့်ငါဒီကိုလာပြီးဘာအကူအညီမှမရခဲ့ဘူး။ စိန်ခေါ်မှုလုပ်ခြင်းဟာငါဆုံးဖြတ်ခဲ့သမျှထဲမှာအကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုပဲ။ ယခုအချိန်အထိကျွန်ုပ်ရရှိခဲ့သောအကျိုးကျေးဇူးများ -
၁။ ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်း / မည်သို့ကြည့်ခြင်းမျိုးကိုလူတဒါဇင်ကျော်ကျော်မှတ်ချက်ပေးခဲ့ကြပြီ။
၂။ ရည်မှန်းချက်ပိုများလာပြီးအိမ်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်အလုပ်များများပြားလာပြီးဇနီးကိုပိုမိုပျော်ရွှင်စေသည်။
(၃) ပျော်ရွှင်သောဇနီးနှင့်ပိုမိုလွတ်လပ်သောအချိန်များသည်လိင်မှုထိမ်းမြားမှုပိုမိုများပြားသည်။ (ပြီးခဲ့သည့် ၃ လတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် nofap မတိုင်မီတစ်နှစ်ထက် ပို၍ လိင်ဆက်ဆံခဲ့ဖူးသည်) ။
(၄) ၀ န်ကြီးချုပ်အားလျှော့ချပြီးချိန် မှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးသည်မည်မျှတိုးတက်ကောင်းမွန်ကြောင်းကျွန်ုပ်မပြောနိုင်ပါ။ မယုံနိုင်လောက်အောင်ပါပဲ
(၅) အထွေထွေကျန်းမာရေးနှင့်စိတ်နေသဘောထားသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်ဟုထင်ရသည်။ ငါဟာငါ့ရဲ့လမ်းကိုပြန်လှည့်မသွားနိုင်ဘူးဆိုတာငါသိတယ်။ ဒါကြောင့်ငါဟာငါ့ကောင်တာကိုဆက်သွားမှာပါ။
ရက်ပေါင်း ၆၀ လောက်နေရင်ငါမျှော်လင့်ချက်မဲ့စိတ်ဓာတ်ကျမှုတွေပျောက်ကွယ်သွားပြီဆိုတာကိုငါအတည်ပြုနိုင်ပါပြီ။ လုံးဝသွားပြီ။ ထိုအခါငါဆင်းနေသောအချိန်များသောအားဖြင့်အလွန်ခဏဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, မကြာခဏငါအရာအားလုံးထက်ပိုပြီးစားသောအရာကိုမှဆင်းဖြစ်ကြသည်။ (ဒါကြောင့်အစာစားပါ။ ) ဒါကကျွန်မကိုစိတ်ဓာတ်ကျစေပါတယ်။
လာမယ့်အောက်တိုဘာလမှာသုံးနှစ်ကြာတဲ့ porn မပါဘဲလွန်ခဲ့တဲ့ ၁.၆ နှစ်လောက်ကစလစ်ကိုထည့်မတွက်ခဲ့ဘူး။ ရံဖန်ရံခါငါအနည်းငယ်ယခုဆွဲ, နေဆဲအနည်းငယ်မဟုတ်ခံစားရတယ်။ လွန်ခဲ့သောတစ်လခန့်ကကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းသောဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုတွေ့သည်။ ချိတ်ဆက်မှုအမျိုးမျိုးကိုတွေ့မြင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းတို့ထဲမှမည်သည့်ကလစ်ကိုမဆိုလိုက်ရန်ဆန္ဒမရှိကြောင်းသတိပြုမိသည်။ အဲဒီလင့်ခ်တွေမှာအရမ်းဂရပ်ဖစ်ဓာတ်ပုံတွေရှိလို့ကျွန်တော်တော်တော်အံ့အားသင့်မိတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲ့ဒီပုံရိပ်တွေကိုတစ်ချိန်ကတည်ရှိခဲ့တဲ့ကြီးမားတဲ့သံလိုက်ဆွဲအားကအဲဒီမှာမရှိခဲ့ဘူး။ ဒါကတကယ့်ကိုကောင်းတဲ့ခံစားမှုပဲ။
သူငယ်ချင်းတွေမရှိတဲ့အထီးကျန်မှုကကျွန်မကိုအမြဲတမ်းစိတ်ဓာတ်ကျစေတယ်၊ ​​အဲဒါကကျွန်တော့်ကိုပြန်အသက်ဝင်စေခဲ့တယ်။ ညစ်ညမ်း / တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရှောင်ရှားဖို့ရုန်းကန်နေရတာ ၂ နှစ်နီးပါးရှိပြီ။ ဒီနေ့ခေတ်ငါ PMOing မဟုတ်တဲ့အချိန်မှာအံ့သြစရာကောင်းတယ်။ ငါကောင်းကောင်းအိပ်တယ်၊ စွမ်းအင်ပိုရတယ်။ ၁-၂ လလောက်မှာငါဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းခံစားရတယ်၊ ငါဟာတကယ်ပဲဘယ်သူလဲဆိုတာငါအာရုံစိုက်ခဲ့တယ်။ သို့သော်စိုစွတ်သောအိပ်မက်များ၊ အော်ဂဇင်မပါဘဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအိပ်မက်များနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းတို့သည်နောက်တစ်နေ့တွင်ထပ်မံသက်ရောက်သွားပုံရသည်။ တဖန်ငါကောင်းသောခံစားမှုကိုခံစားချင်တယ်, ဒါကြောင့်ငါကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုဆက်လက်သွားတယ်။
[depersonalization forum တွင်တင်သည်] ကျွန်ုပ်တွင် DP ၁.၅ နှစ်ရှိခဲ့သော်လည်း My DP သည်လွန်ခဲ့သော ၃ လခန့်ကထက်ပိုမိုကောင်းမွန်လာခဲ့သည်။ ငါပြန် 1.5% အကြောင်းကိုပုံမှန်ဖြစ်၏။ ငါ DP တီထွင်သောအခါ, ငါ့ porn အသုံးပြုမှုအတော်လေးတိုးမြှင့်ကြောင်းသတိပြုမိသည်။ ငါနေ့တိုင်းသို့မဟုတ်အခြားနေ့က porn ကိုစတင်စတင်ခဲ့ပြီး, ငါအတော်လေးအစွန်းရောက်ပစ္စည်းပစ္စယကိုကြည့်ခဲ့သည်။ ထို ဦး နှောက်မှေးမှိန်နေသောအခြေအနေတွင်ကျွန်ုပ်၏ဘ ၀ ၌ဘာမှမသိခဲ့ပါ။ အရာအားလုံးဟာအိပ်မက်လိုခံစားခဲ့ရပြီးဒီပုံစံကိုကျွန်တော်သတိမပြုမိခဲ့ဘူး။
ငါလူမှုရေးစိုးရိမ်စိတ်များနှင့်စိတ်ကျဝေဒနာဆက်စပ်လျက်ရှိအလွန်အကျွံ porn အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးတစ်ခုခုဖတ်ပါ။ ငါကငါရပ်တန့်စေတဲ့ကောင်းသောစိတ်ကူးဖြစ်စေခြင်းငှါဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ အစပိုင်းမှာငါသာ3ရက်သတ္တပတ်တွေအကြောင်းကြာပြီးတော့ပြိုကျခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး, နှစ်ဦးစလုံးသို့အကြီးအကျယ်ပြန်ရတဲ့ (: P ကိုငါဆုံးရှုံးခဲ့ရအကြိမ်တက်စေခဲ့) ။ သို့သော်လည်းငါသည်သူတို့အ3ရက်သတ္တပတ်အတွင်းမှာတစ်ခုခုကိုသတိပြုမိသည်။ ငါနေဆဲက hard လူတို့နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ကိုတွေ့ပေမယ့်, ငါ့လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုသိသိသာသာလျော့နည်းသွားခဲ့ကြသည်။ ငါလူတို့နှင့်အတူစကားစမြည်မျှပြဿနာရှိနိုင်တယ်လို့နဲ့ကျွန်မယေဘုယျအားဖြင့်အသက်တာကိုအကြောင်းပိုမိုစိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ ငါငါ့ကိုအသက်အရွယ်အဘို့ရယ်ကိုဖန်ဆင်းသောအရာတစ်ခုခုပြောပြငါ့အစ်ကိုသတိရနှင့်တကယ့် DP နေရခြင်းကြောင့်ခံစားရရန်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ခံစားရတယ်။
ငါအောင်မြင်စွာကြားနေတစ်လအဘို့, နှင့်သစ်တွေဖွဲ့စည်းအတွက်, ငါ့ဆက်ဆံရေးအတွက်အဆအမြတ်သတိပြုမိသည်။ ကျွန်မအာရုံစိုက်နှင့်ပန်းတိုင်ကိုသတ်မှတ်, သူတို့ကိုပြီးမြောက်ဖို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားခဲ့ပါတယ်, အသက်ကိုရတတ်အတွက်နည်းနည်းအရာရာ၌ပျော်မွေ့ရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ အကြှနျုပျ၏ Achilles ဖနောင့်ငါသညျဤအရာနှင့်အတူတိုက်ပွဲကျော်နှင့်တစ်လမှငါ့ကိုတယ်ဘယ်အရာကိုစွန့်ပစ်ထင်ခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်မနှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်ရေးအတွေ့အကြုံရှိသည် ADHD နဲ့နေ့စဉ် porn ကြည့်နှင့်အတူ compulsive အပြုအမူနှစ်ဦးစလုံး။ ငါ ADHD (inattentive အမျိုးအစား) ရှိသည်။ သုတေသနနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအတွေ့အကြုံအပေါ် အခြေခံ၍ ADHD ၏အခြေအနေသည် dopamine hits ကိုပေးသည့်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူကို ဦး စားပေးသည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ ADHD သည် dopamine နိမ့်သောအခြေအနေ ဖြစ်၍ ယေဘူယျအားဖြင့်လှုံ့ဆော်မှုသည်ပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုကလေးငယ်တစ် ဦး အဖြစ်မိမိကိုယ်ကိုသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေရန်အသုံးပြုခဲ့ပြီး၊ အရွယ်ရောက်သူအဖြစ် porn ကိုဆက်လက်သုံးစွဲခဲ့သည်။
ငါလုံးဝ porn သုံးပြီးရပ်တန့်ပြီ, ဟုတ်တယ်, ငါနေဆဲ ADHD ရှိသည်။ သို့သော်ငါသည်ကိုယ်အကြောင်းကိုလမ်းပိုကောင်းခံစားရသည်။ အကြှနျုပျ၏ယုံကြည်မှု, အသက်ရှင်ခြင်း၌ငါ့ဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုအတွက်ပိုပြီးခံစား၏စည်းကမ်းချက်များ၌, သိသိသာသာတိုးတက်ခဲ့သည်။ အခုတော့ကျွန်မပိုပြီးတိုက်ရိုက်ငါ၏အ ADHD ဖြေရှင်းလို့ရပါတယ်။
ဒါဟာ2လနီးကပ်လာပြီရဲ့ (60 ရက်) အခုတော့အော်ဂဇင်၊ တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းမရှိဘဲ၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုတောင်မကြည့်ဘဲနေတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းလဲမှု (ကျွန်ုပ်သည်အိမ်မှ ထွက်၍ ကွန်ပျူတာစားပွဲနှင့်ထိုင်ခုံမှထွက်ခွာကာအိမ်၌တကိုယ်ရည်ရာဂစိတ်ဖြေသည့်ခုံမှထွက်ခွာသွားသည်) သိသိသာသာကူညီခဲ့သည်။ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့အကူအညီကအများကြီးကူညီပေးခဲ့ပြီ။ အဆိုပါစိတ်ခံစားမှုများနှင့်ခံစားချက်များကိုရုံမကြာသေးမီကသွန်းလောင်းနေကြသည်။ ငါနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းဂရုစိုက်တတ်တဲ့အံ့သြဖွယ်မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့နီးကပ်လာပြီ၊
(နေ့ 125 ။ ခေတ် 50 +ခံ pm တွင်အခမဲ့၏) အကျိုးကျေးဇူးများ:
1 ။ အမြဲလိင်အကြောင်းကိုစဉ်းစားအတူစားသုံးဘူး။ အဖြစ်မကြာမီငါကွန်ပျူတာကိုဖွင့်, ငါ့အီးမေးလ်, ခေါင်းစဉ်သတင်းနှင့်မည်ကဲ့သို့ငါ့အကြိုက်ဆုံးအားကစားအသင်းများကိုလုပ်နေခဲ့ကြသည် check လုပ်ထားပြီးမှကျွန်မရဲ့နေ့စဉ်ပြင်ဆင်ချက်အရချွတ်ငါ့ "အကြိုက်ဆုံး" porn sites များဖို့ပဲ။ အဖြစ် နေ့ကိုပေါ် မူတည်. က porn မူးရူးတက်အဆုံးသတ်နိုင်ပါတယ်။
2 ။ ငါအဘယ်သူမျှမရှည်လျားတဲ့ဒေါသထွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးပေါ့။ ငါသမျှလုံးဝအကြောင်းပြချက်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော့်ဇနီးမှာ ... သူကငါ့ကိုစိတ်ဆိုးစေခြင်းငှါမယ်လို့ porn watched အခါတိုင်း။ ကျွန်မသူမကိုကြည့်သို့မဟုတ်ငါကြည့်သောရုပ်ရှင် / ဗီဒီယိုအပိုင်းများကိုထဲမှာမိန်းမကဲ့သို့ထွက်ပြုမူဘူးသောကွောငျ့စဉ်မှာငါညံ့ဖျင်းသူမ၏ကုသခံခဲ့ရသည်ထင်ပါတယ်။
3 ။ ငါမြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းငါ့စွဲလမ်းမှုကြောင့်ပြီးခဲ့သည့် 18 လကြာခဲ့ ED ပြဿနာတွေတော်တော်များများအားလုံးသွားပြီဖြစ်ပါသည်။
4 ။ တိုးတက်လိင်ဘဝက။ ကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့ကျွန်မအကြီးလိင်ခံစားနေကြသည်။ ကျနော်တို့ Karezza ထည့်သွင်းထားပါသည်ကြောင့်နှင့်အတူလိုက်သော Bond အပြုအမူတွေကိုခံစားနေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ lovemaking နှေးကွေးနှင့်အာရုံငါးပါးဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့စိတ်ပိုင်း, စိတ်ခံစားမှုကိုဆက်သွယ်ထားသောနှင့်ဝိညာဉ်ရေးမှာနေကြသည်။
5 ။ ပိုပြီးအလုပ်ငါပြုရ။ ငါ porn ကြည့်ရှုအွန်လိုင်းအချိန်ဖြုန်းမရင့်ကတည်းကငါကပိုအလုပ်အမှုကိုပြုရ။ တကယ်တော့ငါလမ်းရှေ့ကိုငါ့အချိန်ဇယားကိုငါ့ "ပျားရည်-do ရဲ့" စနေနေ့ / တနင်္ဂနွေမတိုင်မီပြုအများအပြားနိုင်အောင်ပါပဲ - ငါဘောလုံးကွညျ့ရှုနိုငျဆိုလိုတာက !!
6 ။ အမြိုးသမီးမြားအဘယ်သူမျှမရှည်လျားတဲ့ရိုးရှင်းစွာလိင်အရာဝတ္ထုအဖြစ်ရှုမြင်နေကြသည်။ ငါမရှိတော့အမျိုးသမီးတွေမှာရှာဖွေနေနှင့်သူတို့အဝတ်အချည်းစည်းနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သူတို့အိပ်ရာအတွက်နဲ့တူနေတူအောင်အဘယ်အရာကိုအံ့သြတယ်။ ယခုတွင်ငါသည်အမျိုးသမီးအဖြစ်သူတို့ကိုမြင်နှင့်၎င်းတို့၏အပြင်ဘက်နှင့်အတွင်းပိုင်းအလှတရားတန်ဖိုးထားဖို့စတင်နေပါတယ်။
7 ။ ငါ 30 နှစ်ပေါင်းငါ၏မယားကိုအသစ်တခုမေတ္တာနှင့်နျဖိုးထားရှိသည်။ ငါမရှိတော့ညစ်ညမ်းမှာကိုရှာနေပါတယ်သောကြောင့်, ငါတို့သည်အိပ်ခန်း၏အတွင်းနှင့်ထွက်နှစ်ဦးစလုံးပိုမိုနီးစပ်ခြင်းနှင့်စုံတွဲအဖြစ်အတူတူအမှုအရာလုပ်နေတာခံစားနေကြစိုက်ပျိုးကြသည်။
8 ။ ငါလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ်တစ်ခုလုံးအများကြီးပျော်ရွှင်မိပါတယ်!
9 ။ လှတျလပျမှု !!! ငါသည်ကိုယ်အသက်ကိုပြန်ရတယ်။ ငါမရှိတော့ငါ့အစွဲတစ်ခုကျွန်ပေါ့!
10 ။ ကြှနျတေျာ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာပိုပြီးဗိုင်းရပ်စ်အဘယ်သူမျှမ
ယနေ့ ၁၂ နှစ်လောက် ၁၂ ရက်လောက်အသုံးပြုပြီးသည့်နောက်ကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံးရက်သတ္တပတ်သည်ယနေ့ဖြစ်သည် (ကျွန်ုပ်အသက် ၂၆ နှစ်) ။ ပိုက်ကွန်ကိုကြည့်နေစဉ်အတွင်းလိင်မှုနှိုးဆွသောအရာမှန်သမျှကိုကျွန်ုပ်ရှောင်ရှားပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားနှင့်ပိုမိုရင်းနှီးရန်အတွက်။ အဲဒီအချိန်ကတည်းကငါတို့တစ်ချိန်ကလိင်ဆက်ဆံခဲ့ဖူးတယ်၊ အဲဒါဟာအရင်ကထက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး၊ နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော့်ရဲ့ခြောက်နှစ်ကြာဆက်ဆံရေးကိုပျက်စီးစေခဲ့တဲ့ကျွန်မရဲ့ညစ်ညမ်းစွဲလမ်းမှုဆိုတာကိုသဘောပေါက်ဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ ငါတကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မရဲ့လက်ရှိရည်းစားနဲ့ကျွန်မဟာတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ပိုပြီးတော် ၀ င်ကြလို့ပါ။ ၂ နှစ်ကတည်းကသူနဲ့ကျွန်တော်ပါ ဒါပေမယ့်နံပါတ် (၂) ကငါ့ရည်းစားဟောင်းထက်လိင်မှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများကြီးပိုကောင်းပြီးပိုမိုကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့အတွေးတွေရှိခဲ့တာကိုတွေ့ရတော့ကြောက်စရာပဲ၊ ငါတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာအရင်ကလိုပုံစံမျိုးနဲ့ယိုယွင်းနေတယ်။
ငါအိပ်မပျော်တာကိုအများကြီးမမှီဘူး။ ငါနံနက်ယံ၌ထနသောကြောင့်, Over- မောသို့မဟုတ်တစ်နေ့စတင်ရန်စိတ်မခံစားရဘူး။ ငါအရင်ကလိုအပ်ခဲ့တဲ့6နဲ့နှိုင်းယှဉ်လျှင်9နာရီအိပ်စက်ခြင်းကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါတယ်။
တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်တကယ့်ကိုနက်နဲသောအရာဖြစ်ပေသည်။ လူများသည်၎င်းသည်ကျန်းမာခြင်းနှင့်လူသားလိုအပ်မှုအကြောင်းပြောဆိုလိုကြသည်။ အချို့သူများအတွက်ထိုသို့ဖြစ်မည်ဖြစ်သော်လည်းအထူးသဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ပေါင်းစပ်သောအခါ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုဖြတ်တောက်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏စွမ်းအင်၊ အသားအရေကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးမျက်လုံးအောက်စက်ဝိုင်းများကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေသည်။
နောက်ထပ် NoFap အကျိုးအတွက်: သာ. ကောင်း၏သီချင်းဆိုကျွမ်းကျင်မှု😀
ကျွန်ုပ်၏အသံသည် ပို၍ ကျယ်လောင်။ ပိုမိုအားကောင်းသည်၊ အတိတ်ကာလကကျွန်ုပ်စာသားအတိုင်းထုတ်ခဲ့ရသည် (အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်၏အသံသည်တိတ်ဆိတ်နေသည်) အချို့သောအသံများ၊ အထူးသဖြင့်ပိုမိုမြင့်မားသောအသံများယခုသွားရန် ပို၍ လွယ်ကူလာသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်သီချင်းသည် ပို၍ ပျော်စရာကောင်းသည်။
အကြိမ်ပေါင်းများစွာ (3 ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်းရက်ပေါင်းများစွာကိုဆက်တိုက်အလင်းတန်းများဖြာပေါ်မယ့်) ကြိုးစားနေခြင်းနှင့် nofap ပျက်ကွက်နောက်မှငါနောက်ဆုံးတော့အတူတကွအနည်းငယ်ပိုရှည်အလင်းတန်းများဖြာတင်ပါပြီ။ နှင့်မိန်းကလေးများနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်စိတ်ခံစားမှုန်းကျင်ရူးယုံကြည်မှုထက်အခြား, ငါ့ကိုရန်မ FAP ၏အဓိကအကျိုးခံစားခွင့်အနေနဲ့ဝက်ခြံကုသမှုအဖြစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤအဆက်တိုက်ကြာမြင့်စွာအလင်းတန်းများဖြာပြီးနောက်ငါ့မျက်နှာကိုနီးပါးလုံးဝရှင်းရှင်းလင်းလင်းပါ! နှင့်ဤနီးပါး Accutane သွားသူတစ်ဦးအနေဖြင့်လာမယ့်နေပါသည်! NoFap ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ်အကြှနျုပျကိုပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။ ငါတန်ချိန်ရှိခြင်းမရှိမိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိခြင်းကနေသွား၏။ ကျွန်မပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှိဘဝကိုမြှင့်တင်ရန်ကြိုးစားနေမည်သူမဆိုမှ nofap အကြံပြုပါသည်။ http://www.reddit.com/r/NoFap/comments/2r19al/nofap_the_miracle_acne_treatment/
ငါ့အတွက်မရှိတာရဲ့အဓိကအကျိုးကျေးဇူးကတော့ဝက်ခြံပျောက်ဆေးပဲ။ ဒီဆက်တိုက်ရှည်လျားသော streak ပြီးနောက်ငါ့မျက်နှာနီးပါးလုံးဝရှင်းပါတယ်! ဒီဟာက Accutane ကိုသွားတဲ့လူတစ်ယောက်ဆီကလာတာပဲ။
လွန်ခဲ့သောတစ်ပတ်ကျော်ကကျွန်ုပ်၏လိင်တံ၌အစက်အပြောက်အချို့ကိုသတိပြုမိခဲ့သည်။ ဒါဟာအနည်းငယ်ပင့်ကူသို့မဟုတ်ယားယံခံစားခဲ့ရပေမယ့်မဆိုး။ အဆိုပါခံစားမှုလာ။ သွားလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘေးကင်းရာကိုရောက်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစမ်းသပ်ခဲ့တယ်။ ငါ HIV, ဆစ်ဖလစ်, gonorrhea နှင့်ကလျမီဒီရာများအတွက်စစ်ဆေးခံခဲ့ရသည်။ သွေးနမူနာ, ဆီးနမူနာနှင့်နှစ်ခု penile swab ။ အားလုံးမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းမရှိသလောက်ကျွန်တော်ဆယ်ကျော်သက်တုန်းကဖော်ပြခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေထက်နာကျင်မှုမရှိခဲ့ပါဘူး။ သူနာပြုတစ် ဦး ပြောတာကသဘာဝဂျူးမျိုးစိတ်များကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့်အနေဖြင့်၊ အရာအားလုံးပြီးနောက်။
အခုငါပြန်မစခင်ဒီအကြံဥာဏ်ကိုအရူးအဖြစ်လျစ်လျူရှုမိလိမ့်မယ်။ ငါ့လိင်တံကိုရေချိုးခန်းဂျယ်လ်နဲ့မဆေးဘူး။ ဒါပေမယ့်ငါနနွင်းနုပ်ဟာသုတ်ရည်ခြောက်သွေ့မှုကြောင့်ဖြစ်တာကြာပြီဆိုတာငါသိတယ်။ သုတ်ရည်လွှတ်ပြီးသည်နှင့်၎င်းကိုများသောအားဖြင့်လိင်တံမှထုတ်။ အဆင်ပြေသည်။ သို့သော်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အခါကျွန်ုပ်၏လိင်တံကိုဒေါင်လိုက်ထိန်းထားနိုင်ပြီးအချို့သောသုတ်ရည်များသည်ကျွန်ုပ်၏လိင်တံ၏ ဦး ခေါင်းကိုအမြဲတမ်းရောက်ရှိသွားလိမ့်မည်။ ရေလောင်းခြင်းမခံရဘဲနာရီအနည်းငယ်အထိပင်အရေခွံထဲ၌ကျန်ရစ်လျှင်၎င်းသည်တော်တော်ဆိုးရွားသွားလိမ့်မည်။
ညစ်ညမ်းမှုကိုသုက်မဖြစ်စေခြင်း၏ကောင်းခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏အနံ့သည်လုံးဝကြားနေခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ယခုအချိန်တွင်၎င်းကိုနေ့စဉ်ဂျူးနှင့်ရေချိုးခြင်း (ရေမွှေးရနံ့မဟုတ်သည့် gel gel) များအစားကျွန်ုပ်သည်ရေစိုကိုဆွဲ ယူ၍ ရေခေါင်းကိုရေဖြင့်ပစ်ခတ်နေခြင်းသာဖြစ်သည်။ ဂျယ်လ်၊ ဆပ်ပြာသို့မဟုတ်အခြားအရာများမရှိပါ။ ဒါဟာတကယ်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ပါတယ် ငါအာရုံကြောဓာတုပရမ်းပတာနှင့် ဦး နှောက်မြူခံစားနေရပြီးမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ငါအမြဲပြုသကဲ့သို့သန့်ရှင်းခံစားရသည်မဟုတ်လျှင်မပို။
ကျွန်မလက်သည်းကိုက်တာတွေရပ်လိုက်တယ် ငါကအချိန်ကြာမြင့်စွာတက်ယူ။ ဖယ်ရှားပစ်မရနိုငျသောစကားမပြောနိုင်သောအလေ့အထ ငါအပတ်တိုင်း2တိုင်အောင်ဤအချက်ကိုမသိခဲ့ပါ
ဒါကိုဖြည်းဖြည်းချင်းယူကြည့်ရအောင်။ သင်အများကြီးရှုပ်ထွေးပုံရသည်! ငါနှင့် nofap မှခံစားရသောအကျိုးကျေးဇူးအချို့ကို ဦး စွာရှင်းပြပါမည်။ ကျွန်တော့်အရှည်ဆုံးက ၂၁ နှစ်ပါ။ အဲဒီ ၃ ပတ်အတွင်းမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်။ အရေးကြီးတာကငါ nofap နဲ့ noporn ကိုအတူတူပဲယူတာပါ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့အနည်းဆုံးတော့ငါ့အတွက်တစ်ယောက်ကအခြားတစ်ယောက်အတွက်လမ်းခင်းပေးတာ။ ဒီတော့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန် ...
စွမ်းအင်ပိုများလေ၊ ငါခံစားချက်ရလာရင်အကောင်းဆုံးခံစားချက်ကအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ ငါကုန်ထုတ်စွမ်းအား၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဤမျှလောက်ပြီးမြောက်။ လိင်အကြောင်းလုံးဝမစဉ်းစားရန်အရေးကြီးသည်။ သင့်စိတ်ထဲအတွေးတစ်ခုပေါ်လာတိုင်း၎င်းကိုအခြားနှိုးဆွမှုမရှိသောအစားထိုးတစ်ခုဖြင့်အစားထိုးပါ။ ဤနည်းဖြင့်သင်သည်သင်၏အတွေးများကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး 'မင်းဟာသင်ထင်သလိုပဲ' ငါတို့အားလုံးသိကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ pussy ကိုစဉ်းစားခြင်းအားဖြင့်သင်သည် pussy ဖြစ်လာသည်
ပိုကောင်းတဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်။ ရှုပ်ထွေးတဲ့သင်္ချာဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာပြproblemsနာများကိုအလွယ်တကူယူနိုင်ပြီးအခြားသူများ၏အကူအညီမပါဘဲကျွန်ုပ်၏အိမ်စာအားလုံးကိုရှင်းနိုင်သည် ကဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခဲ့သည်မတိုင်မီသွားရမည်။ ပိုအရေးကြီးတာကလူတွေဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးတဲ့အခါနာမည်တွေကိုမှတ်မိပြီးလွယ်လွယ်ကူကူအာရုံမပျံ့လွင့်အောင်လုပ်နိုင်တယ် ဤသည်ကျိန်းသေသင့်ရဲ့ ADHD ကူညီပေးပါမည်
ပိုကောင်း, တိုတောင်းအိပ်စက်ခြင်း။ ငါအနားယူခံစားရရန် 9.5 နာရီမလိုအပ်ခင်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာ ၆ ရှိပြီ၊ ဒါပေမယ့် ၃ ပတ်လောက်ရောက်တဲ့အခါ ၅.၅ နာရီအိပ်စက်အနားယူတော့မယ်။ ပိုပြီးကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းအိပ်မက်များ။ သူတို့ဟာရုပ်ရှင်တွေလိုပဲငါညတိုင်းနီးပါးသူတို့ကိုရှိသည်။ ဒါကြောင့်6လတစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့သည်မီ။ ငါအရမ်းပင်ပန်းတော့ဘူး။ ဘယ်လောက်ပဲငါဘယ်လောက်ပဲအိပ်နေပါစေငါဟာအမြဲတမ်းမောပန်းနေတတ်တယ်။
ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောအသံနှင့်ပိုမိုသောကြွက်သားထုများ။ ဒါကကိုယ့်အကြောင်းပဲ။ Testosterone ဟော်မုန်းကအလဟ doesn't ဖြစ်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါ့ကြောင့်သင့်ရဲ့ယောကျာ်းလေးကိုဇီဝကမ္မဗေဒကိုသတ်မှတ်ခြင်းလိုအသုံးဝင်တဲ့အရာအတွက်လည်းအသုံးပြုနိုင်တယ်။
ယုံကြည်မှု။ လမ်းပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တဲ့အခါငါမသက်မသာတော့ဘူး။ ငါကဘယ်သူ့ကိုမှစကားမပြောနိုင်၊ မိန်းကလေးတွေလည်းထိတ်လန့်စရာမလိုဘဲရှက်တတ်တယ်။ ငါမာနထောင်လွှားလာတာမဟုတ်ဘူး၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသူတစ်ပါးနဲ့ခြေရာခံတာကိုပဲတန်ဖိုးထားတယ်၊ လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုလုံးဝပြတင်းပေါက်ထဲကပျံသန်းခဲ့သည်။
ငါပိုပြီးရည်မှန်းချက်ကြီးနှင့်လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်၏။ ကျွန်ုပ်တွင်ရည်မှန်းချက်တစ်ခု> တစ်ခုသို့ရောက်ရှိရန်ရည်မှန်းချက်များရှိပြီးကျွန်ုပ်တစ်ခုခုကိုလုပ်ဆောင်သောအခါမိမိကိုယ်ကိုအကောင်းဆုံးပေးသည်။ ငါမလုပ်နိုင်တော့ဘူး၊ ဒါမှမဟုတ်အရမ်းခက်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်မရှိတော့ဘူး။ ငါ '' ဟုတ်တယ်၊ ဒီ shit ကိုလုပ်ကြစို့ '' တဲ့သဘောထားရှိတယ်။
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းစဉ်းစားတွေးခေါ်။ နောက်ဆုံးတော့ငါဟာလူသားတစ်ယောက်လိုခံစားရတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကစဉ်းစားပြီးအရာတွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလို့ရတယ်။ ကိုယ့်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်။ မရနိုင်သောစိတ်ထဲမှေးမှိန်နေသောအတွေးများမရှိတော့ပါ
ဒါပမေဲ့အံ့သွအလုံအလောက်ငါ့နှာခေါင်းတော့မပြေးတော့ပါ အခုငါအသက်ရှူနိုင်ပြီးပိုပြီးလုံလောက်တယ်။ ငါပြေးတဲ့အခါငါငါ့နှလုံးပေါက်ကွဲသွားခဲ့ပါသည်ခံစားခဲ့ရမီ။ ညစ်ညမ်းမှု / နှလုံးခုန်ခြင်းနှင့်နှလုံးအားနည်းခြင်းတို့အကြားဆက်စပ်မှုရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ခံစားမိသည်။
nofappers နှင့် lurkers မင်္ဂလာပါကိုယ့် 30 ရက်ပေါင်းနှိပ်ပါ။ yeeeah မော။အိုကေ။ ငါပြောချင်တာတွေအများကြီးရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါကခေတ္တခဏစောင့်ကြည့်ဖို့ကြိုးစားမယ်။ ငါကတခြားဘာမှမပြောခင်မှာငါပြောချင်တယ်။ nofap ကငါ့ပြissuesနာတစ်ခုခုကိုမဖြေရှင်းနိုင်ဘူး။ သူတို့ကိုငါရှိနေသေးတယ်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်အကျိုးကျေးဇူးများခံစားခဲ့ရသည်။
ပထမ ဦး စွာပယ်, ငါနောက်ဆုံးတော့နောက်တဖန်စွမ်းအင်ရှိသည်! ငါအထက်တန်းကျောင်းကတည်းကဒီကောင်းသောအရာမခံစားရဘူး။ ဒါဟာငါ Hulk မဟုတ်သလိုဘာမှမဟုတ်ပေမယ့်နောက်ဆုံးတော့ငါပစ္စည်းပစ္စယလုပ်ဖို့အပိုစွမ်းအင်ရှိသည်။ ကျွန်တော်အသက် ၂၀ ကျော်အစောပိုင်းအများစုကိုစွမ်းအင်နိမ့်ကျခြင်းနှင့်စိတ်ကျဝေဒနာခံစားခဲ့ရသည်။ ငါက 20% တူသောငါတစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ် PMOing ခဲ့ကွောငျးမှဖော်ပြသည်။ အခုငါရပ်လိုက်ပြီ၊ ငါလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တယ်၊ လူမှုရေးအရပိုပြီးများပြီးယေဘုယျအားဖြင့်ဘဝကိုပျော်မွေ့နေတယ်။
တကယ်အားလုံးအမျိုးသမီးတွေအပေါ်တူး။ နေရာတိုင်းမှာအမျိုးသမီးတွေရှိတယ်။ အတော်များများကအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဖြစ်ကြသည်။ ငါ PMOing အဆက်မပြတ်သောအခါငါ ဦး ခေါင်း၌အမျိုးသမီးများကိုဝေဖန်ချင်ပါတယ်။ လိုပဲသူတို့ဘယ်လိုဆွဲဆောင်ကြဘူး။ အခုငါ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကငါဘယ်သူကိုဆွဲဆောင်တယ်ဆိုတာငါ့ကိုပြောပြရုံသာမကအချို့ကငါ့ကိုအံ့အားသင့်စေတယ်။
တနည်းကား, ငါမှော်ကြီးမားတဲ့ကစားသမားမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ငါ့ကို၏အစိတ်အပိုင်း is အမျိုးသမီးများနှင့်အဆင်ပြေလျှင်လက်လှမ်းမီရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ ထိုအခါငါအများကြီးပိုသတ္တိရှိသည်။ ငါထင်တာကကြောက်ရွံ့မှုကနေဆန္ဒကိုဆန့်ကျင်လာတယ်လို့ထင်တယ်၊ ကြောက်ရွံ့မှုများစွာသည်မပြောင်းလဲသေးပါ။ သို့သော်ဆန္ဒသည်နောက်ဆုံးတွင်ဟန်ချက်ညီနေပြီဖြစ်သည်။ ထိုကြောက်မက်ဘွယ်သောခံစားမှုပါပဲ။
တတိယ၊ အရေးအကြီးဆုံးကတော့နောက်ဆုံးတော့ငါ့ဘဝအတူတူရှိနေပြီ။ ကျွန်ုပ်၏အလုပ်သည်စိန်ခေါ်မှုနှင့်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏စိန်ခေါ်မှုများကိုရင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့သည်။ ငါ့ရဲ့စွမ်းအင်ကို nofap ကလှုံ့ဆော်ပေးတဲ့အရာဟာအများကြီးပိုဖြစ်နိုင်တယ်။ ငါပိုကြီးပြီးပိုကြီးစဉ်းစားတယ်!
ကိုယ်အဘို့ငါလုပ်ခဲ့တယ်အကောင်းဆုံးအရာအလုပ်များဖြစ်ဖို့ပဲ။ ငါများသောအားဖြင့်ငါ၏အစွမ်းအင်ချန်နယ်ကောင်းတစ်လမ်းရှိသည်။ ဒါဟာအများကြီးပိုလွယ်ပြန်သွားကြသည်မဟုတ်စေသည်။ လေ့ကျင့်ခန်းအပိုစွမ်းအင်ဖြုန်းဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ငါတစ်ချိန်ကယခုပြန်ရောက်ပြီ ငါကရှေ့ကနေကြောင့်ဖြစ်သည်။ DONT EDGE ။ မလုပ်ပါနဲ့
ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်ယခုအချိန်အထိတွေ့ရှိခဲ့သည့်အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းလူမှုအဖွဲ့အစည်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ မင်းတို့ယောက်ျားတွေ၊ ငါ့ကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့သူတိုင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါပြန်ပေးဖို့ကြိုးစား!
ငါ post လုပ်ချင်ပေမယ့်မေ့လျော့နေတဲ့အတွေးပူဖောင်းရုံ။
ကျွန်ုပ်တို့ reboot လုပ်သည့်အခါ PMO မပါပဲသွားသောအခါအမျိုးသမီးများသည်မည်မျှဆွဲဆောင်မှုရှိကြောင်းနှင့်သာမန်အားဖြင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုကဲ့သို့ပြောခြင်းကိုဆွဲဆောင်ရန်ဂျာနယ်များတွင်အချိန်များစွာကုန်ကြသည်။ မိန်းမတစ်ယောက်ကိုဆွဲဆောင်မှုဖြစ်စေတဲ့တခြားအရည်အသွေးတွေကိုအခြားတစ်ယောက်ကသတိမပြုမိလားဆိုတာငါပဲလား။
ငါအိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲကိုကြည့်နေတုန်းအမျိုးသမီးအားကစားကိုကြည့်တဲ့အခါထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်။ ငါမထိုက်မတန်နှင့်ပူအလောင်းတွေမှာ ogled ။ တစ်ချိန်ကငါအားကစားသမားအမျိုးသမီးတွေဟာသူတို့ဆွဲဆောင်မှုကြောင့်သာမကသူတို့ရဲ့အားကစားမှာလည်းကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတခါမှမစဉ်းစားမိခဲ့ဘူး။ သငျသညျဥပမာတစ်ခုအဖြစ်တင်းနစ်ယူလျှင်။ တိုတောင်းသောစကတ်များနှင့်ခြေထောက်များသည်ကောင်းမွန်ပြီးအရာအားလုံးပါ။ သို့သော်သူတို့၏ပြိုင်ဘက်အစေခံရန်စောင့်ဆိုင်းနေချိန်တွင်၎င်းတို့သည်အာရုံစူးစိုက်ကြည့်သည့်အခါ၎င်းတို့မည်မျှ sexy ဖြစ်ကြောင်းသတိမပြုမိခဲ့ပါ။
ထိုအခါငါသည်လည်းထိုအမှုပို။ ပို။ ကိစ္စတွင်ပို။ ပို။ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါနောက်တစ်နေ့ပူပြင်း။ ဆွဲဆောင်မှုရှိသောသက်ကြီးရွယ်အိုအမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုတွေ့ပြီး“ Cougar” သို့မဟုတ်“ milf” ကိုစတွေးခဲ့သည်။ ပြီးတော့သူမလက်ကိုကိုင်ပြီးသုံးနှစ်အရွယ်သားလေးကိုပြုံးနေသည်ကိုငါတွေ့ခဲ့သည်။ တစ်နည်းပြောရရင်သူမဟာ MILF ထဲမှာရှိတာဖြစ်လို့သူမရဲ့နွေးထွေးမှုကဇယားကွက်ကနေထွက်သွားတာပါပဲ။ ငါကချစ်စရာကောင်းတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတစ်ယောက်ကိုနောက်တစ်နေ့ကျရင်မီးရထားဘူတာရုံကိုလမ်းလျှောက်သွားပြီးသူမကဘောဂဗေဒအထူစာအုပ်တစ်အုပ်ကိုင်ဆောင်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်။
ပူပြင်းတဲ့မြည်းတစ်ချောင်းဒါမှမဟုတ်ကြမ်းတမ်းတဲ့ထိန်သိမ်းခြင်းဆိုတာငါ့အာရုံကိုဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးလို့မပြောခြင်း ဒါပေမင့်ဒါဟာ porn ကိုကြည့်ရှုခြင်း၏ရလဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်မြင်ကွင်းထဲဝင်လာသည်ကိုသင်မြင်ပြီးသူမကြိုက်သည့်အရာ၊ သူမ၏စိတ်ဝင်စားမှုများမှာကြောင်၏မြည်းမမပေးချေ။ သင်သိသမျှမှာသူမ၌ကောင်းမွန်သော (ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းကိုထည့်သွင်းခြင်း) နှင့်သူမသံရိုက်ခံရခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ပြီးတော့ဒီအတွေးအခေါ်ကမင်းဘဝကိုအမျိုးသမီးတွေဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာကိုသူ့ဘာသာပြောင်းလိုက်တယ်။ ထိုအခါသင်သည် rebooting သွားနှင့်ဤအတွေးအခေါ်တွေကိုစတင်ငြီးငွေ့လာတယ်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေကိုဖြတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ၊ ကျွန်တော်ဟာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများမှာတွေ့ရတဲ့အကျင့်ဆိုးများကိုအမှန်တကယ်အမျိုးသမီးများနှင့်တကယ်မလုပ်ချင်ဘူးဆိုတာတွေ့ရှိလိုက်ရသည်။ တကယ်တော့ငါကတစ်ယောက်ယောက်နဲ့စကားပြောချင်တယ်၊ သူတို့လက်ကိုဆုပ်ကိုင်ထားတယ်။ ငါဆိုလိုတာကငါအရမ်းတင်ချင်တာပါ၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကငါ့စိတ်ထဲမှာတော့သိပ်ပြီးအာရုံစိုက်စရာမကောင်းတော့ဘူး။
မင်းဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုတာငါသိတယ် ငါ fetish မောင်းနှင်မှုဟောင်းအမျိုးသမီးကိုကြည့်ရှုသည့်နည်းလမ်းများကိုလုံးဝလုံးဝစွန့်လွှတ်လိုက်ပြီး PMO မပါဘဲရက် ၃၀ ကျော်သာကြာသည်။ ငါကအမျိုးသမီးတွေကိုမကြည့်သေးဘူးလို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး၊ ငါဟာငါ့အိမ်ထောင်ဖက်ကိုအရမ်းကျေနပ်ရောင့်ရဲတဲ့အရင်ဝတ်ရည်တွေကြောင့်အာရုံမပျံ့လွင့်တော့ဘူးဆိုတာပဲပြောနေတာ။
သူတို့ fapping ရပ်တန့်သည့်အခါအခြားမည်သူမဆိုမိမိတို့၏အသားအရေထရှင်းလင်းရေးနှင့်ကျန်းမာသန်စွမ်းရှာဖွေနေသို့မဟုတ်မည်သည့်ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများကိုသတိထားမိပါသလဲ?
ဟုတ်တယ် - fap မရှိတာကိုငါအရင်ဆုံးသတိပြုမိလိုက်တာ။ ငါ့မျက်နှာကပြီးပြည့်စုံတယ်။ အရင်ကငါ့တင်ပါးပေါ်ကဝက်ခြံတွေလုံးဝပျောက်သွားတယ်။
နွေရာသီမှာတော့ငါ FAP-အခမဲ့ 25 ရက်ပေါင်းခဲ့, ငါ့အရေပြားကိုကျိန်းသေရဲခဲ့သည်။
ငါသည်ငါ့ 20`s အတွက်ဖြစ်ကြောင်းကိုနှင့်ဤသတိထားမိခဲ့ကြပြီးအနည်းငယ်ကလူကအပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်ခဲ့သည်။ ရုံတောက်ပတဲ့အသားအရေတစ်နည်းနည်းနဲ့။
ငါပိုပြီးထိရောက်စွာဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ပြီ၊ ငါပြောဖို့လိုတဲ့စကားလုံးတွေဟာငါ့ခေါင်းထဲဝင်လာပြီးစကားပြောရာနေရာတစ်ခုသို့ရောက်သွားပြီးငါအဲဒီမှာစဉ်းစားနေသည့်အရာအားလုံးကိုမေ့သွားသည်။ အခုတော့၊ ငါ့စာတွေဖြတ်ပြီးရပြီ https://www.yourbrainonporn.com/rebooting-porn-use-faqs/what-benefits-do-people-see-as-they-reboot/
အသက် ၂၇ - လူတစ်ယောက်ခံစားရသင့်သလိုခံစားရတယ်၊ (သွားကြောင်း stuttering)
အခုငါ (ငါအဆက်မပြတ်ရေးသားခဲ့သည်ကဲ့သို့) ငါအများကြီးထစ်ထစ်ကြောင်းကိုငါသိ၏။ မကြာခဏဆိုသလိုကိုယ့်ကိုယ်ကို tourette ရောဂါရှိတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအနာရောဂါလက္ခဏာပြခဲ့တယ်။ ငါ 11 ရက်မှာ pmo မပါသောအခါ။ ထစ်ငေါ့မှုသည် ၈၀% ကျဆင်းခဲ့သည်။ Tourette ၏ရောဂါသို့မဟုတ်ငါလုပ်နေသော dudden လှုပ်ရှားမှုများ / ဆူညံသံ 80-80% ကျဆင်းခဲ့သည်။
ဒါကကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောနေခြင်းဖြစ်သည်၊ အချို့သောလူများထံမှကျွန်ုပ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသောအတွေ့အကြုံများဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်မှားသည်ဟုမပြောပါနှင့်ကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာများအတွက် pmo ကိုအပြစ်တင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယုံကြည်စိတ်ချမှုနည်းပါးခြင်း၊ လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းစသည့်အဓိကပြproblemsနာများဖြစ်စေသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်သည် pmo အားအပြစ်တင်ပါသည်။ pmo ကိုရပ်တန့်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်လူမှုရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုသရန်လိုအပ်သည်။ ဥပမာ - လူများနှင့်စကားပြောခြင်း၊ သူငယ်ချင်းဖွဲ့ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။
ယခုစိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့် tourette ၏ရောဂါလက္ခဏာများအတွက် dopamine level မြင့်မားခြင်းကြောင့်၎င်းပုံမှန်မဟုတ်သောဖြစ်စဉ်များကိုဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့ပြီ။ ဆောင်းပါးတွင်လည်းစိတ်ကျဝေဒနာ၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်စိုးရိမ်ခြင်းကဲ့သို့သောအခြားရောဂါများကိုဖော်ပြထားသည်။ pmo နှင့် dopamine အဆင့်မြင့်အဆက်မပြတ်ဆက်နွှယ်မှုရှိမရှိယခုငါမသိရ။ ဦး နှောက်ထဲရှိ dopamine ပမာဏသည်ယောက်ျား၏ pmo ဆွေးနွေးမှုအတွင်းတွင်သာမြင့်တက်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်လိမ့်မည်။ သို့သော်အဖြေမရသေးသည့်မေးခွန်းများစွာရှိနေသေးသည်။ ငါဆောင်းပါး link ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောစွန့်ခွာလိမ့်မည်သင်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ ဆွေးနွေးမှုတစ်ခုပြုလုပ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့တစ်စုံတစ်ရာသင်ယူနိုင်သည်။ (LINK)
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အများစုဟာတကယ့်ကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်သာပြီးတစ်ခါတစ်ရံမှာစိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်တွေကိုတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရပြီးပါပြီ (တကယ်တော့ကျွန်တော်ဟာနေ့ ၃၀ tbh မှစတင်ခဲ့တာပါ)၊ ဒါပေမယ့်တခြားဘာတွေသတိထားမိလဲ။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ဟာသဟာအရင်ကလို ၁၀ ကြိမ်လောက်ရယ်စရာကောင်းတာကိုသတိပြုမိခဲ့တယ်။ ငါအနိုင်နိုင်ပြုံးပြသောအခါငါ fap-fog ၏ထုံအတွက်ထောင်ချောက်၌တည်ရှိ၏သည့်အခါနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအလွန်ခက်ခဲရယ်မော။ တကယ်ပျော်ဖို့ကောင်းတယ် (အောင်ပွဲခံ! Dopamine receptors တွေပြန်လာပြီ!) - cool ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ
အစဉ်မပြတ်ငါကလူတွေကိုသူတို့ကချမ်းတုန်တချို့သီချင်းနားထောင်ရမယ်ဆိုတာပြောပုံကိုထူးဆန်းတယ်လို့ထင်ခဲ့တဲ့။ ကောင်းပြီယခု nofap တစ်ဦးအနေဖြင့်ပြီးနောက်, ငါအရမ်းသူတို့ကိုရယူပါ။ နှင့်၎င်း၏တစ်ဦးဘုနျးကွီးသောခံစားမှု Jove က။
ဒါအားလုံး porn ရဲ့အမှားလား
PMO သည်စွမ်းအင်မြှုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းကသင့်အားမိန်းကလေး၊ အလိုအလျောက်ရခြင်း၊ အလုပ်ပိုကောင်းခြင်း၊ ငွေရှာခြင်း၊ အိမ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်း၊
ကားတစ်စီးစဉ်းစားကြည့်ပါ။ သင်ကားမောင်းရန်သင်သိ; သင်မည်သို့မောင်းရမည်ကိုလေ့လာပြီးဖြစ်သည်။ သင်သွားလိုသည့်နေရာအတိအကျကိုလည်းသင်သိသည်။ သင်သည်သင်၏ ဦး တည်ရာသို့ကားမောင်းကမ္ဘာပေါ်မှာရှိသမျှသောအလိုတော်နှင့်အတူကားထဲတွင်ရ။ မင်းသော့တွေကိုဖွင့်လိုက်တယ်၊ ပြီးတော့ကားကမစဘူး။ ကားထဲမှာဓာတ်ဆီမရှိဘူး သင်ဘယ်နှကြိမ်စက်နှိုးပြီး pedals ကိုနှိပ်သည်ဖြစ်စေကားမရွေ့ပါ။
PMO သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်လောင်စာကိုညှစ်ပေးသည်။ သင်၏ဘဝကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ရန်သင်ဘာလုပ်ရမည်ကိုအတိအကျသိပေလိမ့်မည်၊ သို့သော်သင်စွမ်းအင်ကိုစုဆောင်းပြီးယင်းကိုလုပ်ဆောင်ရန်အာရုံစိုက်ပုံမရပါ။
ငါ့ကိုကြည့်။ ငါထွက်ချင်တယ် ငါအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြောင်းလဲမှုချင်တယ်။ ငါဂစ်တာနှင့်စန္ဒရားကိုကျွမ်းကျင်စွာပြောချင်တယ်။ ကျွန်ုပ်၏စင်ပေါ်တွင်စာအုပ်များစွာစုဆောင်းထားပါသည်။ ၁၀% ခန့်သည်ကျွန်ုပ်အမှန်တကယ်ပြီးမြောက်ရန်စိတ်ရှည်ခြင်းသို့မဟုတ်စာဖတ်ခြင်းကိုမှတ်မိနိုင်စွမ်းရှိသည်။ PMO သည်ကျွန်ုပ်၏အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုပယ်ရှားပစ်လိုက်ပြီး၊ ဤအရာများသည်ပြုလုပ်ရန်ကြိုးစားရကျိုးနပ်သည်မဟုတ်ဟုကျွန်ုပ်အားလှည့်ဖြားသည်။
ဒီပစ္စည်းတွေကိုဘယ်နှစ်ခါသွားရမလဲမသိဘူး။ YBOP ပေါ်မှာအားလုံးပဲ။ သင်၏ pre-front cortex သည်သင့်ဘဝကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်နှင့်တိုးတက်ရန်သင့်အားပြောရန်သင့်လျော်သောယုတ္တိရှိသည်။ သင်၏ limbic system သည်မမျှတမှု၊ လွယ်ကူစွာရွေးချယ်နိုင်ခြင်းကိုမလိုမုန်းထားခြင်း၊ PMO သည်ပုံမှန်အားဖြင့်အနိုင်ရသည့် limbic စနစ်၏မျက်နှာသာအတွက်ချိန်ခွင်ကိုအကြံပေးသည်။ သင်၏မြင့်မားသောယုတ္တိဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်ကသင့်အားပြောနေသည့်အရာအားလုံးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်သင့်စွမ်းရည်ရှိသော်လည်း PMO သည်သင့်အားမြင်းမှားကိုအကြိမ်ကြိမ် ပြန်၍ ကူညီပေးသည်။
ပြန်ဖွင့်လိုက်ရင်သင့်ကားကဓာတ်ဆီနဲ့ပြည့်နေတယ်။ ပြီးပြီဆိုရင်တော့သော့တွေကိုဖွင့်ပြီးသွားလိုက်ပါ။ သင်ကားမောင်းနေတုန်းပင်၊ သင်မည်သည့်နေရာသို့သွားရမည်ကိုသင်သတိရရ ဦး မည်၊ သို့သော်ယခုဖြစ်နိုင်သည်။ လုပ်လို့ရပါတယ်
`Motivation is bullshit concept နှင့် ပတ်သတ်၍` ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်လုပ် concept ဟူသောအယူအဆနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောစိတ်ကူးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လှုံ့ဆော်မှုမခွဲခြားဘဲဘာပဲလုပ်လုပ်တစ်ခုခုလုပ်လို့မရဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လုပ်ရပ်အားလုံးဟာရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့လွှမ်းမိုးထားလို့ပဲ။ သငျသညျအစဉျအမွဲလုပ်ခဲ့တယ်နှင့်အစဉ်အဆက်ပြုလိမ့်မည်အလွန်သေးငယ်သောအရေးယူဘို့အကြောင်းပြချက်ရှိပါသည်။ သင့် ဦး နှောက်ကသင့်ကိုဒီဆင်ခြင်မှုကိုကျွေးမွေးပြီးခန္ဓာကိုယ်ကတုန့်ပြန်ပါတယ်။
ဒီနေ့လေ့ကျင့်ဖို့လှုံ့ဆော်မှုရှိသည်မဟုတ်လော လှုံ့ဆျောမှု fuck ဆိုတဲ့! ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ပါ ဒါမြင်ကွင်းမှန်လား။ ကောင်းပြီ၊ သင်သည်သင်၏လက်ရှိစိတ်ခံစားမှုအခြေအနေနှင့်ဆန့်ကျင်သောသတိရှိရှိလုပ်ဆောင်ပါကဤလှုပ်ရှားမှုလမ်းကြောင်းကိုနောက်ကွယ်မှလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုရှိရမည်။ သို့မဟုတ်လျှင်သင်မပြုလုပ်ပေ။ သင့်မှာမထိုက်မတန်နေထိုင်ရန်လှုံ့ဆော်မှုရှိနေဆဲဖြစ်သည် အလိုရှိ ကြည့်ကောင်းအောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မင်းကမိန်းကလေးတွေကိုမင်းနောက်ထင်းထိန်စေချင်တယ်။ ခြားနားချက်ကတော့သင်မလုပ်ပါဘူး ခံစား ကကြိုးစားအားထုတ်မှုကျိုးနပ်သည်လိုပဲ။ ဒါကြောင့်သင်ကလှုံ့ဆော်မှုကိုရှုတ်ချဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး၊ သင်ကနှစ်သိမ့်မှုစောင်ကိုအမြဲတမ်းရှာဖွေနေစေမယ့်သင့်ရဲ့စာနာစိတ်ရှိတဲ့စိတ်အခြေအနေကိုထပ်ပြီးပြောဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။
နာကျင်မှုနှင့်မသက်မသာဖြစ်မှုကိုဇီဝကမ္မဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းအဖြစ်ကုသခြင်းသီအိုရီသည်အမှန်တကယ်တိုးတက်မှုကိုရိတ်သိမ်းသည်ထက်ပိုမိုနီးကပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ အဲဒါကစူးစမ်းဖို့ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုလုပ်ရပ်များကိုလုပ်ဆောင်ရန်လှုံ့ဆော်မှုလိုအပ်ကြောင်းနှင့်သင်၏စိတ်ခံစားမှုကိုသင်၏လက်ရှိစိတ်ခံစားမှုများကိုကျော်လွှားရန်အတွက်၎င်းကိုအသုံးပြုရန်သတိရပါ။
အချို့သောလက္ခဏာများရှိနေသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်ထူးခြားသောအမှုများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထဲကအချို့သည်အပြည့်အ ၀ လည်ပတ်နေသောလူသားများဖြစ်သည့်လွတ်လပ်မှု၊ အလုပ်ကောင်းတစ်ခုနှင့်မိတ်ဖက်တစ် ဦး ပင်ဖြစ်ပေမည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်ကိစ္စတွင် PMO သည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်၊ လူမှုရေးနှင့်မိသားစုဘ ၀ များခံစားခဲ့ရသည့်အထိအတိုင်းအဆအထိစနစ်ကိုမျက်နှာသာပေးသည့်အတွက် ဦး နှောက်ကိုမျှတအောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည် အကြီးအကျယ် အကျိုးဆက်အဖြစ်။ ငါ (ရည်မှန်းချက် / လှုံ့ဆော်မှု) တစ်လျှောက်လုံးတစ်လျှောက်လုံးဓာတ်ငွေ့ကိုခြေချခဲ့ပေမဲ့ငါ့မှာဓာတ်ဆီ (စွမ်းအင် / စည်းကမ်း) မရှိဘူး။ (အပြည့်အဝနှင့်အောင်မြင်စွာ) Rebooting ငါ့ကို refuel ကိုကူညီလိမ့်မည်။ ထိုအခါငါကငါ့ ဦး တည်ရာကိုလမ်းတစ်လျှောက်လုံးမောင်းနိုင်ပါတယ်။
(နေ့ ၉၀၊ အသက် ၁၇ နှစ်) ကျွန်ုပ်သည်မျက်လုံးမှိတ်ခဲ့ဖူးပြီးပြီ၊ ဝက်ခြံလည်းပိုကောင်းတယ်
NoFap ကိုပထမဆုံးအကြိမ် ၁ ပတ် ၁ ပတ်ကြာမှကျွန်တော်သတိပြုမိသည်။ နောက်တစ်နေ့ကျောင်းမှာစာမေးပွဲကျပြီးကျွန်တော်ဟာအဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးဆိုတာသိတယ်။ အများအားဖြင့်ငါရူးသွားလိမ့်မယ်; ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမုန်းပါ၊
ဒီတစ်ခါတော့ငါလေ့လာတော့မယ်။ ငါကြိုးစားလေ့လာပြီးအတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားမယ်။ ဒါပေမယ့်သိပ်မကောင်းဘူးဆိုရင်တော့ဒါကောင်းပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အဆုံး၌ဤစမ်းသပ်မှုသည်အရေးမကြီးပါ။
ငါ့ဘဝမှာဒီလိုမျိုးတွေးလိမ့်မယ်လို့တစ်ခါမှမတွေးခဲ့ဖူးဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါအခုရှိနေတာအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စကိုအလေးအနက်ထားစရာမလိုတော့ဘူး၊ သာယာတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာနေထိုင်ပြီးနေထိုင်နိုင်ပါစေ။
PMO နုတ်ထွက်ပြီးနောက်ပိုပြီးစာနာဖြစ်လာ ... ?
ကျွန်ုပ်၏နောက်ဆုံး PMO အချိန်ကတည်းကကျွန်တော့်ဘဝတိုးတက်ခဲ့သည့်အရာများအနက်အခြားသူများအပေါ်ကျွန်ုပ်၏စာနာမှုမှာမမျှော်လင့်ဘဲတိုးများလာခဲ့သည်။ ယေဘုယျစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအရကျွန်ုပ်သည်အခြားသူများကိုဂရုစိုက်သော်လည်းအခြားသူများ၏ခံစားချက်ကိုနားလည်ရန်သို့မဟုတ်မျှဝေရန်ကျွန်ုပ်တို့၌စာနာမှု၊ တစ်စုံတစ်ယောက်မှမကောင်းသောအရာတစ်ခုခုဖြစ်ပျက်သောအခါ၎င်းတို့သည်၎င်းတို့အားမကောင်းကြောင်းခံစားမိနိုင်သည်ကိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာလက်ခံနိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမခံစားရပါ။
လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ် (PMOing မပါရှိပါက) ကျွန်ုပ်သည်အခြားလူမျိုးများ၏ရုန်းကန်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်သည် ပို၍ သိမ်မွေ့ပြီးအမှန်တကယ်ကျွန်ုပ်တို့၌တစ်ခါမျှမရှိဖူးသောနည်းဖြင့်“ သူတို့နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့ရသည်” ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အခြားသူတွေနဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းဝမ်းနည်းကြေကွဲမိတယ်။ ပြီးတော့ငါစိုးရိမ်မိတာကိုအရင်ကတစ်ခါမှမကြုံဖူးတဲ့နည်းတွေနဲ့တောင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါက PMOing နဲ့မပတ်သက်ဘူးလားမသိဘူး၊ ဖြစ်နိုင်ခြေကိုစဉ်းစားပါ။ အခြားသူတစ် ဦး ဦး သည်ဤကဲ့သို့သောအရာမျိုးကြုံခဲ့ဖူးပါသလား။
ကျွန်ုပ်၏လိင်တံသည်အချိန်တိုင်းမည်မျှပိုထူပြီးပြည့်စုံသည်ကိုငါချစ်မြတ်နိုးသည်။ ငါ Streak မှာရှိနေတုန်းအမျိုးသမီးတွေကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်နေတာကိုလည်းငါဖမ်းလိုက်တယ်၊ သူတို့ထဲကတချို့ဟာ DELIBERATELY တောင်လုပ်ကြတယ်။ ဟာသမဟုတ်ဘူး။ ယောက်ျားလေးများကိုဘယ်တော့မှမဖမ်းပါနှင့်၊ သင် ၂၁ နှစ်သာရှိသည်။ ကမ္ဘာကြီးကိုချီတက်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည့်အပြည့်အဝဆုိုတာကိုနှိုးခြင်းသည်အကောင်းဆုံးခံစားချက်ဖြစ်သည်။
ကိုယ့် nofap စတင်အစဉ်အဆက်ကတည်းကဂီတကိုကြောက်မက်ဘွယ်အသံ
nofap အတွက်အကောင်းဆုံးအကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာဂီတဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဂီတကကျွန်တော့်ကို pushups ၁၀၀၊ ထိုင် ၁၀၀ နဲ့ကီထိုင် ၁၀၀ လုပ်စေတယ်။ တခါတရံတေးဂီတသည်စိတ်ဓာတ်ကျပြီးပျင်းစရာကောင်းသည်။ အခုတော့ငါအရမ်းချိတ်ဆက်ခံစားရရုံကအရမ်းကြောက်မက်ဘွယ်အသံ! ငါကခုန်သလိုခံစားရတယ် အားလုံးဂီတ! သင့်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးတာကောင်းတယ်။
ငါအသည်းအသန်ညစ်ညမ်းလာပြီးကတည်းကငါ OCD လက္ခဏာသေးသေးလေးအချို့ရှိတယ်ဆိုတာအမြဲသတိထားမိခဲ့တယ် ဒါဟာဘာမှမဆိုးပေမယ့်ကျွန်တော့်အခန်းပတ် ၀ န်းကျင်မှာပုံမှန်အနေအထားမရှိခဲ့ရင်ကျွန်တော့်အလုပ်အပေါ်အာရုံစိုက်ဖို့ခဲယဉ်းပါတယ်။ အခုသူတို့ပျောက်ကွယ်သွားပြီလိုပဲ။ ကျွန်ုပ်သည်ယေဘုယျအားဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်၏ ဦး စားပေးစာရင်းတွင်များစွာနိမ့်သည်။ ကျွန်တော့် shit ကိုမစည်းရုံးခင်မှာအရေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုငါဖယ်ထုတ်ပစ်မယ်။ အခြားဘယ်သူ့ကိုမှဒီသတိထားမိ
တတိယနေ့ - သူတို့အားလုံးသည်လှပသည်
9am: ဒါဟာ 50 ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါပြီးသား4အမျိုးသမီးတွေမြင်ဘူးထိုသူအပေါင်းတို့သည်3ဆပိုမိုလှပသော2ရက်အကြာကထက်ဖြစ်ကြသည်။
NoFap အမျိုးသမီးတွေပိုပြီးလှပစေသည်, ဒါပေမယ့်။ ။ ။
... တစ်အများကြီးနက်ရှိုင်းအဓိပ္ပာယ်ကိုအတွက်လှပသော။ ငါကပိုရှင်းပါတယ်အမျိုးသမီးများဖြစ်ကြသည်။ သင်ကသင်နှင့်လိင်ဆက်ဆံလိုသည့်အရာထက် ပို၍ စဉ်းစားပါကသူတို့သည် ပို၍ လှပသည်။ သူတို့၏မျက်နှာများနှင့်နှုတ်ဖြင့်မဟုတ်သောနည်းလမ်းများစွာဖြင့်သင့်အားသူတို့နှင့်ဆက်သွယ်ရန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောနည်းလမ်းများကိုကြည့်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏အာရုံအားလုံးကိုအမျိုးသမီးများကမီးထွန်းပေးသည်။ သူတို့သည်ကျွန်ုပ်၏ရှက်ရွံ့။ စိုးရိမ်ပူပန်သောဘဝ၌ကျွန်ုပ်မပြည့်စုံသောဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်သည်။ Porn သည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးလှပသောမိန်းမများမည်မျှရှိသည်ကိုများစွာ ပို၍ မှားသည်။
လှပသောအမျိုးသမီးများကိုကြည့်ပါ၊ သူတို့နှင့်စကားပြောပါ၊ ရယ်မောပါ၊ သူတို့ဘယ်သူလဲဆိုတာနားလည်ပါ။ သူတို့သည်မည်မျှလှပကြောင်းသင်သိသောအခါသင်မပါဘဲမနေထိုင်နိုင်သူကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ သင်၌တစ်ယောက်ရှိလျှင်၊ သူ့ကိုလက်ထပ်ပါစေ။ သငျသညျသူမ၏နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဘယ်လောက်သူမ၏ပြောပြပါ။
ငါ၌ငါ့တ ဦး တည်း ရှိ၍၊ ချစ်စရာကောင်းသောသမီးသုံးယောက်တို့ကိုငါတို့အဘို့ငါပြုစု၏။ ဒီနေ့ခေတ်အမျိုးသမီးတွေဟာငါအတွက်တော့ပိုပြီးလှပလာကြတာပါပဲ၊ သူကကျွန်တော့်ဘဝကိုနည်းအမျိုးမျိုးနဲ့မီးထွန်းလိုက်တယ်၊ ပြီးတော့သူ့ကိုအိမ်ပြန်ရောက်ဖို့ကျွန်မမစောင့်နိုင်ဘူး။ Porn သည်စိတ်ပျက်စရာကောင်းသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဇနီးကကျွန်ုပ်၏ဆန္ဒများကိုအဆင့်များသို့ဆက်လက်တိုးချဲ့နေစဉ်ကျွန်ုပ်လွန်ခဲ့သောတစ်လကကျွန်ုပ်မသိခဲ့ပါ။ လိင်သာမကဘဲအခြားစကားများဖြင့်လည်းလိုချင်သည်။
ရှေ့ဆက်သူငယ်ချင်းတွေရွေ့လျားသိမ်းဆည်းထားပါ, အသက်ရှင်ခြင်းကိုငါပဲဒီကနေပိုပြီးလှပရရှိသွားတဲ့ထင်ပါတယ်။ ဒါဟာငါ့အဘို့ရှိပါတယ်။ သင့်ရဲ့ထောက်ခံမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ဒီမှာယောက်ျားလေး 30 yo ။ ငါလွန်ခဲ့သောတစ်လကျော်အနည်းငယ်ကြည့် porn ကိုရပ်တန့်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ကြီးမားသောကျွမ်းကျင်မှုများကြောင့် dopamine လျော့နည်းခြင်း၏ဆိုးကျိုးများနှင့်၎င်းသည်ပျော်ရွှင်မှုကိုမည်သို့လျော့နည်းစေသည်ကိုမတူညီသောရင်းမြစ်အနည်းငယ်မှကျွန်ုပ်ဖတ်ခဲ့သည်။ ရိုးရှင်းတဲ့အရာတွေပိုကောင်းလာတယ်လို့တကယ်မှန်တယ်။ ငါအစာစားပြီးသည်နှင့်အမြင့်ဆုံးမျိုးကိုအလေးအနက်ထားသည်။ http://www.reddit.com/r/NoFap/comments/2r467p/even_eating_is_better/
nbsp; TRSV ဖြင့်ပြုလုပ်သည်
Disclaimer: ဤသင်ဒီစိန်ခေါ်မှုခံယူသည့်အခါခံစားရမည်မဟုတ်ပါ၏အံ့သောငှါ, အချိန်တစ်အချို့သောကာလအတွက် pmo နုတ်ထွက်ကြသူလူများထံမှအစီရင်ခံစာများတွင်တွေ့ရှိခဲ့သောအပြောင်းအလဲတစ်ခုစုစည်းဖြစ်ပါသည်။ ဤရွေ့ကားလည်းအဓိကအားဖြင့်အပြုသဘောအပြောင်းအလဲများကိုဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကသို့သော်လူအများစုသင်အများဆုံးဖွယ်ရှိဒီစိန်ခေါ်မှုလျှက်ကနေမျှော်လင့်ထားနိုင်သည်ကိုမြင်သောယေဘုယျအပြောင်းအလဲများဖြစ်ကြသည်။
Disclaimer: r / nofap နှစ်ဦးစလုံးယောက်ျားမိန်းမတို့နှင့်အဖြောင့် / လိင်တူချစ်သူ / bi ဖို့ညွှန်ကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်ပေမယ့်အဲဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြောင့်ယောက်ျားကိုခံယူသောသူတို့ကိုအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်။ လည်းသင့်အားလျှောက်ထားကြဘူးအချို့အမှုအရာ (ကျောင်းဥပမာတိုးတက်လာသောအဆင့်) ဖြစ်ပေမယ့်သူတို့အအခြားသူတွေအနေနဲ့ညီမျှ (အလုပ်မှာဥပမာတိုးတက်လာသောကုန်ထုတ်စွမ်းအား) ရှိနိုင်သည်။
ငါဖြစ်နိုင်သည်တနေ့ nofap အကြောင်းကိုတစ်အက်ဆေးရေးသားဖို့ဒီကိုသုံးပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မ (နှင့် wow သွားစောင့်ရှောက်ဖို့အခုလှုံ့ဆော်ဖြစ်၏) ဤအရာအလုံးစုံအကျိုးခံစားခွင့်များကိုယ့်ကိုယ်ကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်အများအားဖြင့်ဒီ list ပြုစုခြင်းနှင့်ပါပြီ။ ငါသို့သော်သင်တို့ကိုလည်းယောက်ျားတွေနှင့်အတူဤဝေမျှချင်တယ်။
ဘဝအပေါ်ရှုထောင့် - အစဉ်အမြဲရှင်သန်နေပိုခံစား
တိုးမြှင့်ပျော်ရွှင်မှုကို / မာနထောင်လွှား / ဝမ်းမြောက်သောစိတ် / ယုံကြည်မှု / တည်ငြိမ်ခြင်း
ပျော်ရွှင်မှုရိုးရှင်းတဲ့အမှုအရာ (ကလမ်းလျှောက်နေတဲ့ကောင်းတဲ့မုန့်ညက်, ဂီတ) တွင်တွေ့ရှိရခြင်းဖြစ်သည်
မေတ္တာရှင် / ကိုယ့်ကိုကိုယ်လက်ခံ
ကိုယ့်ကိုယ်ကို / ထင်မြင်ချက်ဖျော / ဆင်းရန်ကူးမယ့်ရပ်တည်ချက်ယူပြီး
တိုးမြှင့်မြော်လင့်ခြင်း, ပိုကောင်းတဲ့အနာဂတ်အမြဲနေပါစေအမှုအရာအရဘယ်လိုခက်ခဲ, ရယူနိုင်သောပုံရသည်
လူမှုရေးအရအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများ - ALFHA MALE ဖြစ်လာသည်
တရားဆုံးဖြတ်တော်မူလျော့နည်းလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှု / ကွောကျရှံ့ခွငျး
တိုးမြှင့်စကားပြောဆိုမှုကျွမ်းကျင်မှု / ပြုံးမျက်လုံးချင်း /
တိုးမြှင့်ဝေါဟာရ / စကားများပိုမိုလွယ်ကူစွာသင်တို့ဆီသို့လာ
အခြားလူ (နှင့်သူတို့၏စိတ်ခံစားမှု) နဲ့ထိတွေ့ပိုမိုခံစားရ
မိန်းမနှင့် interactive ပိုပြီးအာရုံစိုက်
ယင်းအမြင်အာရုံထက်အပြန်အလှန် / ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့ပိုမိုအာရုံစူးစိုက်မှု
အမျိုးသမီးများနှင့်တွေ့ဆုံရန် / စကားပြောရန်ပိုမိုလှုံ့ဆော်မှုများ (လိပ်ပြာများပျောက်ကွယ်သွားမည်မဟုတ်သော်လည်းသင့်လိင်ဆန္ဒကသူတို့ကိုကျော်လွှားရန်တန်ပြန်အင်အားတစ်ခုပေးလိမ့်မည်)
လူသိများသော်လည်းမသိသောအမျိုးသမီးများ၏အာရုံကိုပိုမိုဆွဲဆောင်နိုင်သည့်သံလိုက် "Sexual aura" ကိုဖန်တီးခြင်း
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ - ရှင်းရှင်းလင်းလင်းစဉ်းစားပါ, လှုပ်ရှားမှုများကိုယူ။ အကောင်းကြည့်ရှုပါ
စွမ်းအင်နှင့်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးမြှင့်ခြင်း (ဥပမာ - စာဖတ်ခြင်း၊ ရေးသားခြင်း၊ ပုံဆွဲခြင်း၊ ထွက်ခြင်းများပြုလုပ်ခြင်း…)
(+ ရှင်းလင်းအရေပြား, လျော့နည်းဝက်ခြံထွက်အလုပ်လုပ်ခြင်းဖြင့် IE) သည် သာ. ကောင်း၏ကိုယ်ဟန်အနေအထား / အသွင်အပြင်
တိုးမြှင့်အားကစားစွမ်းဆောင်ရည် (သက်လုံ, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိ
နက်ရှိုင်း / ပိုပြီးသူရဲစကားသံကို
ဦးနှောက်မြူ၏စိတ်ထဲတွင် / အရှုံးများတိုးမြှင့်ရှင်းလင်းပြတ်သား
တိုးမြှင့်အာရုံစူးစိုက်မှု / အာရုံ (ဆိုလိုသည်မှာပိုကောင်းအဆင့်)
PMO ကိုတိုက်တွန်းလိုသည်မှာလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားခြင်းမဟုတ်ပါ။ သင်သည်သင်၏စွမ်းအင်ကိုအခြားအရာများ၌ပြုလုပ်သည်
လူအများစုဟာ (လိင်စိတ်လျော့ကျ) ဒီစိန်ခေါ်မှုကာလအတွင်းအချို့သော (သို့မဟုတ်ထို့ထက် ပို. ) အမှတ် (s) ကိုတစ်ဦး flatline ခံယူ
သငျသညျ relapse ပြုလျှင်သင်သည်လမ်းကိုပိုငျသညျနှိုးဆွသောငျတှေ့ဖို့အသုံးပြု porn အတွက်အစွန်းရောက်များက sickened ခံရဖို့များပါတယ်
စိတ်ကူးယဉ် / ဗွီဒီယိုဟောင်းများသည်သင်၏ခေါင်းပေါ်တွင်ရှိနေဆဲဖြစ်သော်လည်းယခုဖယ်ရှားပစ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်
ပိုများသောစိုစွတ်သော / ညစ်ညမ်း / တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအိပ်မက်
(မှတ်ချက် - အကယ်၍ nofap အတွက်မဟုတ်လျှင်၊ ဤစာရင်းပြုစုရန်နှင့်၎င်းကို reddit တွင်ထည့်ရန်မည်သည့်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကိုမျှကျွန်တော်မပြုလုပ်ခဲ့ပါ။ )
TL; DR: nofap သင်၏အသက်တာကိုပြောင်းလဲ
မည်သူမဆိုစိတ်ဝင်စားလျှင်မှတ်စုတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ PMO / MO စွဲလမ်းမှုကိုရပ်တန့်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏အရက်သောက်ခြင်းနှင့်ပေါင်းပင်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကိုထိန်းချုပ်ရန်နောက်ဆက်တွဲကြိုးပမ်းမှုများအပေါ်များစွာအကျိုးသက်ရောက်ခဲ့သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ငါဟာအမြဲတမ်းအရက်အလွန်အကျွံသောက်ပြီးအရက်အလွန်သောက်ခဲ့ဖူးပြီးလွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်လောက်ကသောက်ခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒါဟာစစ်ပွဲတစ်ခု၊ နောက်ဆုံးတော့ငါထပ်သောက်ပြီးနောက်ဆက်တွဲမသောက်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုကအမြဲတမ်းမအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။ ငါယေဘုယျအားဖြင့်တစ်စုံတစ်ရာသောသောက်စရာ / မီးခိုးမပါဘဲမသွားနိုင်ခဲ့
ငါကြိုးစားလျှင်ငါရိုးရိုးသားသားမတရားသောကြောင့်နည်းနည်းထွက်မှမထင်မှတ်ခြင်းနှင့်ငါ့ပြင်ဆင်ချက်ရဖို့အရက်များစတိုးဆိုင်သို့မဟုတ်ဘားမှာအဆုံးသတ်။ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုသည်ပေါင်းပင်များထက်ပိုမိုပြင်းထန်သည်။ အောက်တိုဘာလမှာ PMO / MO ကိုကျွန်တော်ရပ်လိုက်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့အပတ်အနည်းငယ်ကစပြီးကျွန်မရဲ့အသည်းအသန်မေ့သွားတာသတိထားမိလာတယ်။ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကငါသွားခဲ့သည် တနင်္ဂနွေ-ကြာသပတေးနေ့ မဆိုသောက်သုံးခြင်းမရှိဘဲ, ငါ့အဘို့အကြီးမားတဲ့အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်သည့်မတရားသောဆန့်ကျင်နေတဲ့ရုန်းကန်, မလိုဘဲ။
ငါ PMO ဘဝသည်ကျွန်ုပ်၏ dopamine ကိုအလွန်တက်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းကျွန်ုပ်ခံစားခဲ့ရသည့်တုန်လှုပ်ချောက်ချားမှုကြောင့်ဖြစ်ရသည့်အကြောင်းရင်းများနှင့် booze အသုံးပြုခြင်းကသူတို့ကို 'ချောချောမွေ့မွေ့' ရန်ဖြစ်သည်။ PMO ကိုဖယ်ရှားပါ။ အပေါ် / အောက်များပျောက်သွားပြီး၊ ငါအရက်သောက်ပျော်မွေ့နေတုန်း (ကျွန်ုပ်သိလွန်းသည်) အနည်းဆုံးပစ္စုပ္ပန်အချိန်တွင်သောက်ရန်အလွန်လိုအပ်ကြောင်းမခံစားရတော့ပါ။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်သည်သောက်ခြင်းမရှိဘဲအိပ်နိုင်ပြီး၎င်းသည်အလွန်သက်သာစေသည်။ အရင်ကငါမသောက်ခဲ့ရင်ငါအိပ်လို့မရဘူး၊ အဲဒါကအလုပ်မှာပြtoနာဖြစ်စေနိုင်တယ်၊ ဒါကြောင့်ငါအိပ်နိုင်အောင်အမြဲသောက်ခဲ့တယ်။
ငါဟာပိုမိုအားကောင်းလာပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုပိုရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်။ ငါပြောနေတာကနှေးနှေး၊ အတိတ်ကာလကကျွန်ုပ်သည်မကြာခဏစကားမပြောနိုင်တော့သည့်အပြင်ယခု ပိုမို၍ ကျွန်ုပ်၏အသံသည် ပို၍ နက်ရှိုင်းသည်။ post မှ Link ကို
ငါက 30 ရာခိုင်နှုန်းကအသံပိုကောင်းကျိန်ဆိုနဲ့ကျွန်မချက်ချင်းပေါ်မှာအတွက်ဇုန်လိုပဲ။ ငါမွငျ့မားရယ်နဲ့ကျွန်မအားလုံးငါ့ကိုယ်ကိုကျော်ကြက်သီး get နဲ့တူဒါဟာခံစားရပါတယ်။ ငါရွှေလင်းတကဲ့သို့မြေပြင်ကိုချွတ်မြင့်တက်စတင်ရန်အကြောင်းကိုပေါ့တူသောနှင့်ငါ့စွမ်းအင်ငါ့ကိုအမှီ pulsing ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအပြည့်အဝသုတ်ရည် retention ကိုပဲ 2-3 ရက်သတ္တပတ်အကြာတွင်ဖြစ်ပါသည်။ THE fuck ဆိုတဲ့ဒီနည်းကိုဆိုတာဘာလဲ !?
ငါဂစ်တာတွေအများကြီးကစား, လေးလံသောသတ္တုကစားသမားအနိုင်ယူပြီးလက်ကျန်။ Metallica အားဖြင့်မှုတ်သွင်း။
သင်အများစုသည်အစဉ်မပြတ်ရိုက်နေခြင်းမဟုတ်ပါကတေးဂီတတွင်ဝှက်ထားသောမှတ်စုများ၊ သင်မကြားရသောလျှို့ဝှက် riffs များစသည်တို့ကိုသတိပြုမိသည်ကိုသတိပြုမိသည်။
ငါ့ဘဝရဲ့အဓိကအပိုင်းကဂီတပဲ။ ငါ Metallica နဲ့မတူညီတဲ့တီးဝိုင်းအမျိုးမျိုးကိုအများကြီးနားထောင်ရတာကြိုက်တယ်။ ထိုအခါငါသူတို့သီချင်းတွေအများကြီးကိုသတိပြုမိသည်။ ငါဘယ်တော့မှမကြားဖူးသော riffs တွေကိုကြားနေရတယ်၊ အဲဒါကကျွန်မဟာသုတ်ရည်ကိုမဖြုန်းတီးဘဲဖြုန်းတီးနေတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါ့ကိုတကယ်အကျိုးဖြစ်စေတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရနေတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်အောင်ငါ့ကိုပျော်ရွှင်စေတယ် ပိုကောင်းတဲ့လူသားတစ်ယောက်ပါ၊ ပြီးတော့ငါရှိတာတောင်မှကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူးတဲ့အရာတွေကိုငါ့ကိုဖမ်းခွင့်ပေးခဲ့တယ်။ ဒါဟာမှော်နဲ့တူ!
27 အထီး။ ငါလွန်ခဲ့သော3နှစ်ကလောင်းကစားစတင်ခဲ့သည်။ လောင်းကစားကငါအနိုင်ရတဲ့အခါအမြဲစိတ်ချမ်းသာစေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်ငါဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါငါ့မှာပြproblemsနာတွေပိုများလာတယ်။ ငါ PMO လုပ်မယ်၊ ငါ့ဒီ gf ကိုစိတ်မ ၀ င်စားဘူး (ဒီနှစ်အစောပိုင်းကသူမကိုဆုံးရှုံးသွားတယ်) ။ ငါစီးကရက်နှင့်လောင်းကစားဝိုင်းကိုချစ်၏ဒါငါ့အသာလူမှုရေးအပြန်အလှန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအနိုင်ရရှိငါ့ကိုအောင်ပွဲခံနှင့်လက်ခံခံစားရစေလိမ့်မယ်။ ထိုအခါမူကားငါဆုံးရှုံးထားရှိမည်။ ငါ Addit-it program ကနေကုထုံးဆရာတစ်ယောက်ရတယ်။ သူကငါ့ကိုအမြဲတမ်းလေ့ကျင့်ပေးတယ်၊ ငါကငါ့ရဲ့ပြproblemsနာတွေအကြောင်းပြောပေမဲ့သူမပြmeနာရဲ့ CORE ကိုရောက်အောင်ဘယ်တော့မှကူညီမှာမဟုတ်ဘူး။
ကျွန်ုပ်၏ ၉၀ နီးပါးအမှတ်အသားသို့လျင်မြန်စွာရှေ့သို့အလျင်အမြန်လောင်းကစား ၀ ယ်ရန်ကျွန်ုပ်အလိုမရှိပါ။ ငါကောင်းသောလူမှုရေးအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ငါသည်လွန်ခဲ့သောတနင်္ဂနွေနေ့ကကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းနှင့်မိန်းကလေး ၂ ဦး နှင့်ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာမရှိသော၊ တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အပြန်အလှန်ဆက်ဆံမှုပြုခဲ့ကြပြီးသူမကသူမ၌ BF ရှိကြောင်း LATER ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဘားမှာ $ 90 သုံးစွဲပေမယ့်ကိုယ့်ကာစီနိုလောင်းကစားရုံမှာအပတ်စဉ်ဆုံးရှုံးမယ်လို့အရာကို၎င်း၏အပိုင်းအစ။
PMO ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုနှင့် ဦး နှောက်မှေးမှိန်ခြင်းနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းတို့မှလောင်းကစားသည်ကျွန်ုပ်အား ထပ်မံ၍ dopamine အလျင်အမြန်ပေးခဲ့သည်။ PMO ကုန်သွားပြီ၊ ပိုက်ဆံဆုံးရှုံးသွားတယ်၊ ခရက်ဒစ်ကဒ်ကုမ္ပဏီတွေကငါ့ကိုခေါ်လိုက်တယ်၊ ငါသူတို့ကိုအမြဲတမ်းလိမ်ပြောရမယ်၊ ငါကရှုပ်ထွေးတယ်။ ယခုငါပျောက်ကင်းနေပါတယ် မည်သည့် rehab မှတဆင့်မသွားခဲ့ဘူး! ခဏလောင်းမကစားပါနဲ့
Nofap သင်သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပိုမိုဆွဲဆောင်မှုစေသည်။ သူကားအဘယ်သူသဘောတူ?
ive အခါတိုင်း nofap ၁ ပတ်လောက်လုပ်တိုင်းငါ့အရေပြားကတော်တော်လေးရှင်းလင်းသွားတယ်။ ပြီးတော့ကျွန်တော့်မျက်စိတွေကပိုပြီးတောက်ပနေပုံရပါတယ်။
nofap မလုပ်ခင်ကောင်းကျိုးအတော်များများဟာအစစ်အမှန်မဟုတ်သလို၊ ရလဒ်များအရအိပ်ယာမ ၀ င်ပါကသင့်ကိုအဆိုးမြင်ပြောပြပါလိမ့်မည်။
- အသံကျိန်းသေအသံနိမ့် / ပိုမိုနက်ရှိုင်း / ထူရရှိသွားတဲ့။ ငါအဲဒါကိုဂစ်တာနဲ့စမ်းသပ်ပြီး semitone ကွာခြားချက်တစ်ခုလုံးကိုငါတွေ့ခဲ့တယ်
- ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှု / စိန်ခေါ်မှုများကိုရင်ဆိုင်ရန်ကျွန်ုပ်သည် ပို၍ ဆန္ဒရှိသည်သာမကမျက်လုံးချင်းထိတွေ့ရန်ပိုမိုသဘာဝကျသောဆန္ဒရှိသည်။ ဒါကသတိတောင်မရှိဘူး၊ ဖြစ်လည်းဖြစ်သွားတယ်။ မင်းကမင်းမျက်လုံးကိုအခြားလူတစ်ယောက်မကြည့်ခင်အထိပိတ်ထားနေပုံရတယ်
- ဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်ကျိန်းသေဖြစ်ပါတယ်။ ငါကရှည်လျားသော Streak မဖြစ်ခဲ့သည့်အခါအမျိုးသမီးများသည်အာရုံစူးစိုက်မှုလုံးဝမရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ထူးဆန်းသောအမျိုးသမီးကငါ့ကိုစစ်ဆေးနေသည်ကိုအနည်းငယ်သတိထားမိပြီး (အနည်းငယ်ပူသောသူများမဟုတ်သော်လည်း…)
အတူတူငါ BS ခေါ်, ဒါပေမယ့် 27 ရက်ပေါင်းနှိပ်ထားပြီးငါ့ကိုလြှို့ဝှကျထှကျသှားအထွတ်အထိပ်ကိုပေး၏မယ်လို့
ငါတူညီသောလမ်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ကိုယ့်ကြောင့်ကြုံတွေ့သည်အထိကျွန်မကိုလည်းပိုမိုနက်ရှိုင်းသောစကားသံ BS ခဲ့သည်ထင်။
yeah ငါလည်းသတိပြုမိပါတယ်။ ငါတစုံတယောက်ကိုရက်သတ္တပတ်သံသရာပြုပါရန်အသုံးပြုသည့်အခါငါသည်ငါ့မျက်နှာကိုပိုပြီးပုံစံလုပ်ရန်နှင့်ရှာနေပုလ်ဖြစ်ခဲ့သည်ကိုသတိပြုမိလိမ့်မယ်, ပြီးတော့ငါ Jo နဲ့ကျွန်မဟောင်းတစ်ဦး 15 တစ်နှစ်တူမယ်လို့လိမ့်မယ်။
ငါထင်တာကမင်းဟာပိုပြီးဖြောင့်မတ်တဲ့ Vibe တစ်ခုနဲ့အတူဖြောင့်မတ်စွာမတ်တပ်ရပ်ပြီးသင်၏ပခုံးများကို ဦး ခေါင်းနှင့်မြင့်မားစွာကိုင်ထားပြီးစတင်ခြင်းဖြစ်သည်။ သင်၏အားကစားခန်းမပုံမှန်တိုးတက်လာသည်နှင့်သင့်တွင်ပိုမိုသန့်ရှင်းရေးကိုဂရုစိုက်ရန် ၁-၂ ရက်တစ်ကြိမ်ရေချိုးခြင်း၊ သင်၏ဆံပင်ကိုကောင်းစွာစောင့်ရှောက်ခြင်း၊ အမွှေးအကြိုင် deodorant ကိုဝတ်ဆင်ခြင်း၊ သူတို့အဝတ်မဝတ်လျှင်အဝတ်အသစ်။
မင်းကငါလိုအဝလွန်ကောင်လေးတစ်ယောက်ဆိုရင်မင်းကကိုယ်အလေးချိန်ကျနေတယ်လို့တောင်မြင်နိုင်တယ်၊ ငါဟာလွန်ခဲ့တဲ့ ၅၅ ရက်အတွင်းမှာပေါင် ၂၀ လောက်ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်။
ငါလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သတိပြုမိသည်။ ငါ ၇ ရက်ကျော်နေရင်ငါ့မျက်လုံးတွေနဲ့အသားအရေဘယ်လောက်အသက်ဝင်လာမလဲဆိုတာမယုံနိုင်စရာပါပဲ။
သငျသညျဝက်ခြံနှင့်အ nofap related ဘယ်လိုအကြောင်းပြချက်ကိုရှင်းပြနိုင်ပါသလား? ၎င်း၏လည်းငါနှင့်အတူအဖြစ်ပျက်။ ငါ FAP တစ်ရက်အပြီးဝက်ခြံရ။ သိပ္ပံနည်းကျအကြောင်းပြချက်ကဘာလဲ? သို့မဟုတ်ပါကရုံမျှသာတိုက်ဆိုင်မှုရှိသနည်း
ငါလည်းငါ့ကိုယုံကြည်တယ် nofap ဝက်ခြံရှင်းရှင်းလင်းလင်းစေသည်။ သငျသညျရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းရလဒ်တွေ့ကြုံခံစားမပြုစေခြင်းငှါအဆုံး၌ပြုပါလိမ့်မည်သင်အဆုံး၌လုပ်ပါ။ ငါအသက် ၄၇ နှစ်ပြည့်သွားတယ်။ နေ့ ၃၀ မှာတောင်ငါရှိခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့်တခါတလေကံမကောင်းတဲ့လမ်းတွေမှာ ၇ ရက်မှာငါ့မျက်နှာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့ရတယ်။ မသိဘူး။ အခု im47 ပြန်လာပြီ။ fapping ပြီးနောက်ငါဝက်ခြံတယ်။ ငါသူတို့ကိုရသေး။ ငါ့မျက်နှာပေါ်ဝက်ခြံထွက်တာကိုမုန်းတယ်။ Nofap ကိုဝက်ခြံပေါက်ဖို့အတွက်လုပ်နေတာလား။ ရန်ပွဲရကျိုးနပ်ဆဲ။
ကျိန်းသေသဘောတူသည်။ ကျွန်မအစဉ်အဆက်ရှိသည်သောအကောင်းဆုံးကြည့် nofap ကြောင့်အားလုံး
ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၄ နှစ်ရှိပါပြီ။ ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၁၆ နှစ်မှစ၍ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုစတင်ခဲ့ပါသည်။ ကြိမ်နှုန်းကွဲပြားပါသည်၊ တစ်ခါတစ်ရံတစ်နေ့လျှင် ၇ ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်ကိုဝမ်းနည်းစေသောအရာများမှထွက်ခွာသွားပါသည်။ အိပ်ရတာပိုလွယ်တယ် ငါတစ်ချိန်တည်းတွင်နာရီဝက်မျှညစ်ညမ်းခြင်း၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်တွေးတောဆင်ခြင်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်သည် (နိုးပြီးနောက် ၁၅ မိနစ်အိပ်စက်ခြင်းမပြုမီ ၁၅ မိနစ်)
မျက်စိကိုအောက်မှာ -dark စက်ဝိုင်း alot လျှော့ချပါပြီ။ မျက်စိကအများကြီးပိုပြီးအသက်ရှင်လျက်နှင့်ကျန်းမာသန်စွမ်းခံစားရတယ်, ကိုယ့်နံနက်နေရောင်မှအထိခိုက်မခံဖြစ်ဖို့အသုံးပြုပါကအများကြီးလျော့ချခဲ့ကြပုံရသည်
အိပ်စက်ခြင်း -deeper, ကိုယ့်ကိုယ်တစ်ဦးဆယ်ကျော်သက်တုန်းကကိုယ့်ဖို့အသုံးပြုအဖြစ်အိပ်ပျော်အဖြစ်ခံစားနိုးထ, abt4yrs ကတည်းကအိပ်စက်ခြင်းပြဿနာများရှိခြင်းပါပြီ။
ပိုကောင်းတဲ့ memory ကို -way ။ ကိုယ့်ကျောင်းရှိသည်ဖို့အသုံးပြုတဲ့ကြင်နာနီးပါးဓာတ်ပုံပြပွဲ
-i ကျိုးကြောင်းဆီလျော်အသိဉာဏ်ဖြစ်၏နှင့်ငါ့အားလပ်ချိန်များတွင်ပဟေဠိများနှင့်နက်နဲသောဖြေရှင်းနိုင်ပေမယ့်တစ်ချိန်ချိန်မှာ back လိုအမှုအရာလုပ်ဖို့အလိုတော်ဈနောက်တဖန်ငါ၏အဦးနှောက်စိန်ခေါ်တူခံစားရှောင်ပြီးနောက်, ယုတ်လျော့ခဲ့သည်။
တစ်ကောင်းတဲ့မုန့်ညက်ရှိခြင်းအမျိုးသားရေးပထဝီစောင့်ကြည့်, ဂီတနားထောင်ခြင်း, ဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုးတဝိုက်လမ်းလျှောက်တူသောရိုးရှင်းတဲ့အရာရာ၌ပျော်ရွှင်မှုကို -finding
- ယခုငါရရှိသောစိုက်ထူမှုများက ပို၍ တင်းကျပ်စွာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အမှန်တကယ်ပင်ခက်ခဲစွာခံစားရသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျယ်ဝန်းသည့်အရာတစ်ခုကိုချိုးဖျက်နိုင်ခဲ့သည် .. အချိန်အတော်ကြာကတည်းကထိုကဲ့သို့သောအားစိုက်ထုတ်မှုမျိုးမကြုံခဲ့ရပါ။
-more energy..this တဦးတည်းကျိန်းသေသိသာဖြစ်ပါသည်, ကိုယ့်နေ့ကိုကိုယ့်များသောအားဖြင့် ပို. ပို. ပင်ပန်းခံစားရဖို့အသုံးပြုလွန်အပေါငျးတို့သ time..as ယခုဈဈအိပ်စက်ခြင်းမရှိဘဲတဦးတည်းကိုပိုမိုနေ့ကမှတဆင့်အသက်ရှင်နိုင်ခံစားရညှစ်မခံစားရဘူး
အသားအရေအသားအရေအတွက်ပြောင်းလဲပစ် -a ။
ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ -a သက်တမ်းတိုးအလိုဆန္ဒ
ကျွန်ုပ်၏ NoFap လူနေမှုပုံစံအသစ်၏လုံးဝထူးဆန်းသည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး (သို့မဟုတ်ဘယ်သောအခါမျှပြန်သွားတော့မည်မဟုတ်ဟုငါအဘယ်ကြောင့်သိသနည်း) ။
ငါ NoFap လူနေမှုပုံစံစတဲ့ကနေဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအတော်များများခံစားပြီးပါပြီ။ ဒါပေမယ့်သူတို့အများစုကိုအလွယ်တကူရှင်းပြနိုင်တယ်။ လောင်းကစားသို့မဟုတ်အစာစားချင်စိတ်မရှိခြင်း၊ အမျိုးသမီးများအပေါ်ယုံကြည်မှုတိုးပွားလာခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ သို့သော်မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်ဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့ကြောင်းကျွန်ုပ်ကို ၁၀၀% သေချာစေသည့်အရာတစ်ခုနှင့်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည် - တဖန်ငါအိပ်မက်မက်နိုင်သည်။
ငါ့အတိတ်ကပစ္စည်းတချို့ကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ နှစ်ကအိပ်မက်မက်နိုင်ခဲ့တယ်။ လူတွေက 'အို .. အိပ်မက်ဆိုးမေ့လွန်းလို့စတာပါ' လို့ပြောကြတယ် သို့သော်ထိုသို့မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ကျွန်ုပ်သည်ရှင်းလင်းပြတ်သား။ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းလွယ်ကူစွာမှတ်မိနိုင်သည့်အိပ်မက်များမှထွက်ခွာသွားသော (အလွယ်တကူစားနိုင်သောပစ္စည်းများ၊ အလေ့အထများစသည်တို့) နှင့်ပင်အိပ်မက်မက်နိုင်ခဲ့ခြင်းမှထွက်ခွာခဲ့သည်။
ယခုမူကားငါလုပ်နိုင်တယ်။ ငါ fapping မဖြစ်လို့လား မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့်ငါ့ဘဝမှာတစ်ခုခုပြောင်းလဲသွားပြီဆိုရင်ငါအရင်တုန်းကလိုတဖြည်းဖြည်းချဉ်းကပ်လာတယ်။ ပြီးတော့သူတို့ဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရမဟုတ်ဘူး။ ငါနောက်ဆုံးအိပ်မက်မက်ခဲ့တယ်၊ အိပ်မက်မြင်ကွင်းတွေနဲ့မြို့တွေကိုဖြတ်ပြီးပျံသန်းရင်းရဟတ်ယာဉ်ရဲ့အောက်ဘက်မှာငါဆွဲထားခဲ့တယ်။ မနေ့ကငါကြည့်နေတုန်းမှာမတော်တဆဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာငါမျှော်လင့်ထားသလိုမဟုတ်တဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုခံစားရတယ်။ ငါကအနည်းငယ်ရွံရှာခြင်းနှင့်ပျင်းခံစားရတယ်။ ဆက်လုပ်ရန်သွေးဆောင်မှုမရှိပဲနှင့်ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုပိတ်ရန်ပြproblemနာမရှိပါ။
အခြား site ပေါ်တွင်ဟောင်းတစ်ဦးညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူနှင့်လက်ရှိဘလော့ဂါကနေစာရင်းတစ်ခု: အတော်လေး Porn ၏ 100 အကျိုးကျေးဇူးများ